Tokony handroso? — Trip LEE - OFISIALY SITE
Foana aho miakatra amin'ny Trayvon Martin Iny resabe iny dia hatrany am-piandohana. Toy ny maro aminareo, dia nijery ny vaovao mikasika ny, vakio ny lahatsoratra, dia niresaka momba izany amin'ny namana. Tsy manapaka ny namany ka nampahatezitra-bahoaka resaka tena ilaina ny fifanakalozan-kevitra momba ny hazakazaka any Amerika. Ny tena zava-misy ny fanavakavahana ratsy tarehy dia nanosika teo anoloan'ny ny atrehinay, ary na dia ireo izay te-mody tsy misy noterena mba hiresaka momba izany.
Nandritra ny herintaona taty aoriana, Trayvon ny mpamono olona efa nanandrana ka nahita fa tsy meloka. Midika ve izany fa tokony hifindra eo amin'ny olana? Ary nahita azy tsy manan-tsiny, ka ireo "hazakazaka olana” dia aza manao toy tena rehefa nieritreritra izy ireo, marina? Tsy azo bebe kokoa ny fahamarinana. Izaho tsy mieritreritra ny miady hevitra momba ny zava-misy, Trayvon ny toetra amam-panahy, na ny didim-pitsarana ao amin'ny toe-javatra mampalahelo ity, fa izaho no mieritreritra ny sasany tokony hanohy resaka. Ny fitsarana dia ny, fa ny resaka tsy tokony ho.
Nahoana ny Interest?
Fantatro fa maro no manontany tena hoe nahoana io fitsarana manokana no voasambotra ny sain'ny maro. Ny hafa manontany tena hoe fa maninona ny sasany dia toy izany ry namana mainty haingana ny miara-mitondra Trayvon Martin, na dia teo aza ny zava-misy fa nanana olana araka ny sitrapony ihany. Sady koa anie, tsy misy amintsika no teo ary tsy fantatsika mazava tsara ny zava-nitranga. Raha izany no marina, Izaho dia nahita ny tenako pihetseham-po ao amin'ny iray manontolo vola nanjo. Tsy afaka miteny ho an'ny rehetra, Fa Izaho kosa dia afaka milaza aminareo aho ny antony hitako mitsetra tamin'i Trayvon Martin sy ny fianakaviana.
Rehefa reko momba ny tanora tanora mainty mandeha an-trano avy amin'ny fivarotana, ary ny olona izay noheveriny izy dia mpamono olona alohan'ny mahalala na inona na inona momba azy, Afaka mitantara. Mety tsy ho afaka ny. Angamba ianao mbola tsy nisy nanaraka manodidina tao amin'ny departemanta fivarotana iray mpiambina ho tsy misy antony. manana aho. Angamba ianao mbola tsy nanana fivarotana mety mpitambokin'ny milelalela amin'ny anao hiala, mihevitra ho manana ho fa ny BlackBerry amin'ny valahana dia basy izay kasainao hitifitra azy amin'ny. manana aho.
Angamba ianao mbola tsy nitsiky ary niarahaba olona izay efa lasa eny an-dalambe, ihany no azy ireo tsy masony, ny havitsian'ny ny fananany, ary haingana miala. manana aho. Angamba ianao mbola tsy nisy nanosika an'i rindrina, natao nambanana basy, ary rojo vy ny polisy (izay tokony hiaro anao) satria "mijery toy ny olona ahiana izahay tadiavinao.” manana aho (Ary nijery aho na inona na inona toy ny ahiahiana). Rehetra ny zava-nitranga ireo dia tsy ampy taona izy ireo ary tsy misy atahorana be ny fiainako. Most, raha tsy izy rehetra, ny mainty hoditra no namana amin'ny alalan'ny toe-javatra toy izany koa. Ary tsy hita isa ny hafa efa naharitra be, tena ratsy.
Raha mbola tsy niaina izao ny zavatra, dia mety tsy hahatakatra ny antony toy izany ity raharaha ity manakoako lalina amintsika. Fa rehefa reko ny tantarany, Reko ny tantara. Ary ny raiko ny tantara. Ary ny zanako ny tantara. Tsy manana hevitra ny zava-nitranga rehefa Mr. Zimmerman nanao tombantombana momba izany tovolahy, fa raha tsy mbola ny fifamaliana, tsy nisy zavatra hafakely momba ny zava-nitranga. Mitranga isan'andro.
Profiling dia tena, ary izany matetika no ara-poko. Ny olona sasany dia mihevitra izy ireo mahita ny fanomezam-pahasoavana ny toetra amam-panahy fotsiny mijery ny olona. Toy ny fanamiana manga antitra sy ny karatra dia midika hoe fampiharana ny lalàna, mainty hoditra sy ny hoodie dia midika hoe mpandika ny lalàna. Tsy misy resaka ny zava-nitranga, sary an-tsaina fa ny rap taratasy dia ampiarahina. Toetra mahery setra no noheveriny. Izy ireo mieritreritra ny jiolahy sary hitany amin'ny fahitalavitra, na ny loza ny ray aman-dreniny momba ny nilaza tamin'izy ireo, na ny heloka bevava mahatsiravina izy ireo nanatri-maso - ary mametraka izay entana rehetra amin'ny olona izy ireo na dia mbola tsy nihaona. Isika tsy manan-jo ny olon-dratsy hanatsoaka hevitra momba ny toetrany na dia avy aza mivily ho raiki-tahotra.
Ireo karazana tombantombana dia maharikoriko sy diso. Andriamanitra nanao ny olombelona rehetra araka ny endriny amin'ny sarobidy sy mendrika. Kanefa isika rehetra dia mpanota, ary tsy haneho ny endrik'Andriamanitra rehefa tokony. Tsirairay avy amintsika dia afaka miala amin'ny fahotantsika, matoky Kristy, ary ho tsara amin'ny Mpamorona. Fa ny fanavakavahana Picks ary mifidy izay olona ireo fahamarinana ireo dia tokony ho ampiharina amin'ny. hoy fanavakavahana, "Izaho sarobidy sy tsara, ary ireo rehetra ny vahoakako no meloka.”
Izany fieboeboana fikomiana amin'Andriamanitra sy ny mpanohitra ho ny Filazantsara dia tokony ho mahaliana ny vahoakan'Andriamanitra. Tsy tokony tsy miraharaha izany, ary tsy tokony hatahotra hiresaka izany. Soa ihany fa Jesosy dia tonga mba ho faty ho an'ny fanavakavahana sy ny tsy mpanavakavaka mpanota. Afaka ny ho tonga fahavalony teo aloha namana Azy, ary mandray soa avy amin'ny iray ihany ny tena fahasoavana. Iza no dingana ny, adiresy ity olana ity, ary manambara ny fahamarinana? Na, na tsy araka ny eritreritrao no antony hazakazaka amin'ity tranga ity, tsy afaka mandà izany hazakazaka izany toe-javatra eo amin'ny fiainan'ny maro amintsika isan 'andro.
Inona no ho ataontsika izao?
Koa ahoana no tokony ho fihetsitsika? Angamba tokony hifindra eo amin'ny lafiny iray. Angamba tokony Tsy Hifamaly momba ny zavatra tsy azo antoka izahay ny. Tsy fantatsika tsirairay tsipiriany izany alina; raha tsy izany dia ho nantsoina ho vavolombelona. Ary na na tsy tiantsika ny didim-pitsarana, fa avy ny tanana.
Angamba tokony Tsy Hifamaly, ary manomboka mivavaka. Mivavaha ho an'ny fianakaviana. Mivavaha fa Andriamanitra dia hitandrina ny fampanantenana nandefasany an'ilay Zanany Lahy mba hitondra ny rariny tonga lafatra. Ny Tompo tsy mila mpisolovava mba miady hevitra ny toe-javatra, ary tsy mila porofo aseho. Manana tsy mila jurors mba hanome Azy ny fomba fijery. Hitany rehetra, mahalala ny, ary ny mpitsara amin'ny tonga lafatra ny rariny.
Fa amin'ny heviny iray hafa, isika antoka indrindra tsy tokony hifindra amin'ny. Tsy tokony hitsahatra miresaka momba ny fanavakavahana izay mbola lurks eo amin'ny tontolo misy antsika. Raha efa niaina izany, manampy ireo izay tsy niaina izany mba hahatakatra. Hanam-paharetana miaraka amin'ny namanao rehefa clumsily mikatsaka ny hahatakatra ny zavatra efa lasa amin'ny alalan'ny. Ary aoka tsy hamantatra azy tsara amin'ny alalan'ny fanatanterahana ratsy fijery. Trust Kristy, ka mangataha amin'ny Tompo no hamolavola ny toetra mba hijery bebe kokoa tahaka ny.
Raha mbola tsy nisy ny mandray faran'ny fanavakavahana, mangoraka ireo izay manana. Mianara mikasika ny zavatra niainany. Tsy afaka ny ho tia olona iray raha toa ka tsy miraharaha na hanambany ny olana. Masìna ianao, na oviana na oviana ny olona dia mihevitra fa mitaraina fotsiny ary milalao ny "karatra hazakazaka.” Hikatsaka ny hahatakatra azy ireo, ary manaja ny zava-misy fa ny sasany amintsika miaina amin'ny zava-misy isan-karazany, ary tsy maintsy miaritra fitsapana isan-karazany.
Na inona na inona ataonao, fotsiny dia tsy mitsahatra miresaka momba izany.
jonathansampson • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:09 aho • navalin'i
T.L., Miala tsiny fa efa nisy amin'ny alalan'ny zavatra sasany marokoroko, fa ity tranga manokana dia tsy taratry ny fanavakavahana any Amerika. George na dia tsy azo antoka ny Trayvon ny hazakazaka hatramin'ny taty aoriana ao amin'ny 911 antso, raha mandeha amin'ny Trayvon nanomboka ny tari-dalany. Trayvon dia noheverina ho mampiahiahy satria nandeha teo anelanelan'ny trano sy teo aoriany ny trano, niseho ho mijery ny varavarankely. Tsarovy, fiaraha-monina izany dia nanana tady ny fiatoana-ins sy mangalatra. Izany no antony Trayvon nijery niahiahy. Efa izy no nandeha teny amin'ny sisin-dalana ao an-toerana ny fahazavan'ny jiro an-dalambe-, George tsy ho batted maso.
Tsapako fa mahatahotra tovolahy iray maty; fa tsapako mainka mahatahotra rehetra izay nanaraka vokatry ny tranga ity raha aseho ho toy ny ohatra amin'ny fanavakavahana. Dimy tanora mainty hoditra any Baltimore nanao Hispanika lehilahy nambanana basy omaly dia nikapoka azy “for Trayvon.” LAPD no mamaly korontana kely satria ny didim-pitsarana ny tsy meloka tonga tao. Zavatra tsy fanavakavahana dia maharikoriko sandoka, Ary ny hanisy ratsy olona, tsy manampy azy ireo.
Inona no manahirana ahy koa dia ity no zavatra hitranga tsy ho mainty hoditra. Voatsabo aho tena mafy amin'ny ankizy ny mainty hoditra ao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa. Voafingan'ny teo bleachers, mampijaly, ary naneso. Vao volana vitsivitsy lasa izay dia nitsidika ny rehetra-ny lahy mainty fonenan'ny mpianatra oniversite teo an-tsitrapo izay ho an'ny Black Girls Code. Miezaka mandeha fotsiny ny fiarako aho nihaona tamin'ny fanevatevana sy ny fandrahonana tany amin'ny oniversite ankizilahy izay tsy mihevitra aho teny an-toeram-pianarana an'ny.
A reny vao volana vitsy lasa izay eto Georgia dia nanatona iray 17 taona ary 14 taona (indray, na mainty) amin'ny 9 ora maraina, izay nitifitra azy teo amin'ny tongony, sy ny 13 volana zazakely eo anatrehan'ny. Izany dia mety ho antony mahatonga ny olona indraindray Freak avy. Mety-tsy ny akanjo? Sao dia mba ny atodiakanga Izy kolontsaina hop izahay izay freaks ny olona avy? mety. (Sad Raha marina, fa mora azo).
Na inona na inona olana mahazo anao, Manantena aho ary mivavaka ho amin'ny vahaolana izay manampy antsika hamonjy ny fiainan'ny zaza, na inona na inona firazanany. Miala tsiny indray fa efa nisy amin'ny alalan'ny fotoana saro sasany, fa manao izany Trayvon / Zimmerman raharaha momba ny hazakazaka tsy manampy ny fahatakarantsika, izany rahona izany.
YOURSTRULY • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:10 aho • navalin'i
Hevitra tsara sy tsara nataony. Fanavakavahana dia transitioned ary ho zava-baovao manontolo “profiling” ary mitranga eo amin'ny olona izay mihevitra ny tenany ho samy hafa. Ny lehilahy ao amin'ny palitao sy ny zazavavy ao amin'ny fehin ect… profiling dia manodidina sy sarotra ny manadino, Tsy misy intsony no voafetra ho an'ny olona lokon'ny hoditra. Moa ve isika sahy miteny ny hafa masiaka kokoa ny heloka feno herisetra volon-koditra. Nahoana ity iray ity? Ny hany azontsika atao ny manantena fa tsy fanavakavahana foana ho an'i Azazela sy ny olona dia afaka manana ny ny zavatra tsy ampoizina kokoa tao amin'ny tenany sy ny manaiky ny hafa. Profiling no mampalahelo, fa na Trayvon profiled “fotsy biscuits”. Koa mamela tsy handray lafiny, fa jereo ny fijery. Ankoatra ny mahay mandanjalanja fisalasalana, tsy meloka.
Marvin Lee McManus • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:11 aho • navalin'i
Inona no manahirana ahy dia hoe tena haingana isika hino ny lainga George Zimmerman nilaza mikasika ny fomba Trayvon Martin no mijery ny varavaran 'ny trano ireo eo amin'ny fiaraha-monina ity. indray, tsy misy amintsika no tsy nahita afa-tsy Andriamanitra ny fahoriana mafy rehetra, ary tsy maintsy atao ho an'ny teo anatrehany ary Izy irery ihany no. Inona irks ahy dia ny hoe tsy maintsy mandeha foana sy miverina amin'izany ny zavatra rehetra momba izany olona mainty hoditra manao izany heloka bevava hamelezana ity firenena ity, fa tsy olona fotsy natao. Izany no tsy mamokatra mihitsy. Reko niantsoantso momba ny zo sivily mpikatroka mafàna fo mahazo anjara sy ny fanaovana izany momba ny hazakazaka, isika rehetra anjara. Manaiky aho aminareo fa ny olana dia tokony ho vaovao amin'ny haino aman-jery fa tsy sivily mafana fo na ny olon-kafa ny zo izay mahatsapa fa hazakazaka nitana anjara toerana lehibe kokoa noho ny rehefa niaiky. Hitanao, ny haino aman-jery mahazo aina tsara araka ny famoronana adihevitra tsara ny naoty. Fotoana farany avy amin'ny teny anglisy, fampahalalam-baovao lehibe tsy mba nanana ny vitsy an'isa. Izany dia ny fitiavana ny vola no fototry ny ratsy rehetra. Rehefa maha-zava-dehibe kokoa ny olona amin'ny fanaovana ny tombony izay mifanohitra amin'ny ratsy fa voaroaka any amin 'ny fiaraha-monina, misy olana lehibe amin'izany. Mirehareha aho ny milaza fa izaho dia teraka indray ny zanak 'Andriamanitra. Izay tsy mba milaza fa hanipy antony ny varavarankely. Izany hoe fa ny marina foana mandray na inona na inona ny foko. Ny jambany nilaza zavatra tsy marina hamely ity tovolahy, na inona na inona ny lasa, ary ny tsy ara-drariny characterizations ny tenany, ary na dia Rachel Jeantel, rehetra ka handeha hamantatra izany zavatra izany no hazakazaka. Tsy handratra ahy ny foko fa io namarana ny fomba fitsarana izany dia satria Trayvon Martin Toa efa namono indroa. Ny tena mampalahelo marina, misy tsy fangoraham-po, satria ny zaza, na inona na inona ny eritreritrao momba azy, very ny ainy senselessly ka tsy zava-dehibe izay ny firazanana dia. Tsy misy vola ve ny mifamaly dia hitondra Trayvon indray ary tsy misy vola ny nimenomenona no handeha hitondra faharesen-dahatra ny mpamono olona. Ny zavatra tokony atao dia tena hangoraka kokoa mankany amin'ny samy izy ary manontany tena, ahoana raha ny nisy nanjo ny ankizy na ny olon-tiana hafa. Na inona na inona ny hoe iza no nahavita dia na tsy, no mbola hahatsapa toy izany koa? Satria FL manana lalàna dia tsy midika izany hoe lalàna trumps ny tenin 'Andriamanitra. Na inona na inona nanjo Aza mamono olona? Ny rariny foana handresy. ankehitriny, Indro, Izaho efa mipetraka indray ka miandry mba hahita izay tsy mety mihaino, na hahatakatra ny fon'ny Ity lahatsoratra ity sy miezaka an-tsekoly ahy ny antony mihevitra ny fihetseham-po izy ireo dia mbola Tsofina amin'ny ohatry.
jonathansampson • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:11 aho • navalin'i
Manaiky ianao fa tsy misy amintsika nisy, fa milaza fa i George mandainga momba Trayvon mitady mampiahiahy. Raha ianao no tsy teo, inona no antony ve ianao noho ny niantso George mpandainga?
Aiza no mahazo ny hevitra hoe hazakazaka nandray anjara tamin'ny ity? George mentored zaza mainty hoditra, Nandray mainty ankizivavy ny prom, ary nanana ny fisakaizana sy ny fanajana ny hafa, ny mainty hoditra ao amin'ny manodidina, izay nijoro ho vavolombelona fa izy dia lehilahy tsara toetra.
Ny hen'omby dia tena azo antoka fa ny haino aman-jery, izay tonga tsara avy tao amin'ny vavahady amin'ny hazakazaka-baiting tamin'ny fiantsoana Zimmerman ny “fotsy-Hispanika,” mba hanomboka ny afo eo amin'ny mainty sy ny fotsy hoditra. Sady koa anie, raha toa ka misy tsy misy adihevitra, tsy afaka mivarotra dokambarotra toerana.
Azoko antoka raha toa George sy Trayvon afaka hiverina ka handeha hitety ny hariva, izy ireo no sady manao zavatra amin'ny fomba hafa. Izany dia tsy manova ny zava-misy fa Trayvon (tsy zaza, fa ny olona) maty raha mbola eo amin'ny andaniny roa Zimmerman, hanakaratoka ny lohany ho eo an-azo tsapain-tànana foana. Izany dia teraka avy tao an-porofo mampiseho ny ahitra amin'ny Zimmerman stains ny indray, ary koa ny maso-vavolombelona ho vavolombelona fa Zimmerman tao amin'i ambany.
Malahelo aho noho ny fahafatesan'ny zaza, fa kokoa aho Nampalahelo ny fampianarana sy ny fomba fiainana izay zaza natsangana ao anatiny sy manodidina. Araka ny voalaza mazava tsara Jeantel, dia tonga avy amin'ny faritra fa ny fotsy hoditra tsy hahatakatra. Toerana izay zatra mifoka sigara zatovo vilany, toerana iray izay ny fotsy hoditra dia antsoina hoe “biscuits”, ary more. Io fomba fiaina hip-hop no handeha foana famonoana avy ankizy.
Aho niaraka mainty ankizivavy rehefa nipetraka tany Chattanooga taona lasa izay nanenjika noho ny namany satria izy no “manao fotsy” in nanenjika ny fanabeazana. Aiza no toe-tsaina avy? Tsy izany tokoa ny fahadisoana ny fotsy hoditra izay tanora mainty ankizy fanalana baraka tanora hafa ho an'ny zaza mainty hoditra miezaka hanan-tombo eo amin'ny fiainana.
Miezaka aho ny hanao ny anjara amin'ny fanampiana. Amin'ny maha-injeniera rindrambaiko no nanolo-tena ary nanampy hamelatra fitiavana ny teknolojia sy ny fandaharana eo amin'ny tanora mainty hoditra Atlanta-monina ankizivavy, niara-niasa tamin'ny hetsika mahafinaritra tahaka an'i Black Girls Code. Amin'izao fotoana izao ireo ankizy rehetra tsy maintsy mijery ny ho any dia vazivazy toy ny Nikki Minaj, ary wannabe-jiolahim-boto rapping momba ny firaisana, vola, ary kiraro.
Isika tanora mainty hoditra tsy nahomby ny ankizy.
Inona no tanjona no nanambara fa tovovavy mitondra ny datin 'ny mainty rehefa tany Chattanooga manompo? Tsy voatery hanambara fa ho ahy ho ahy hanaja ny hevitrao. Izany no zavatra tsotra izao raiki-tampisaka. Ny zava-misy fa manampy ny tanora tanora mainty hoditra tsy nanavaka anareo avy amin'ny olom-pirenena na fotsy hafa. Aho fa tsy hoe ho fanahy na manaja saingy awfully ahiahiana. Ny tovovavy mainty anao zatra daty dia tsy ny mainty ihany no olona mba hisy karazana fanesoana na ny avy amin'ny olona fotsy, ny olona mainty hoditra, na olon-kafa. ankehitriny, Izaho dia hoy izahay no tsy teo. Fa ianao kosa rangotra, ratra kely lainga, foana ianao mahita mpangalatra. Satria George Zimmerman voalaza ireo zavatra rehetra momba ny fananana namana mainty, sy ny mpanoro hevitra momba mainty ankizy, indray, Tsy midika na inona na inona. Ever nandre ny teny hoe mpihatsaravelatsihy? koa, raha ny orana ary izaho miezaka ny hahazo an-trano, Tsy manam-potoana ho peeking amin'ny olona ny varavarankely. Fa raha namono olona fotsiny aho fa nieritreritra aho fa niahiahy, Aho dia tsy maintsy hanao ny tsara indrindra mba hamaritana ireo ahiahy. Izany dia midika hoe ny marina antsoina hoe embellishing. Rehefa nifarana ny andro, tsy maintsy miatrika ahy. izy no; na izany aza, hiatrika Andriamanitra, Eny dia afaka madiodio, ary na diso fanantenana aho ny didim-pitsarana, anareo, na tsy misy olon-kafa afaka hamaivanina ny hazakazaka ny hoe tsy anjara eo amin'ny zava-nitranga ity; ao amin'ny fitsarana, ao amin'ny haino aman-jery, ary na dia ankehitriny. Raha hazakazaka tsy anjara, Tsy misy amin'ireo fanehoan-kevitra momba azy io dia miresaka be dia be. Ary tsy avy amin'ny mainty hoditra. Tena mahagaga ho ahy ny miresaka momba ny Rap sary masina fa ny ankizy dia niandrandra ny toy ny hoe ny mainty ihany no ankizy toa azy. Ankizy lehibe kokoa White mpanohana ny Nikki ny Minaj sy Lil Wayne ny noho ny hafa. Rehefa manana kolontsaina fotsy ankizy izay afaka namorona ny teny hoe, “wigger”, masìna ianao, Aza mamita-tena hino fa ny olona mainty hoditra fotsiny. Na izany na tsia, misy fahadalana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany sy ny andaniny roa fankahalana, fa masìna ianao, Aza atrehinao aho, rehefa miezaka hotsarovany intsony koa ny hevitra izay te-hanao ny maneho ny antony George Zimmerman dia afaka madiodio.
jonathansampson • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:12 aho • navalin'i
Sir, Aho, izay nilaza ny zavatra niainany. Koa izany no niresaka momba ny taloha any Tennessee, ary izany no mahatonga ahy hanovozan-kevitra ny anjara amin'ny hetsika noforonina mba hanompo tanora mainty hoditra ny ankizy. Mampalahelo fa afaka manome ny fijoroana ho vavolombelona feno, ary mbola azo heverina ho iray hafa fotsiny fotsy-kilalaon'ny hafa.
Fantatro ny taloha dia tsy ny mainty ihany no zazavavy hatao vovoka ny felany. Inona no manondro avy aho dia tanora ny ankizy mainty hoditra avy ao tontolo izay tsy mampirisika tsara indrindra manokana. Tsy ny tranga ho an'ny rehetra, fa ny zavatra niainako manokana izany uncomfortably iombonana.
Ataonareo hoe George ny mpihatsaravelatsihy, fa indray, mifototra amin'ny inona? Fantatrao ve George? Ianao any tamin'iny alina iny? Tsy hoe George hoy izy mainty namana, fa ny fijoroana ho vavolombelona manokana ny mainty hoditra ao amin'ny manodidina, izay nidera azy am-bava. Koa inona no antony azontsika miantso ny toetrany-panontaniana raha ny porofo rehetra dia toa manondro fa tsy, ary tsy mbola nisy, mpanavakavaka?
Raha nandray anjara hazakazaka, aiza no porofo mampiseho fa? Ny hany miresaka momba ny hazakazaka ananantsika amin'ity raharaha rehetra tao an-tenin 'Jeantel, izay nilaza Trayvon atao hoe George iray “mampatahotra boriky cracker,” ary taty aoriana dia nisy “nigger.” Ny fanehoan-kevitra avy mpanavakavaka Trayvon, tsy George. Jeantel nijoro ho vavolombelona fa ny faritra, izay no antsoin'izy ireo hoe fotsy hoditra.
Tsy midika hanoratanao ankizy fotsy toy ny sasany karazana anjely. Miteny aho ny fitaomana ara-kolontsaina eo amin'ny zaza mainty hoditra, satria isika ihany no miresaka momba an'i Trayvon eto amin'ity ohatra. Be dia be aho marary ny jiolahimboto tanora toe-tsaina eo amin'ny ankizy fotsy, ihany koa. Ny zanako lahy, izay bi-ara-poko, Tsy mitombo ny pataloha manodidina lohaliny, oversized lobaka, ary ny toe-tsaina izay mampita tsy miraika sy ny niraharaha. Tsy te-hahita azy eo amin'ny ankizy fotsy, mainty ankizy, ankizy Hispanika, na iza na iza hafa. Tsy, Te-hahita ity taranaka manaraka no tsara kokoa ho azy.
tiako ianao, rahalahy. Ary mankasitraka ny fitiavany. Fampiononana aho noho ny zava-misy fa samy hivavaka sy miahy ity taranaka manaraka, ary te-hahita bebe kokoa hahomby noho ny hatramin'izay. TAHIN'ANDRIAMANITRA.
Marvin Lee McManus • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:12 aho • navalin'i
Jonathan, izany dia nitranga na aiza na aiza haingana. izaho tsy namaky ny lahatsoratra manontolo aho, satria tsy miezaka hanana fifanarahana aminao. Avelao aho mba hilaza, Tsy niantso aho George Zimmerman ny mpihatsaravelatsihy. I fotsiny nanao momba ny teny. Ve ianao ateraka indray ny zanak 'Andriamanitra? Raha izany, Nahoana isika no bantering sy miverina? Inona no miezaka ny hanaporofo. Tsy miraharaha izay Trayvon Martin ny hazakazaka dia, dia very ny ainy, rehefa tsy nanana koa. Ianao voalaza ao amin'ny lahatsoratra hafa izy dia tovolahy. No, tsy teo intsony. Araka ny ratsy araka ny tiantsika azy ho George Zimmerman mba misy koa rariny raha mandray ny fiainany, tamin'izy mbola zaza. 17 taona mitovy ny ankizy. Izy mbola fohy. Tena mampalahelo toy ny polarization izay nitranga sy ny mainty sy ny fotsy hoditra, ary nipetraka indray toy izany no handefasana ny fanatanjahan-tena sy ny ekipa racks ny tena hevitra mandresy. Izany no mampalahelo fotsiny tsotra. Raha Trayvon Martin efa fotsy sy George Zimmerman efa mainty, Mbola aho mahatsapa toy izany tsapako izao. Fa ny mampalahelo marina, i George Zimmerman efa mainty sy Trayvon Martin efa fotsy, izany dia efa be vokatra hafa ao fa efa voasambotra andro 1, mijoro ny tany na tsia ny didim-pitsarana, ary tena mety indrindra ho hafa be. Aza misalasala ny minamana amiko amin'ny haino aman-jery sosialy izay tianao raha te-hahazo mihevitra fa iza Tena aho; na izany aza, amin'izao zava-misy izao, Nanao handeha aho sy miverina, satria izany no izy tsy mandeha na aiza na aiza. Misaotra anao valin-na.
Nathanial Poling • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:13 aho • navalin'i
Marvin, mila mamaky ny lahatsoratra… ianao dia efa eo ny fanafihana hatrany am-piandohana, raha mbola miezaka ny hilalao ny “tsy miandany” karatra. Zimmerman ianao hoe mpandainga sy mpamono olona ary avy eo dia hanafika ny fotsy rahalahinao izay manana ny sivily resaka. Voalohany, Zimmerman dia Hispanika.. Mbola tsy nandre olona iray niantso ny Filoha Obama sy fotsy ihany io hevitra io dia maneho ny fitongilanana. Ny hevitro manokana dia ny haino aman-jery nitsoka izany hazakazaka ho any amin'ny ady raha ny tena olana dia ny tanàna hiady amin'ny tena anaty tany manodidina azy. Misy fihetsika sasany toy ny mandeha eo amin'ny trano izay tsy ara-dalàna ao amin'ny fizarana na gated vondrom-piarahamonina. Izay mety ho olona manodidina watch ho nahita izany fa hafahafa fitondran-tena. Inona no nitranga rehefa afaka izany, dia ho niady hevitra mandrakizay toy ny tsy nisy teo afa-tsy iray ihany ny lehilahy sy ny mpitsara rehetra nijery ny porofo, ary nitondra ny tantara fa natao ho ampy ny tsy mandresy lahatra azy.
Marvin Lee McManus • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:13 aho •
Nathanial, Tsy nanafika na iza na iza. I fotsiny nizara ny heviny. Aza izy ireo sady mahery, ahy izy ireo. Ho tsara kokoa ho anareo ny hoe:
“Tsapako toy ny anao ireo no namely olona”. Fantatro ny fomba nahita aho, ary tsy hamely mihitsy Jonathan. Ny hevitra tsy mitovy sy tsy amintsika no manova ny fijery, saingy mbola niresaka. Raha niresaka ny fitongilanana, anareo ihany koa dia toa. Inona no George Zimmerman ny ho Hispanika no hanao amin'ny marimarina fa tsy momba ny hazakazaka? Zava-nitranga dia tsy mifototra amin'ny hazakazaka raha tsy hisy eo amin'ny mpikambana ao amin'ny mainty sy ny fotsy hazakazaka? Inona no filoha Obama ny lova tsy maintsy hanaovany azy kofehy? Niaiky foana aho makiazy ny foko noho ny inona izany. Mampalahelo fa, misy ireo izay mihevitra azy ho mainty fotsiny noho ny lokon'ny hodiny. Eny, Hoy aho hoe George Zimmerman dia mpandainga sy mpamono olona, na ny tena fanambarana. Satria afaka madiodio ny mpitsara azy dia tsy ho diso na iray. Rehefa nifarana ny andro, marina inona no hevitra izay miezaka ny manitikitika an-trano? Miala tsiny raha tsapanao ho toy ny manafika na iza na iza aho. Moa ve aho tsy mahazo miteny ny hevitro toy ny olon-drehetra eo amin'ny kofehy io no tsy ho tsiny noho ny zavatra izay fantatro aho fa tsy mba?
pepjrp • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:15 aho • navalin'i
Andriamanitra no handresy, fa ianareo no manao ny mpanavakavaka. Ianao tsy mahalala ny zava-misy ao amin'ny raharaha satria i Martin mainty. Izany no hany antony. Martin nanafika Zimmerman rehefa levona mandritra ny minitra vitsy. Tsy misy famonoana nitranga, Ianao diso hevitra momba antsika ho toy ny 10 ny ny 1000 no mahita izany hazakazaka alalan'i solomaso miloko.
Marvin Lee McManus • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:15 aho •
Inona no hitako ho namako fa mahatsikaiky dia ny zava-misy fa ianareo kosa manao ny vinavina momba ahy nefa tsy mahalala ahy. Ao amin'ny bilaogy iray hafa eto (taorian'ny Trayvon, Hisy Justice for Florida ny hafa Mijoroa Your Ground Nizaka?) amin'ny Disqus, nisy olona niantso ahy “nigger” satria ny fijery nitovy. Moa I mamaly? No. Fa nahoana no tsy? Satria fantatro hoe iza aho sy izay misolo tena. Tena mampihomehy ahy fa manondro an'Andriamanitra nanjaka toy ny milaza fa Kristianina ianao. Voalohany indrindra, Miaro fotsiny aho Trayvon Martin satria nisy namono alina niavaka io ary mbola ho namono. Aho mahatsapa ny tena toy izany koa raha dia kely fotsy koa zanak'osy sy George Zimmerman dia mainty. Izany antso tsiny maha-olombelona. Hitanao, George Zimmerman dia mpamono olona. Ary devalued iray hafa amin'ny fiainan'ny olona iray noho ny fifamaliana izay nanomboka. Na inona na inona ny ho afaka madiodio ny “olona” lalàna, Ny lalàn'Andriamanitra nanao hoe: “Aza mamono olona”. Inona no nataony? Ary rehefa namono ny toe-javatra rehetra mety efa nisakana. Inona no ataonareo hoe fanavakavahana dia na inona na inona mihoatra noho ny antony mifototra amin'ny ny lanjan'ny toerana amin'ny Trayvon aho 'ny fiainan'. Aho George Zimmerman very saina amin'ny, tsia mihitsy, dia hiatrika ny Mpitsara. Tezitra ve aho amin'ny Mijoroa Your Ground Lalàna, eny izaho dia. Raha tsy miaro ny vehivavy mainty, Marissa Alexander, izay nitifitra tifitra fampitandremana amin'ny vadiny, ary taorian'izay niteraka iray 20 taona an-tranomaizina sazy ho azy, dia tsy tokony ho ampiharina amin'ny George Zimmerman na. Ho anao ny handray na inona na inona momba ny zava-misy sy tsy miraharaha Trayvon Martin miaro ihany, satria izy no mampiseho mainty ahy ny fitongilanana sy ny raiki-tampisaka mifandray amin'ny fanavakavahana mifototra amin'ny hazakazaka kevitra. Hita koa izany eo amin'ny tsinontsinona ny “10'S ny 1000 no mahita izany hazakazaka alalan'i solomaso miloko”. Misaotra anao manao ahy dia manaraby aza.
pepjrp • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:16 aho •
Isika rehetra toy ny Kristianina navela haka aina raha misy antsika-doza… ary hita fa ny i Zimmerman. Hita koa fa tsy hanome Zimmerman ny tombontsoan'ny izay. Raha tsy mifototra Foko, dia ny miala tsiny, fa ianareo dia iray amin'ireo vitsy fa tsy. Fa ianao kosa dia efa ho Kristianina sy ny hafa rehetra izay efa nolazaiko tamin'ny aterineto tsy, dia Izaho no hanome anareo izay fanajana. Fa dia mazava fa ianao nino zavatra tsy marina sasany momba ny raharaha tsy nahita na fihainoana ho anao. Izany no toerana ny aggravation tonga ao. Aho, dia tsy nanana finoana fomba iray na hafa mandra nandany fotoana mba ho zava-misy maro araka izay azoko atao. Tena tsy nampoizina ny zavatra hita. ankehitriny, Hitako fa maro no mampiasa ny Marissa Alexander raharaha mba Slam ny Zimmerman didim-pitsarana. Ankehitriny dia tsy mahalala betsaka momba azy io tahaka izao izaho ity iray ity, fa fantatro fa i Alexander nanolotra 3 fiangaviana fifanarahana taona izy no teo. Na izany aza, Namaky na oviana na oviana aho fa na iza na iza ny zava-misy ao amin'ny Lahatsoratra. Misy ihany koa ny fijoroana ho vavolombelona fa afaka nandao ary na dia niverina rehefa lasa izy, fa tsy fantatro fa azo antoka, fa Anisan'ny amin'ny fanenjehana ny raharaha. Fa misy antony lehibe ny mino fa Trayvon Martin efa kosa dia mba nahafoy dia niverina. Nisy Zimmerman minitra izay milaza an-telefaonina ho any amin'ny 911 dispatcher fa tsy mahalala izay Martin dia. Nefa tsy fantatrareo fa satria tsy miezaka mahalala izany, nanao anao? Ny fanehoan-kevitra ny “10'S ny 1000 no mahita izany hazakazaka alalan'i solomaso miloko” mijoro ho mihoatra noho ny marina. Maro ireo fotsy hoditra izay mino Zimmerman meloka ho an'ny isan-karazany noho ny antony manokana, fa misy mainty hoditra, izay saika tsy misy mahatsapa ho tsy manan-tsiny dia mety Zimmerman Izany no porofo rehetra ny fanavakavahana ilainao.
Marvin Lee McManus • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:16 aho •
Masìna ianao, aza aho ka hanakana azy fitia. Amin'ny maha-kristiana, tokony hahafantatra tsara kokoa noho ny miezaka sy mampianatra ahy ny mino zavatra tsy marina. Izany dia midika fa mino ny zavatra rehetra izay nivoaka avy tany George Zimmerman ny vavany ny fahamarinana. Dia tsy mikasika izany satria indray, Andriamanitra ihany no Mpitsara. Arakaraka ny miezaka ny feo manavakavaka sy misaina ny momba ity tranga ity, ny ratsy dia mahazo. ary indray, hiala mihevitra ho manana ho anao hahafantatra ny fomba ny ankamaroan'ny tranga ity aho, nihaino ny ho an'ny tenako. Aho mamaky tsara, nahita fianarana, olona izay afaka mieritreritra ho an'ny tenako, ankoatra ny fihetseham-po. Masìna ianao, lazao amiko ao amin'ny Baiboly izay milaza raha mbola misy aina ihany doza, dia afaka maka iray hafa. Aza mamono olona dia midika hoe marina izany. Ary masìna ianao, Aza atrehinao aho amin'ny famonoana ny Testamenta Taloha izay fahita, satria ny fahasoavana dia tsy tonga an-tsehatra. Ny Marissa Alexander raharaha, Tsy zava-dehibe, fangatahana fifanarahana na tsia, raha nahatsiaro ny fiainany dia notandindomin-doza, nanana zo rehetra mba hitsangana ny tany. Ianao manohana ny lalàna izay mifatotra ho mpanavakavaka miharihary somary ary miezaka hiaro azy, indray, tsy tsara maso. koa, raha mahatsapa Milaza ny Baiboly raha mbola misy aina ihany loza azonao atao iray hafa, inona no tsapanao momba ny fanalan-jaza izay fitsaboana ilaina. Just liana ny hahafantatra. indray, tamin'ny faran'ny andro, ny hevitra dia anareo, ary tsy miova, tsy Ahy. Ihany no maha samy hafa, Ahy vokatry ny madio fomba fijery maha-olombelona, fotsiny izay Anao dia ny fahatezerana sy ny fahadisoam-panantenana izay tsapanao ity raharaha ity dia momba ny hazakazaka. Jereo ny fahasamihafana?
Nathanial Poling • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:16 aho •
dia miaramila amin'ny ady dia meloka ny namono olona?
Vao naneho ny tsy fahalalana na ankapobeny fotsiny tsi-fisian'ny fahalalana… Mitsangàna eo ny Ground tsy mbola nampiasaina mihitsy aza ao amin'ny Zimmerman raharaha ny fiarovana, tsy manan-tsiny izy na dia tsy misy izany lalàna. Koa fa ny lalàna no ampiharina 2 ny 1 ao ny fitia ny Afrikana Amerikana miaro tena amin'ny hafa noho ny fotsy hoditra Amerikana Afrikana mampiasa ny lalàna.
Antoine Mason • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:17 aho •
Izany no tsara tarehy mpanavakavaka fanambarana.
Nathanial Poling • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:17 aho •
izay mpanavakavaka? tsy nisy na inona na inona tao amin'io fanambarana lavitra mpanavakavaka
Marvin Lee McManus • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:18 aho •
Na dia tena te-maniry hiala ny SYG lalàna, ary ny vokatry ny délibération teny akaiky nitovy ny SYG verbiage. SO in teoria fotsiny, satria tsy hampiharina SYG, tsy midika izany fa tsy ny fototry ny fanapahan-kevitra. koa, Aza atrehinao aho azafady ny antontan'isa raha tsy afaka aoriana azy amin'ny porofo. Amin'ny manaraka, Diniho ny fiteny rehefa te-hilaza fa ny olona iray dia tsy mahalala satria tsy mahalala ianao, raha tena mino ianao fa ny didim-pitsarana SYG tsy nitendry anjara ny vokatra farany. Ary hatrany ny nanao ny by MediaWiki, azafady jereo na ny manaraka…
Ankafizo ny andronao.
Nathanial Poling • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:22 aho •
tena fotsiny no hamoaka roa kisendrasendra bilaogy?
Ary mamela ny sasany mifindra amin'ny tena antontan'isa:
Fa eo ho eo amin'ny iray ampahatelon'ny Florida "Mijoroa Your Ground" filazana ao amin'ny
mahafaty toe-javatra no atao amin'ny mainty voampanga, ary no anaovany ny
fiarovana soa aman-tsara 55 isan-jato ny fotoana, Mandritra izany taha ho toy ny
mponina amin'ny ankapobeny sy amin'ny taha ambony noho ny fotsy voampanga,
araka ny Daily mpiantso famakafakana ny base de données foana ny Tampa Bay Times. Fanampin'izany, ny ankamaroan'ny niharam-boina ao amin'ny Florida "Mijoroa Your Ground" tranga efa fotsy.
Nampiasa Afrikana Amerikana "Mijoroa Your Ground" fiarovana amin'ny efa ho avo roa heny ny tahan'ny ny fisian'izy ireo ao amin'ny Florida mponina, izay voalaza ao amin'ny 16.6 isan-jato 2012.
koa, Vao avy namaky ny raharaha any New York in 2009: http://rochester.ynn.com/content/top_stories/490926/jury-finds-roderick-scott-not-guilty/
Karazana nolaviny ny hazakazaka rehetra karatra hevitra fa ny Filoha Obama sy ny hafa nilalao tamin'ny tranga ity fa ny olon-dehibe mainty dia tsy ho afaka madiodio izy raha namono fotsy tanora.
Marvin Lee McManus • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:22 aho •
Izaho tsy handeha handray na inona na inona momba anao indray mipi-maso hafa noho ianao tsara tsy tia ho diso ary koa tia ny hiaro ny lalàna mampiady hevitra. Na te-hiaiky izany na tsia, ary mahita by MediaWiki izay manohana ny fitantarana, toy ny olona afaka, SYG lalàna, na hampiharina amin'ity tranga ity na tsia, efa iray nanorina-in tsy fitoviana ara-poko. Aho tena tsy mieritreritra ny fanohizana izany lahateny aminao. Nahoana? Mety hanontany. Izany dia midika hoe hanatontosa na inona na inona. Ny hevitra dia tsy handeha hiova, ary tsy dia ahy. Midika ve izany aho dia tsy afaka na tsy manaja anao? Tsia mihitsy. Izany dia midika hoe reraka aho ny nidaroka ny soavaly maty aminao. Civil lahateny ity izay tsy ampy ao amin'ity firenena ity, ary izany no porofo koa fa manana ela ny lalana ho antsika mba ho firenena iray eo ambany. Mivavaka aho ny fitiavany manenika ny fonao ary koa ny ahy sy ny olon-kafa izay mety tafintohina amin'ny bilaogy ity. Manana lehibe hariva.
Hitako ianareo skirted ny valin-. Aho ka hifona ho anao koa fa esorin'i ny “hazakazaka” blinders izay misy fiantraikany ny tohan-kevitra. Fantatro foana ny fanavakavahana misy amin'ny foko rehetra manoloana ny olon-kafa, fa misy ny olona sasany avy ao izay nifindra any an-dafin'i hazakazaka sy loza rehetra tsy maintsy manao foana ny loko ny hoditra. Aho ho porofo manohana raha nampiseho fa Zimmerman dia meloka ny heloka bevava fa dia hanohy hiady hevitra amin'ny olona iray izay vokany be iray efa ho 100% fotsy haino aman-jery miaraka amin'ny antony manosika hanoratanao diso io tantara io ho zavatra izay hitaona ny mpijery ka hahatonga azy ireo bebe kokoa vola ary koa ny hanosika ny anti-basy fandaharam-potoana. Doctored izy ireo lahatsary, peo horonam-peo sy ny maro hafa mba rile fitantarana ny Afrikana Amerikana sy ny vondrom-piarahamonina mino aho fa ny travesty. Manantena aho fa ny pataloha Zimmerman sues eny noho ny fanalam-baraka sy fanendrikendrehana.
Marvin Lee McManus • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:23 aho •
Raha mbola mivavaka ianao fa Andriamanitra manaisotra ny hazakazaka blinders amin'ny masoko raha mihevitra ho manana ho izany no antony mihazona ny hevitra dia hazoniko, Masìna ianao, mahatsapa fa tsy mety ny vavaka ho azy ny valin-drihana lasa. I skirted ny valiny satria tsy mahatsapa ny filàna, no mamaly anao raha tsy manana hevitra izay tena miresaka momba ny toerana voakasika aho. Tsy afaka afangaro ny vavaka ny fitiavana sy mankahala rehetra tamin'izany andro izany. Ny fiheverana fa satria Trayvon Martin dia mainty sy ny antony tsapako ny fomba atao dia mazava ratsy. Tsy handeha aho mba hiaro ny hevitra ihany ny na olon-kafa, satria any amin'ny faran'ny andro, ianao dia mbola mahatsapa ny lalana efa atao sy ho nihatsaravelatsihy momba izany. Tena manivaiva toy ny mpino ho anareo mba hiezaka ho avy na dia manerana ny lalana ianao rehefa mahafantatra ho an'ny tenanareo ianareo fa ny fahendrena dia nomen'Andriamanitra lehibe indrindra izay izany no mampihatra ny hariva tamin'ny George Zimmerman ny anjara, dia tsy ho manana izany fifanakalozan-kevitra. Ianao hahita ny namana, Tonga i Satana mba hizara, ary izy dia azo antoka fa manao ny asa miaraka ity olana ity. I mihazona ny heviny, satria tovolahy iray nalaina 'ny fiainan'–POINT-Blank, NANOMBOKA TEO! Ny zava-misy toy izany ianao fa tery saina momba izany ao mihevitra ho manana ho fa fa mivalomainty aho, ary Trayvon Martin mainty, Mahatsapa izany, dia mazava tsara tsy mitombina. Ho anao ny hiresaka momba ny hazakazaka blinders rehefa nesorina tamin'ny masoko raha mazava tsara ianao ihany no manao ny mampihomehy ahy. Raha tokony mivavaka ho an'ny olon-kafa, dia mety ho atao ny mangataka amin'Andriamanitra ny manomboka amin'ny fonao aloha. Mety ho gaga ny zavatra manambara aminao.
Nathanial Poling • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:23 aho •
no nanomboka ny mivavaka, noho izany aza mampianatra ahy momba izay mba hivavaka momba ny. Mieritreritra aho fa tokony hijery ny fonao, dia mazava momba ny hazakazaka izany satria misalasala dia izao no namorona azy ho lasa vaovao ao an-toerana sy eo an ny sain'ny ankamaroan'ny olona raha io tranga efa mainty ny mainty na ny mainty amin'ny fotsy. Raha tsy te-hiatrika ny zava-misy, izay no safidy, fa misy toe-javatra maro izay manohana ny fijery anisan'izany ny mainty hoditra any New York, izay nitifitra manao akanjo fotsy hoody tanora ary hita tanteraka tsy meloka amin'ny fiampangana rehetra. Tsy nisy haino aman-jery nasionaly mampiseho ny, tsy misy fotsy hazakazaka baiters miantso ny hetsi-panoherana. Ity tantara ity dia ho hafa tanteraka i Martin tsy nanafika Zimmerman ary aho hanohana ny maro ny hevitra fa ny faharoa Martin nanapa-kevitra izy handeha manisy ratsy Zimmerman dia nikapoka ny lohany tamin'ny sisin-dalana sy ny totohondry ny tavany amin'ny, dia nametraka ny tenany ho voatifitra. Fe-potoana.. faran'ny tantara… nandroaka ny hazakazaka, ary izany no zava-misy tsotra sy tsotra.
Wow. Tsy mahagaga àry raha misy mbola mahatsiravina hazakazaka fifandraisana eto amin'ity firenena ity. Fa mihoatra noho ny mazava na inona na inona aho, na hoe ny fomba nilaza ny tenako aho, ianao ary afa-po amin'ny ankapobeny ny fanehoan-kevitra sy ny fihetseham-poko. Rehefa avy nilaza fa, mankafy ny fotoana sy ny vavaka hanana fiainana be. Manantena aho fa hahita anareo any an-dafin'i.
Nicole • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:24 aho • navalin'i
I miombon-kevitra amin'ny fanatrarana fifandanjana eo amin'ny famaritana ny tsy rariny ara-tsosialy rehetra. Na izany aza, nisy feo tany am-piandohana izay nampiasa ny foko slur ary manana ny tantara ny miantso ny zazalahy mainty eo amin'ny manodidina. Foko Mety tsy ho ny dehibe ihany, fa izany.
jonathansampson • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:24 aho • navalin'i
Nicole, George niantso azy ho “mitohy,” ary ny “F * cking mpanao punk.” Ny hany porofo na inona na inona foko Jeantel slurs tonga rehefa nandray ny toerana tananay, ary nijoro ho vavolombelona fa raha izy an-telefaonina amin'ny Trayvon, Trayvon atao hoe George iray “mampatahotra boriky cracka,” ary taty aoriana dia nisy “nigga”.
George mentored (roa farafahakeliny) mainty ny ankizy, Nandray mainty ankizivavy ny prom, ary na dia nanana ny fanohanana ny mainty tao amin'ny manodidina ny andraikitry ny manodidina fiambenana. Tsy nisy porofo fa tena tsy misy fanavakavaham-poko i Trayvon profiled, na izay George no mpanavakavaka.
pepjrp • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:25 aho • navalin'i
Asa lehibe tahaka ny fantatrareo ihany ny amin'ny fanakareo. Too ratsy misy afa-tsy 1 tapitrisa ny toy izany mainty hoditra avy any mba hampianarana ny fahamarinana amin'izany zavatra izany toa anao nataony tamin'ny Bean sy Nicole. Mahavariana ny fomba maro te-hino hazakazaka fankahalana sy tsy namelatra iny haingana ampy.
Tsaramaso • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:25 aho • navalin'i
Hmm.. Mihevitra aho fa “Coon” tsy goon. Izany no foko iray teny.
Ataoko inona koa izao ihany? Moa ve isika rehetra miady fotsiny ihany noho ny fomba fijery indray?? Mbola manana hahita na iza na iza ao amin'ny Forum izany fifanakalozana zavatra manan-danja.
Izaho tsy hahatakatra izany.. no heverina ho ny fiangonana.
jonathansampson • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:25 aho • navalin'i
Ny adihevitra teo anelanelan'ny Coon sy ny goon - ny maha samy hafa ny C sy ny h. George ny sakaizan'ny mitovitovy folo taona (ary ny mainty, raha zava-dehibe) mihevitra fa teny ampiasaina dia “mitohy,” nilaza izy tsy nandre na iza na iza latsaky ny 40 taona, na ny fampiasana 50 “Coon” tahaka ny foko slur. Izaho manokana tsy nandre Coon ampiasaina ho toy ny derogative; Ihany ve aho nandre izany ampiasaina ho toy ny momba ny raccoons.
Rehefa mandinika izany mazava peo iray Clip eo amin'ny mazava ny zava-drehetra hafa, mahatonga dikany kokoa dia hoy izy: “mitohy”. Sady koa anie, Joe Oliver (George ny mainty namana) fa tao anatin'ny folo taona dia tsy nahita na inona na inona izay mety soso-kevitra George dia mpanavakavaka. George naka mainty ankizivavy ny prom, ary mentored tanora zaza mainty hoditra. Tsy misy filazana fa mihevitra ny olon-kafa toy ny latsaka noho izy noho ny volon-kodiny.
Zava-dehibe ity resaka ity, satria ny fiangonana dia natao ny rehetra isan-karazany ny olona, mainty sy fotsy. Toy izany ny tantara mampalahelo toy izany dia mety hiteraka fisarahana lehibe eo amin'ny vatana hita maso, Ary raha toy izany no tokony ho liana amin'ny rehetra miasa ny marina, miorina amin'ny antony sy ny porofo, mba hisorohana ny olana tsy ilaina ao amin'ny vatana.
No, hoy izy fa h **** Fu hatsiaka. Google izany. Henoy ny feo. Nilaza ny FBI izay zavatra nolazaina. Tsy nisy afa-tsy mpanavakavaka slurs Martin.
Antoine Mason • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:25 aho • navalin'i
Manana ny feo izay nilaza zavatra Trayvon mpanavakavaka? Aho tia hihaino izany.
pepjrp • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:26 aho • navalin'i
Noho izany dia miantso Rachel Jeantel mpandainga? Sa ianao malahelo ny fijoroany ho vavolombelona?
Tsaramaso • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:26 aho • navalin'i
Angamba tsy hoe ny ara-poko avy eo teny. Tsy hahalala izay ao an-tsainy, fa Izaho manokana tsy mihevitra Zimmerman dia manavakavaka. Ary nanao izay na izany aza “fanavakavaham-poko Profile” Trayvon. Ary izay no mampalahelo mihitsy noho ny antony maro…
Noho izany, tokony hiresaka momba…1. Ahoana no hiatrika ny somary ambony ny tahan'ny heloka bevava ao amin'ny fiaraha-monina ny mainty? Ve ny olona na dia miraharaha ny hanao na inona na inona momba izany toy ny milaza ny maro ny “mainty” olana? 2. Inona no hanampy antsika intsony ny olona ho any sasany pigeonholing fijery mifototra amin'ny loko? Moa ve ny haino aman-jery? Ahoana ny momba ireo antontan'isa, Inona no tena dikan'izany? 3. Ahoana no ahafahantsika miray kokoa? Jereo tsirairay ny hafa fijery? Angamba manana sehatra fiadian-kevitra kokoa ny olona izay miresaka momba ny zava-niainany?
Te-hanana izany fifanakalozan-kevitra, fa miady samy hafa kosa tsy mba ka te-hanampy. Inona no nanipazana ny hevitra ny ompa? Ny mitondra ny taona 1960. Ny manondro ny mainty amin'ny tahan'ny heloka bevava mainty tahaka ny sasany fanamarinana.. Nahoana ny olona no manao izany? Fotsiny hanimba ny hafa?
Amin'ny maha Kristianina, ahoana no ho tonga ohatra ho fomba hifanatrehanay amin'ny toe-javatra sarotra toy izao? Ahoana no azontsika ampiasana ny ohatr'i Jesosy mba tsy haka ny sombin-kazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao izahay- fa mba handini-tena ary anontanio raha toa isika manao izay rehetra azontsika atao mba ho izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa?
pepjrp • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:27 aho • navalin'i
Wrong Nicole… kokoa ny lainga sy ny inaccuracies ny hazakazaka hustlers sy ny fampahalalam-baovao liberaly. Ary dia haka ela mba tafahoatra ny lainga rehetra izay mainty hoditra maro loatra dia be noho faly ny hino. Nicole, tsy fantatrao ny zava-misy. Please mianatra azy ireo.
Nathanial Poling • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:27 aho • navalin'i
Nicole, no nihaino ny fotoam-pitsarana? Ny hany foko slurs nivoaka avy tany am-bavan'ny Martin araka ny namany izay niresaka taminy tamin'ny finday.
lewrites • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:27 aho • navalin'i
voalohany eny, Tsy tiako holazaina tsy fanajana…Fotsy aho / teratany Amerikana. Fa hatramin'izay ihany aho re “mitohy” in momba ny mainty hoditra. Ary hatrany ny zavatra Jonathan Thompson dia nanao hoe:…I efa rentsika sy fantatsika ny olona izay hampianarana ny ankizy mainty hoditra, satria te- “civilize” na fotsiny izy ireo satria te hanao ny asa tsara ny andro amin'ny alalan'ny fanampiana hafa firenena.
Aho hoe Martin tsy marina ny hoe izay nanao hoe:. Sanatria izany. Mino aho fa nanao ratsy roa tonta amin'ity tranga ity ary tsy mino dia ho fantatrareo ny marina mandrakariva. Sady koa anie, be dia be ny olona no afaka mamono olona afa-maina amin'ny alalan'ny fanaovana ny olona rehetra mino ny tantara…nisy raharaha ao an-tokantranoko toetra izay ny lehilahy namono ny ankizivavy, ary nahazo ny olona handainga ho azy sy hanome azy ny alibi. Tamin'ny farany dia tonga ny olona ka milaza ny marina, fa fotsiny aho hoe satria afaka madiodio izy sy ny olona nilaza izany zavatra rehetra momba azy dia tsy midika hoe tsy ho marina. Ihany koa aho fa tsy hoe izy hoe manao ny tsy marina, na.
Tranga iray hafa ao amin'ny fanjakana tafiditra an-trano iray mpilalao baolina kitra rehefa nodarohana ho faty roa hafa ry zalahy am-pianarana ao amin'ny fihaonambe. Na dia teo aza ny vavolombelona maso kaonty, ny iray amin'izy roa lahy ireto nahazo maimaim-poana eny Scott, ny anankiray hafa dia afaka hahazo fiangaviana fifanarahana ho an'ny nahy. Ny olona nanatri-maso ireo tovolahy roa ireo sucker totohondry bandy io raha mbola izy ny niverina nitodika tany azy ireo, ka nanao nikapoka azy till izy tamin'ny tany, tsy mahatsiaro tena, Avy eo dia namaky raha nandre ny anjombona. Ary ny anankiray tamin'izy ireo mitantana handeha.
Misy lavaka lehibe ao amin'ny rafi-pitsarana, satria misy olona afaka madiodio tsy midika hoe tsy manan-tsiny ry zareo. Etsy ankilany, be dia be ny olona izay voaporofo fa meloka, ary novonoina ho faty mihitsy aza taty aoriana izay hita fa tsy manan-tsiny. Ihany ny olona roa dia ho fantatrareo tsara ny zava-nitranga tamin'iny alina iny
jonathansampson • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:28 aho • navalin'i
Tsy mbola nandre “mitohy” ampiasaina ho toy ny foko slur ho an'ny mainty hoditra. Vao avy niverina hijery Urban malagasy sy toa tsy lazaina intsony ny hazakazaka na inona na inona ny famaritana ny tampony.
A “Mitohy” dia matetika olona moana, na lehibe. Mafia mety mandefa ny mpitarika “goons” avy mba hanao ny mpanolo-tsaina. Fotsiny aho mba ho tsara ny Anarana iombonana amin'ny teny anglisy, Ary koa tsy lisitra misy fikambanana ara-poko. Toetra izany ny tantsambo, hozatra olona, ary taty aoriana teo amin'ny tantara ny dalàna.
Ary ny zavatra momba ny mpanoro hevitra momba ny soso-kevitrao tanora mainty ankizy satria te- “civilize azy ireo,” tsy afaka mihevitra ny olona mifototra amin'ny antony manosika antsika manokana efa nomanina mialoha ny fitsarana azy - izany tsotra izao tsy rariny. Raha George mentored zaza mainty hoditra, ary tsy mihevitra ho manana ho antony sasany anie teti-dratsy ho azy, Tsy maintsy mihevitra izany satria tena nikarakara ny momba azy ireo.
Fehiny ao amin'ny Zimmerman raharaha dia ny porofo mampiseho George tao amin'i ambany. Travyon ny knuckles mampiseho fa izy punching olona. George ny loham torotoro sy nokapohina mafy. Miara-miasa izy na dia mbola manana ny mpahay lalàna, mihitsy aza ny polisy avy naka ny reenact ny zava-nitranga. Mpitsongodia nandray ny tantarany hatrany, fotoana maro samihafa, mitady famantarana ny fitaka, nefa tsy nahita. Ny rehetra refesina George hita fa natahotra noho ny loza ara-batana lehibe, na ny fahafatesana mihitsy aza. Tsy manana antony nilaza fa raha tsy izany.
Manaiky aho fa ny olona manao zava-mahatahotra izy ka ho lasa miaraka aminy, raha olon-kafa no tsy ara-drariny voasazy noho ny heloka tsy nataony. Tsy mino aho fa ny teo aloha George mihatra amin'ny; tsy mifototra amin'ny porofo. Fa mieritreritra ny farany no manao tahaka Azy ankehitriny, satria hanafina mba hiarovana ny tenany sy ny fianakaviany raha izao tontolo izao Manome filazalazana azy ho mpanavakavaka - fotsy hoditra sy ny mainty hoditra nahatonga manerana mba maniry azy ny fahafatesana.
Misy lavaka eo amin'ny rafitra; dia tsy hilaza fa. Fa isika tsy manana antony tiany Hoatran'ny misy vokatra toy ny vokatry ny ireo lavaka – tsy tsy misy karazana porofo, na mafy orina Fandresen-dahatra. Ny zava-drehetra amin'ity tranga ity, rehetra ny angon-drakitra isika, efa efa-bolana ny fanaraha-maso amin'ny alalan'ny, kevitra George no marina mikasika io alina io. Eye-vavolombelona fijoroana ho vavolombelona manohana ny tantara. Sofiny-vavolombelona fijoroana ho vavolombelona manohana ny tantara. Ny zava-misy dia tsy misalign ny tenany ny tantara. Tokony hataontsika, amin'ny fanajana ny antony, hamandrika intsony fanombantombanana sy ny fitsarana an'Andriamanitra.
Raha te-hahita mazava tranga tsy manan-tsiny no maty, mijery intsony noho Jaona Spooner. Ny olona tahaka ny 70 no nitifitra tanora zaza mainty hoditra indroa amin'ny antoandrobenanahary tamin'ny taon-dasa. Ny fahafantarana “fotsy tombontsoa” tsy hiaro azy, dia nofonosiny ny nitalaho adala. Izany no ho tsara toerana mba mitady fanavakavahana – ny Zimmerman fitsarana dia tsy. Ny hoe hazavana hoditra tsy hamela anareo afa-maina, mamono olona.
lewrites • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:28 aho • navalin'i
Marina ny anao, tsy afaka handray na inona na inona, I Tena manaiky. Inona no miezaka aho mba atao dia ny milalao devoly mpiaro. Fantatro ho fahazavana hoditra tsy mahazo mamono olona anao amin'ny (ao izany no toetry ny lehilahy namono ny ankizivavy, ny lehilahy dia fotsy, ao izany no toetry ny mpilalao baolina kitra, antoko rehetra ireo mainty hoditra).
Saingy tsy tanteraka ivelan'ny boaty ny mieritreritra…tsara…ivelan'ny boaty. Urban Dictionary Tsy tena handeha ho be dia be ny fanazavana, satria be dia be ny zavatra reko manodidina izay miaina dia tena samy hafa amin'ny inona no nametraka ny amin'izany toerana. Angamba ny faritra samy hafa teny manendry dikany hafa. Toy ny ankihiben-tànany teo amin'ny fiaraha-monina sasantsasany dia mitovy amin'ny afovoany rantsan-.
Nametaveta aho ho toy ny tanora zanak'osy amin'ny alalan'ny olona iray izay tsy nisy olona mbola ahiana hanao zavatra toy izany. Ny lalana tsara firaketana, ray aman-dreny tsara, olona toa tsara. Nihevitra ny rehetra betsaka…marina? Raha misy olona tena tsara, Inona intsony no manao zavatra toy izany ho ahy?
Mila tenenina fotsiny hoe, ity raharaha ity dia mitondra ny fifanakalozan-kevitra tsara ny hevitra, na inona na inona raha tsy fanavakavahana, na dia ny antony manosika. Eny, ny haino aman-jery sakafo eo amboniny, ary dia Mankaloiloy fa nanao izany. Aho haino aman-jery lehibe iray tany amin'ny oniversite, isika dia nampianatra mba ho manavakavaka, fa ny sasany mivarotra olona an-orinasa mba hanao tsaratsara kokoa tantara, izany no tsy mety.
Izany no mivavaka ho an'ny fianakaviana, I hamela azy ho an'Andriamanitra mba ho mpitsara farany, satria amin'ny farany, Izy no irery no manan-toerana hanao izany. Miala tsiny raha misy tsy fanajana nahatonga, I midika tsy.
pepjrp • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:28 aho • navalin'i
Goon misy foko slur misy hevitra. Izay rehetra ny lohanao.
Antoine Mason • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:28 aho • navalin'i
Wow ianao tena mpanavakavaka.
pepjrp • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:30 aho • navalin'i
Ny haino aman-jery tsy miraharaha momba ny tantara, satria tsy Black. Fotsy hoditra sy ny Hispanics ao amin'ny hazo fijaliana ho mpanavakavaka volon-mpitarika tahaka an'i Jackson sy Sharptin.
Ianao marina tanteraka tahaka ny mpanoratra ity Diso hevitra ilay vehivavy dia nitondra hazakazaka, rehefa nilaza izy fa Zimmerman profiled Martin ary hita ho hendry nanome ny zava-misy izay sisa avy. Fankahalana ara-poko dia afaka hahatonga ny olona rehefa tatitra irresponsibly. Navelany nivoaka koa izy na dia tsy fantany fa Martin tsy mandeha any an-sisin-dalana, rehefa handeha an-trano, dia nanapaka tamin'ny alalan'ny metatra vitsivitsy monja tongotro tsy ho amin'izay trano sy ny varavarana mitondra ahiahy teo Aminy. Zimmerman nitatitra fa velona ny 911 mpandraharaha raha nandeha an-tongotra sy ny maso Martin. Toy ny nilaza izy fa velona Martin lasa, ary efa very izy. Nahoana i Martin niverina toy ny minitra lasa, ary nahoana izany no zava-manan-danja rehetra nesorina ny tambajotra sy ny vahoaka? Ny zava-misy dia efa nilaza imbetsaka, fa Ailikiliky ny Olona Foana ny vahoaka mainty hoditra ary mazava ho azy, ny hazakazaka hustlers tahaka Jackson sy Sharptin.
BQPhotography • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:30 aho • navalin'i
Marina izany! Manantena sy mivavaka aho dia afaka nivoatra avy amin'izany
gdoggydog05 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:31 aho • navalin'i
ny olana dia, ihany koa, fa tsy hisy olona miaiky fa izany ihany koa ho an'ny olona mpanavakavaka hifidy ity raharaha ity ho toy ny zava-dehibe dia izay rehetra miala ao amin'ny, ary manana ny heviny momba, miorina amin'ny hazakazaka. Misaotra anao fiahiana ambony, tahaka izany no iray amin'ireo tsy mahalala lahatsoratra izay efa namaky, Ary izaho dia fotsy 26 taona ny lehilahy hatramin'ny suborbs ary ihany koa ireo tranga nampalahelo ity. Izany dia midika hoe tsy ny profiling izay manaporofo ny fanavakavaham-bolonkoditra mbola velona. Ny zava-misy fa ity raharaha ity dia fantatra amin'ny rehetra no madio indrindra ny fanavakavahana amin'ny endrika. Isika miresaka momba ity raharaha ity, satria mainty zazalahy efa maty. Efa hita fa mainty hoditra trajedy (angamba izany no mitranga matetika kokoa, ary izany no mampalahelo, fa tsy ny teboka eto) ho zava-dehibe kokoa noho ny hafa rehetra an'arivony loza isan'andro. Misy isan-karazany ny trajedies ny mainty hoditra fotsy namono ry namana, ary na dia ireo atosiky fanavakavaham-poko, izay tsy voalaza, ary glazed over, ary izany koa, dia lasa zavatra ara-dalàna. Tamin'ny Wisconsin ara-drariny, Mino aho fa, Taona vitsy lasa izay ny flash mob rehetra, ka Afrikana Amerikana tanora voaroba ny ara-drariny sy mandrindra fanafihana fotsy hoditra ihany, amin'ny tranga sasany totohondry izy ireo zokiolona eo anatrehan'ny, nandeha an-tongotra ho any an-toerana sy ny trano isa-draharaha tamin'olona sy nangalatra ary natahotra amin'ny hery, ary tsy misy haino aman-jery mikasika. Azonao an-tsaina ve raha misy vondrona tanora fotsy nikendry mainty hoditra? Ny haino aman-jery mifidy, ary raha misafidy, ihany raha mifantoka amin'ny “olona mainty hoditra ihany no mahatakatra izany” lafiny tranga ity, fa ny loza dia mainty ny iray manan-danja indrindra, na dia ankehitriny, raha hispanics, Sinoa, fotsy hoditra, dia maty tao koa lamaody. Ity tranga ity dia mety ho tandindon'ny karazana mainty “tolona,” Fantatro fa. Saingy tsy izany no fomba hamahana izany. Fantatro fa ny tarehy fa marina izany halalahin'i ny hantsana misy eo amintsika. Efa nilaza tamiko toy ny fotsy hoditra fa tsy mahatakatra ny fomba tokoa ny ho profiled, fa raha ny marina aho profiled izay rehetra mitovy fomba, Fony izy tovolahy. manaiky aho, no moreso amin'ny maizina miloko hoditra, fa “tanora” manan-manao izany koa. Hoy ianao hahatakatra na oviana na oviana aho, Ho, angamba ianao fa tsy hahatakatra ny zavatra mahatonga ahy hahatsapa rehefa mainty hoditra rehetra rahalahy mifantoka amin'ny Martin, ary aza na dia manaiky ny zava-misy fa tsy mety eo amin'ny toerana voalohany hisafidy izany ho zava-dehibe kokoa trajedy ireo ny jatony mitovy trajedys izay mitranga isan'andro. Mino aho fa ny ota. Izany hevitra. Fa misy karazana fahotana fisainana no mahatonga izany tsy ohatra ny mifidy firazanana iray ny iray hafa. Ary mino aho ” ny tsy teo amin'ny ny kiraroko” halalahin'i ihany fa ny hantsana eo amin'ny firazanana sy ny fanambarana tsy ara-drariny dia. Fantatrao ve hoe manao ahoana izany ho ahy ny tsy handeha any amin'ny oniversite, satria tsy manana 8 lehibe nametraka manodidina, teo am-pijerena ny Afrikana Amerikana hahazo naoty ihany ny toerana sy ny vatsim-pianarana? Ianao angamba tsy. Ny hevitra dia, fa na oviana na oviana ianao hoe: “tsy fantatrao hoe manao ahoana izany ho ny loko,” ianao dia tsy manao na inona na inona vokatra, satria tsy afaka ny ho loko. Mino aho fa ny mainty hoditra dia toy ny jamba ny olana izay mampaniasia ny lalina fivakisana eo amin'ny firazanana. Afrikana Amerikana no mijery izany zavatra izany Travon Martin sy mieritreritra zavatra iray, raha fotsy hoditra no mieritreritra zavatra hafa tanteraka. “Moa marina sy tsara noho ity raharaha ity ho voafidy ho zava-dehibe, ary ny olo-malaza, ary lehibe noho ny sisa rehetra, miorina amin'ny hazakazaka?” Mbola manana ny mahita Kristianina iray Afrikana Amerikana lazaina izany. Ary ny tsy hiraharaha izay zava-misy ho fantatrareo. Mety misy ny sasany mainty hoditra ireo fahamarinana izay profiled, fa mifidy ny hanisy raharaha amin'ny fampisehoana mifototra amin'ny hazakazaka diso, ary tsy manaja ny hafa foko izay maty dia toy ny travon.
Deborah Bilbo-hyraka • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:47 aho • navalin'i
Gdoggy, ny zavatra rehetra izay nolazainao dikany. Mainty aho, ary ny renin'ny roa lahy izay aho nanangana ny mahita ny olona noho ny toetrany sy ny hatsaram-panahy tsy ny lokon'ny hodiny. Ny zanakao-lahy efa mitondra ny datin 'fotsy ankizivavy, Hawaii ankizivavy, sns. ary nilaza tamin'izy ireo foana aho, dia tsy olana izany, satria isika rehetra Andriamanitra namorona iray izay marina sy ara-drariny. Fizarazarana izany lehilahy no natao fahiny tao amin'ny Tilikambon'i Babela. Izany lazaina, eo amin'ny fitsarana. Eny, Trayvon ny raharaha dia nalefa dia teo ihany ny safidy ny fitambaran'ny olona maharitra sy izay hisarihana ny saina ho any amin'ny raharaha. Ny zavatra sasany ny olona mainty hoditra dia tsy mahatakatra fa ny mainty hoditra dia mpanavakavaka koa. Tsy maintsy hanao ezaka mba tsy hanome tsiny ny zava-drehetra eo amin'ny hazakazaka. Tsy momba ny hazakazaka irery, dia mikasika ny George Zimmerman tsy mankatò ny polisy izy ireo, rehefa nilaza taminy “Tsy hanaraka.” Ary ny sasany tamin'ny fanatsoahan-kevitra ratsy no nalaina avy amin'ny tsy fankatoavana ny lalàna izay tena any am-parany niaro azy tamin'ny Mijoroa Your Ground lalàna. Mahatsapa fangorahana lehibe ho an'ny fianakavian'i Trayvon, indrindra fa ny reniny tsy noho izy mainty zazalahy fa noho izy reny NY ZAZA! Heloka bevava tsy mety na iza na iza manao izany, afa-tena izy dia manao heloka amin'ny tsy mandeha eo amin'ny sisin-dalana? Zimmerman loatra mailaka hanao zavatra, tokony ho niandry kely kokoa mba hahitana izay Trayvon ny zavatra dia, raha nandeha mba hijery ao am-baravarankely, na miezaka ny mamaky trano varavarana alohan'ny nanaraka azy. Tadidio GEORGE Zimmerman TSY NANKATO mivantana FROM didy fampiharana ny lalàna! Ataovy ny kajy.
gdoggydog05 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:47 aho • navalin'i
Misaotra noho ny fahalalana ny soso-kevitrao. mba mihainoa any Afrikana Amerikana toa anao, no hanome ahy fanantenana. Manaiky aho George Zimmerman niasa adaladala. tokony ho niandry polisy, na dia tezitra izy fa hatao foana amin'ny manodidina tapaka ho….Eny marina ny anao. tsy misy ny tsy, fa tsy mankatò izany isika irery, dont mieritreritra aho fa tokony handeha any am-ponja noho ny fiainana, na ho voampanga ho namono olona. dia tsy maintsy mijery ny zava-nitranga tsirairay. tsy voatery inona no mitranga. aoka aho handroso ohatra. OK ohatra roa izay mitandrina ny mety mieritreritra ao an-tsaina. amin'ny tranga iray, ny olona filanjana…. fantany ny ratsy, fa amin'ny indray mipi-maso ny fahalemena, rehefa nitondra fiara handeha nidina ny lalana izy mandroaka ny milkshake avy amin'ny McDonalds ny varavarankely….. taty aoriana, misy olona mahita ny milshake, dia mihevitra ny ny bunny rabitt (fantatro izany ohatra dia mampihomehy, Mijoro ho amiko) ary swerves, wrecks ny fiara ka maty. inona ny olona meloka ny? vonoan-olona? …. tsy dia meloka amin'izy littering. ota rehetra mitarika ho amin'ny hamono olona. ny fahotana no antony mahatonga an'i Kristy ho faty. Fa eto an-tany, dia tsaraina araka ny heloka bevava, mba hitandro ny filaminana. Okay, eto ny iray hafa mitovy tranga izay kely indrindra mahatonga ny hetsika fanehoan-kevitra lehibe kokoa. Ny olona kamo miasa mafy tsy ampy amin'ny mifantoka manan-danja nandritra ny asa toy ny mikarakara azy 2 taona zanany…. manana ny zaza tao anaty fiara niaraka tamin'ny fiara nifamoivoy sy garazy varavarana teo… manadino ny finday tao an-trano….. antso tonga amin'ny alalan'ny, dia mandany eo amin'ny adiny iray eo amin'ny antso sy mivoaka ary ny zanany efa maty. Inona moa io vehivavy meloka ka tokony ho? Vao ny hakamoana sy ny tsy tonga-tsainareo? tsara, ny zanany tsy afaka hiaro ny tenany. Izy no zaza. Fantany tompon'andraikitra izy sy ny asa tsirambina nahatonga ny fahafatesany. Izany no tsy nahy. Ny zaza tsy nanana anjara tamin'ny it.Only meloka izy. Ok, Zimmerman dia tokony ho meloka ny tsentsina ny rariny ary angamba zavatra hafa …. fa, raha ny marina fa travon nitodika azy ka nokapohiny, ary avy eo dia nitifitra azy. George Zimmerman meloka ka tokony ho tsy nankatò ny polisy. Kanefa misy hafa safidy malalaka antoko anjara. Raha nanana Travon, milaza, 3 safidy….. Run (izy efa ho tena haingana….. miditra ao….. na angamba ho tezitra, ary miatrika George ny antony izy hassling azy. Tsy fantatro izay nataony. Izany no ilay hevitra. Raha niezaka afa-maina ary haza nidina avy Zimmerman, ny vonoan-olona. Fa raha travon, in ny avonavona, te ho tia ady (Takatro tsara izao….taloha, izany dia ho ahy )…. Ary amin'izay fotoana izay dia, izy koa nanao safidy malalaka fanapahan-kevitra izay nilalao tao an-vokany farany. Ny olana dia tsy tsy fantatro izay iray amin'ireo occured. Raha manomboka mamaly ny olona miorina amin'ny ripple vokatry ny lainga, ary ny fahotantsika rehetra….Mino aho fa ho hitanao fa tokony ho mihidy izy rehetra. George zzimmerman meloka ka tokony ho nanakantsakana ny polisy….ary mety ho meloka ny more, fa tsy ho any, ry zareo ka tsy fantatro izay.
Tsaramaso • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:47 aho • navalin'i
Zimmerman tsy hatao voampanga no Amiko, ny hatezerana tena efa. Mivalomainty aho fa ny fanohanana dia tsy mifototra amin'ny hazakazaka mihitsy. Raha ny foko dia nihodina aho hahatsapa 100% toy izany koa ny marina. , Nisy basy oharina amin'ny zanak'osy.
Koa aho mieritreritra fa rehefa ianao no mpamorona ny loza na toe-javatra mampidi-doza.. Meloka ianao amin'ny ankapobeny… FL maniry fotsiny aho nanana lalàna izay mety hanasaziana azy, satria Z nivoaka hitady olana tamin'iny alina iny.
Tena mino aho raha misy polisy nanatona an'i Trayvon, Trayon na dia tezitra, dia mbola ho velona amin'izao fotoana izao. Heveriko izay mahatonga ahy ka tezitra. Jereo fotsiny aho toe-javatra io amin'ny maha-ankizy izay namoy ny ainy natao ho toy izany koa, raha tsy izany more, andraikitra toy ny olona.
pepjrp • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:47 aho • navalin'i
Tsy mahalala ny zava-misy na tsaramaso. Hahazo ny fahamarinana ary angamba ianao dia hahatsapa tsara kokoa.
Rita • Desambra 9, 2014 amin'ny 2:24 PM •
SB, Off ny youtubes rehetra izay ofniesfve indrindra indrindra hitako. Izy dia toy ny mpanavakavaka toy Sharpton sy Jackson. Mbola tsy nisy toy izany ny fireneko embarassed hatramin'ny izany Sob mainty nandresy tamin'ny tsy marina hazakazaka!Rehefa Manao ireo leggings eny AF1 f'king aho voanjo.
Tsy hankatò! Hahazo ny zava-misy. Tsy fantatrao azy rehetra.
Nathanial Poling • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:48 aho • navalin'i
Dia hoy ireo tsy manana ny hanara-dia azy… izay tsy toa ho didy mivantana. koa, ny mpandraharaha ao amin'ny 9-1-1 tsy manana fahefana faratampony. Tena mahatsiravina fa zazalahy ho faty, fa misalasala aho ny tsara nitondra ny ankizilahy dia mandrakariva nanafika Mr. Zimmerman dia nikapoka ny lohany tamin'ny sisin-dalana ary nanapaka ny orony. Izy no ho nangataka azy izay izy ireo, ireo natao ny namaly tamim-panajana, ary nahoana izy ireo no nihazakazaka teo anelanelan'ny trano ao amin'ny fiaraha-monina sy ny fiainana gated mitohy.
pepjrp • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:48 aho • navalin'i
Ny vehivavy mahafinaritra iray Deborah, fa ianareo no mety ho ratsy tahaka rehefa nilaza fa momba George Zimmerman tsy mankatò ny polisy izy ireo, rehefa nilaza taminy “Tsy hanaraka.” Tsy tsy hankatò na iza na iza. Henoy ny feo ao amin'ny Youtube! Hoy izy hoe OK, dia nandeha niverina tany amin'ny kamiao. Izy dia avy tany fofonaina rehefa nanaraka Martin, fa rehefa hoy izy OK, ny fifohana rivotra mavesatra nijanona raha namaly ny fanontaniana roa bebe kokoa momba ny adiresy ho an'ny polisy ary avy eo dia mihantona tahaka ny minitra maromaro efa lasa ary izy milaza mazava tsara fa tsy mahalala izay nandeha Martin. I Martin ihany 50 metatra avy any an-tranony, fa niverina teo amin'ny sehatra. Ny fanehoan-kevitra ny Tadidio GEORGE Zimmerman TSY NANKATO mivantana AVY didy fampiharana ny lalàna dia tanteraka nonfactual ary tsy toa tahaka ny karazana olona izay te hampiely lainga. Ianao no nandainga ho toy ny manana ny 1.000 sy 1.000 ny hafa! Henoy sy fikarohana ary ho hitanao fa Lazaiko aminareo marina tokoa! ary ara-teknika, ny 911 mpandraharaha hoy Zimmerman “Tsy mila anareo hanao izany”. Zimmerman hoy OK ary afaka mandre fa nihazakazaka intsony. Get ny zava-misy tsy mino ny mpanavakavaka lainga.
Andrew Keeter • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:49 aho • navalin'i
Trip Tsy maintsy
satria manazava ny tranga tena tsara.
Ity fifandonana teo Zimmermann sy Martin dia zavatra izay
mitranga isan'andro eto amin'ity firenena ity, ary ho be ny zava-doza tahaka ny an'i
jereo ny tovolahy iray namoy ny ainy, fa bebe kokoa ny loza ny mahita ny haino aman-jery izany hiverina ho
ny foko entin'ny fitsarana tsy misy azo atao tsara ny vokany, raha tsy hita Zimmermann
meloka. Izany alina Trayvon voatifitra
tsy nisy foko profiling amin'ny Zimmermann izay azo porofoina. Ny haino aman-jery miaraka amin'ny Jesse Jackon, Al
Sharpton, Filoha Obama, The New Black Panther Party sy ny hafa ny fotoana lehibe
Olo-malaza Afrikana Amerikana nitsangana mba hanome ny heviny momba izay heveriny
nitranga dia tsy misy afa-tsy Trayvon Martin sy George Zimmermann tena nahafantatra izay
zava-nitranga. Ireo fihetsika namorona ny tafio-drivotra
ny herisetra ara-poko lahateny izay mety tsy ho azo intsony. Mihevitra aho fa tokony hivavaka ho an'ny andaniny sy ny ankilany izany
fitsarana ary mangataka fa dingana mba hampionona ireo izay mandratra, tezitra, ary
sahiran-tsaina momba ity toe-javatra iray manontolo.
I Satana mifehy ny haino aman-jery eto amin'ity firenena ity dia manao izay tiany
izany. Ianao ihany no mandre ny tantara
izay mahazo ny tsara indrindra izany dia ireo haino aman-jery mitanila toby afaka mivarotra
rivotra fotoana ho an'ny orinasa mba hampisehoana barotra.
Ny tiako ho lazaina mainka araka ny hevitrao dia nandidy nandritra ny fotoana ity
fitsarana amin'ny Fox News, CNN, MSNBC sy ny raharaham-barotra mpiray mba afaka mahazo
ny dokambarotra ao amin'ny fivarotana ny vokatra ho an'ny daholobe. Tsy mikasika ny fitaterana ny vaovao momba ny
fahafatesan'ny tovolahy iray lalana eo ny fotoana sy ny olona izay nitifitra azy…..izany
momba ny vola izay no fototry ny ratsy rehetra.
Ireo haino aman-jery toby no mampiseho izany lalana nandritra ny telo
herinandro nanangona vola bebe kokoa fotsiny tia azy. Sahiko ny miloka izy ireo nanantena ny fitsarana handeha eo intsony
mba hahafahan'izy ireo foana raking ao amin'ny tombom-barotra.
Tena marary ny fomba manome be dia be eo amin'ny fiainantsika ny TV sy hankatò azy toy izany
no mpampianatra rehefa tokony mifantoka amin'ny Jesosy. Ianao mihitsy aza ny hira miresaka momba ny mandray
ny masonao aminareo, ka nataony teo Aminy.
Mila maka ny maso eny amin'ny TV sy hifantoka amin'ny fiaraha-monina sy ny amin 'ny fiangonana. Raha mipetraka any California, Virginia, New York,
Montana, Texas, sns… tsy afaka manova ny zava-nitranga in Florida izay Trayvon
dia voatifitra, fa isika kosa dia afaka manova ny fomba fiaraha-monina ny asa. Tsy mampianatra ny zanatsika momba an'Andriamanitra, Jesosy, ary
ny Fanahy Masina. Tsy mifidy fiaraha-monina
mpitarika, manam-pahefana, lehiben'ny polisy, ben'ny tanàna, sns izay mijoro ho an'ny Kristianina
soatoavina sy tsy nihemotra izy rehefa nandrahona izy ireo noho ireo izay mbola manana ny
fisalobonana ny masony. Tsy afaka foana
mifantoka amin'ny zava-mitranga ora miala amin 'ny fiaraha-monina, rehefa misy sahirana
avy amin'ny olana ihany. Fotsy aho 28
lahy izay nanompo ity firenena ity ady ao amin'ny Iraka ady. I Naparitaka tany amin'ny firenena izay manana
na inona na inona ka nahita ny zavatra maro aho, mbola haka ho toy ny fanomezana amin'izao fotoana izao fa ireo
olona manome ny sandriny na ny tongony mba manana.
Nahatonga ahy be Tsikaritro fa misy olana lehibe eo amin'izao tontolo izao noho ny
Niteraka fifamaliana kely foana isika hanao. i Satana
te-rile ny olona ka mahazo azy rehetra Tezitra ny herisetra ara-poko. Olon-kafa nilaza izany ao amin'ny lahatsoratra, nefa aho
milaza izany koa. Ny hany loko tokony ho
voakasika amin'ny ny loko mena-misolo tena ny ran'i Jesosy. Tena mahatsapa ny alahelo ao manana ara-poko
profiling satria fony aho mbola kely ihany aho, ary nanana ny mbola androany hitako
izany. Gdoggydog05 nanao teboka lehibe momba ny
fotsy ny ankizy izay tsy afaka mandeha any amin'ny oniversite satria tsy manana ny an'arivony
dolara lainga manodidina mba mitsoka, fa ny zanaky ny foko hafa dia tratry ny ananany vola
avy amin'ny governemanta mba hanampy azy ireo avy.
Same zavatra mandeha haingana ny asa ao amin'ny sakafo, na raharaham-barotra toy izany. Profiled fanavakavaham-poko aho, tamin'izaho mbola kely
miezaka ny hahazo asa ao amin'ny McDonalds sy ankizy roa izay hafa firazanana dia ahy
nahazo ilay asa ary tsy. Tsy rariny izany,
fa ny fiainana indraindray tsy rariny sy izay mampiseho anao fotsiny hoe i Satana no
mahazo anao. Raha Andriamanitra dia afaka hamela ny
ny fahotana nahoana no volon-koditra ho olana miaraka Aminy? Profiling ara-poko dia avy amin'izao tontolo izao, i Satana
ny mpitondra an'izao tontolo izao i Jesoa raha miverina haka azy indray. Mandra-pahatongan'izany, dia tsy maintsy miaina eto amin'ity tontolo ity, fa
Tsy ho velona ho an'ity izao tontolo izao. izahay
velona ho an'ny zavatra ambony noho izao tontolo izao mametraka ny tenantsika mihoatra noho ny hazakazaka. Isika rehetra dia efa alalan'ny tolona. Ny sasany efa alalan'ny tolona izay teo
vokatry ny loko ny hoditra. Ny sasany
nandeha namaky ny fomba tolona satria ny vatany toa. Ny sasany nandeha namaky anatin'ny tolona izay
dia nahatonga hatrany am-bohoka. Ny sasany nanao
zavatra tsapany na oviana na oviana izy ireo afaka handresy ary inona no nitranga tamin 'ireo olona rehetra ireo
rehefa tonga teo amin'i mahalala an'i Kristy? izy rehetra
dia manampy ny tolona. izy no
aoka isika tsy ho latsaka ary Izy no hitari-dalana antsika amin'ny alalan'ny tolona. Izany Trayvon vs Zimmermann zavatra mila
intsony satria ny didim-pitsarana efa tonga.
Ny rafi-pitsarana no nanao ny asa, ary mila mijery ny
zava-misy. Raha ity raharaha ity teo anelanelan'ny roa
vahoakan 'ny mitovy loko amin'ny maha-firenena antsika dia tsy mbola nandre izany sy ny
didim-pitsarana iray ihany no ho tonga tsy misy mahalala. Mila mamela intsony ny haino aman-jery sy ny
olo-malaza mifehy ny eritreritsika. Raha isika
mametraka ny finoantsika ny olona dia tsy hahomby isika.
Aza mifantoka amin'ny azy izy ka nanao ny nibanjina azy.
shope • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:50 aho • navalin'i
Fotsy hoditra no nanafika mainty hoditra ho tsy misy antony marina. Tsarovy ny KKK?
Matty • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:51 aho • navalin'i
Raha miombon-kevitra tanteraka aho, hoy ny zava-drehetra eto, Heveriko fa zava-dehibe ny manaraka ny zava-misy, fa tsy ny fihetseham-po amin'ity tranga ity. An-toerana ny polisy sy ny FBI no nanapa-kevitra fa tsy fanavakavahana anjara amin'ity raharaha ity. Tsy nahita porofo izy ireo fa Zimmerman profiled Martin miorina amin'ny hazakazaka. Hitan'izy ireo porofo fa Zimmerman profiled Martin mifototra amin'ny asa mampiahiahy. Zimmerman namaly ihany rehefa nanontaniana ny polisy inona no hazakazaka i Martin. Tsy niantso izy ka milaza fa nanaraka ny tanora lehilahy mainty hoditra. Tsy aho hoe: dia tsy ara-poko profiling. Fa ny porofo tsy mamela antsika hanao izany kevitra. Ary mino an-jambany misafidy ny dia ara-poko, raha tsy misy porofo fa zava-misy no mahatonga ny raharaha ara-poko rehefa mila tsy ho. Hazakazaka no tsy niakatra teo amin'ny fitsarana. Raha nino ny fampanoavana Zimmerman dia miasa avy mpanavakavaka antony, tsy araka ny hevitrao, no tsy niakatra? Ny fanenjehana ilaina mba hahazoana ny jurors eo amin'ny lafiny…mandoko Zimmerman ho mpanavakavaka Mety ho ny fomba tsara indrindra hanaovana izany.
Ny olana momba ny nolazainareo dia mampino tena sy mampino ratsy tarehy. Milaza fotsiny aho fa amin'ity tranga ity, mandoko azy io ho toy ny mpanavakavaka raharaha, rehefa tsy ny porofo manohana izany dia mampidi-doza sy salama.
Samuel Coleman • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:51 aho • navalin'i
Jereo ity Video….
Trip I fitiavana sy hanaja anao, ny mozika sy ny hafatra fa miombon-kevitra tanteraka eto ambany Jonathan Sampson….
Manaiky aho fa misy fanavakavahana antoka ankehitriny fa ity raharaha ity haino aman-jery nahazo ny saina dia bunch ny dikany izany.
Ny tranga rehetra izay niresaka momba ny Glen Beck Got 000000000 Media tsara…. Nahoana ??/ bec manana Liberaly Firenena Kristianina tsy izay manaraka ny Ray ny Devoly…. Ary manana filoha izay milalao karatra ve ny hazakazaka minitra .. Nahoana ? Mba hahazoana izay tiany …. tsy noho ny tsy Justice for fahamarinana….
Amin'ny maha-fotsy hoditra ny rahalahiko dia natao tao amin'ny basy fotoana bec fotsy izy.. toy ny fotsy hoditra ny rainy sy ny oniversite ireo namany avy nitory ary natao boribory iray andian-jiolahy ny mainty hoditra fotsy bec ankizilahy dia tsy tokony ho ao amin'io faritra io ny tanàna.. ry rahalahy nahazo namana poleta namaoka ary dia nandefa azy handeha.. Ny raiko nilaza ny tenin'ny Fanahy Masina, mangataka ny lehilahy ” noana ve ianao” ary Andriamanitra nahalala izy ireo tsy nihinana afaka andro vitsivitsy voavonjy Raiko…….
No Tsy izaho mainty olona mahatsapa fa mahatsiravina ny Trayvon Ary raha tena misy fanavakavahana…
Ny Firenena no midina ny tatatra.. Romanina 1. Andriamanitra dia nanome antsika niakatra ho any amin'ny ratsy fitondran-tena saina…. Ny zavatra efa nahita na inona na inona raha oharina amin'ny zava-mitranga ho avy.. Marka ny paroasy, raha manohy Amerika an-dalana fa mandeha dia ho Tsy Ara-dalàna ny hoe Kristianina, ary isika dia namono teny an-dalambe..
Dave • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:51 aho • navalin'i
Mankasitraka ny lahatsoratra, Trip.
Zavatra iray Mino aho fa ny tsara ho antsika Kristianina mba ao an-tsaina dia ny tokony mankahala ny fanavakavahana / ny tsy rariny fe-potoana, na inona na inona endrika na ny lamaody izany na avy amin'ny loko izany mivantana mankany. Ny zavatra mampalahelo momba ny zavatra toy izany raharaha momba Trayvon no matetika lasa hantsana midadasika kokoa & dia toa kokoa ny dingana dia entina backwards fa tsy forwards, satria maro ny toerana misy anao amin'ny lafiny voajanahary mandray (loko ohatra) fa tsy misafidy ny lafiny mifototra amin'ny fahamarinana / ny tsy rariny. Ny fanjakan 'Andriamanitra dia tsy maintsy manova ny fomba ny Mitovy amin'ilay family mbola manao isika dia mahita izao tontolo izao. Tsy maintsy ho ny manao ny marina ny hanao zavatra araka ny amin 'ny hazakazaka. Manana ny ho tia famindram-po momba ny rehefa atosiky ny fitiavan-tena tezitra.
Tsy tena misy olana ara-poko. Izany no olana ny fahotan'ny olombelona izay mampiseho ny tenany amin'ny endrika maro samy hafa, indraindray amin'ny alalan'ny fanaovana lafiny mifototra amin'ny hazakazaka. Ny olona avy amin'ny foko samy hafa rehetra stereotype & piraofilina an'ny eachother. Tsy tokony hanorina loko sasany (hafa noho ny ny) toy ny fahavalo. Ny tsirairay amin'ny mpanota fo stereotype. Tsy ny foko ao & tena farany izay manao izany. Raha manadino fa & miaina ambanin'ny tsipika izany izay andrasana amin'ny fanjakana olom-pirenena, Ho hitaona-dalana, dia mifototra amin'ny hazakazaka & fotsiny farany nanampy ny feo.
Enga anie isika hiady ho rariny izay Ilaina ny niady ho an'ny, fotsiny ho an'ireo tsy afaka mifandray, fa ho an 'ireo izay mila fanampiana na inona na inona. i Satana & Ny fahotana dia ny fahavalo. Ary efa resy Jesosy tamin'ny hazo fijaliana & ny fasana foana. Enga anie isika ho faritana aloha ny loko mena ny hafa, ny loko ny ran 'i Kristy izay namaha antsika ho madio.
Nicole • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:55 aho • navalin'i
I Tena manaiky fa hazakazaka dia tena olana noho ny ota, dia tsy misy holavina. Fa ota mamaritra olana manokana dia manampy antsika amim-pahombiazana kokoa hiatrehana azy ireo. Sex fanondranana eo amin'ny faka, ny filan'ny misimisy olana, fa izay tena hafa noho ny fahotana manokana misimisy ny fiankinan-doha. Manana ny Baiboly maro toy izany ohatra ny fepetra arahana ihany koa. Ary ny olona rehetra dia tokony hiasa amin'ny hafanam-po ny olona nanondro an'i Kristy, ny hany tena vahaolana.
Tsaramaso • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:55 aho • navalin'i
Kristianina aho aloha, mainty faharoa- na fahatelo na hanao ny marina aho Kristianina fotsiny. Manohana Trayvon sy ny fianakaviany, noho izy tsy mainty, fa noho izy zanak'osy. A faty noho ny totohondriny sarotra loatra ny sazy ho an'ny foko na ny feon'ny fieritreretako mba hiatrehana. Trayvon nanana be dia be eo amin'ny fiainana mba hianatra… Moa ve izahay tsy hifarana maso solon'ny maso sy ny, nify solon'ny nify rariny amin'i Jesosy? Mety tsy Trayvon no voatifitra teo amin'ny sandriny na ny tongony? Nahoana ny fony? Fotsiny aho dia malahelo noho ny famoizana ny aina, ka dia tsy mampaninona izay loko izy- Ny zaza maty. Mieritreritra ihany koa aho ho toy ny olon-dehibe, Zimmerman manana andraikitra bebe kokoa (amin'ny masoko) mba hitandrina ny zava-misy tony tsara ny andro. ankehitriny, no nataony fa? Miresaha amin'ny namana fomba izay izy no fiambenana? Andriamanitra irery ihany no mahalala. Ary Andriamanitra ihany no hanome ny tena rariny.
“Ny hany fantatro dia tsy an-trano aho, ary izany [izao tontolo izao] dia tsy izay natao.”
Nathanial Poling • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:56 aho • navalin'i
Ve ianao mihevitra ho manana ho Zimmerman mikendry ny fony? Azoko antoka Zimmerman ho nisafidy ny tsy hamono ny tanora izay niezaka ny nikapoka ny atidoha avy.
Tsaramaso • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:56 aho • navalin'i
Ny bala nandeha mahitsy ny alalan 'ny fo, ka dia ho manan-kery ny mihevitra izay Zimmerman ny fikasana.
Na inona na inona ny safidiny dia tsy afaka manova izay tena nataony. Antoka tsara tarehy aho, raha maratra aho hatao, ary nanana basy (izay inoana), Aho handefa ny kibony, sandry, leg- toeran-kafa afa-tsy ny fony.
Toa efa tsy teo amin'ny ady… fa raha nanana fotoana betsaka ianao mba mikendry afaka tifi-danitra ary aoka ny lehilahy mandositra
Tylor • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:00 aho • navalin'i
andao hanohy miresaka ny olana amin'ny fanavakavahana, Eny. fa mijanona lainga niaraka fanavakavahana amin'ny tranga ity. taorian'ny taona fanangonana porofo ve tsy misy olona dia afaka mahita izay hanamarinana ny porofo ny fanavakavahana ao amin'ny Zimmerman ny taloha, na Ary tamin'iny alina iny. andao mitsahatra manenjika angatra, ary mifantoka amin'ny tena fanavakavahana – toy ny tsara fanahy ny haino aman-jery dia naneho nandritra ity raharaha ity mba manaitra ny fankahalana ara-poko sy masina hanakivy antsika fotsiny mba hampitombo ny naoty.
Tony Cline • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:00 aho • navalin'i
No manavakavaka ny mihevitra fa ny mainty hoditra kokoa ny loza noho ny foko hafa, rehefa Afrikana-Amerikana mahaforona 12.6% ny mponina fa hanolo- 49.7% ny famonoana olona, ary koa ny tena Mizarazara isan-jaton'ny fanolanana, herisetra, halatra, ary heloka bevava hafa rehetra ny FBI mamantatra afa-tsy DUI? Izany ve no manavakavaka, na ny manan-tsaina fotsiny no fanapahan-kevitra mifototra amin'ny zava-misy mitombina? Tsy miteny aho hoe fa ny fanavakavahana tsy misy; izany no, Ary ny tanety rehetra lafiny. Na izany aza, misy zavatra hafa mihoatra noho ny resaka hoe: izay rehetra mahatsapa fa mampidi-doza ny olona manodidina izay kokoa ny antontan'isa mety ho mpanao heloka bevava mahery setra dia manavakavaka.
Washington DC Evanjelisitra • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:00 aho • navalin'i
“Ry malala, tsy mamaly ratsy, fa avelao ho any ny fahatezeran'Andriamanitra, fa voasoratra hoe, "Ahy ny famaliana, Izaho no hamaly, hoy Jehovah. "To kosa, "Raha noana ny fahavalonao, omeo hanina izy; raha mangetaheta izy, omeo zavatra hosotroiny; fa raha manao izany ianao, dia hanambatra vainafo ho eo an-dohany. "Aza mety ho resin'ny ratsy, fa reseo amin'ny soa ny ratsy.” ~ Romans 12:19-21
C. • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:01 aho • navalin'i
Tsy tena tsy mitovy hevitra amin'ny hoe na inona na inona ianao, indrindra noho ny fomba ratsy tarehy dia rehefa tsy nomena ny tombontsoan'ny ny fisalasalana amin'ny isan'andro isan'andro ireo fotoana. Fa rehefa nisy namana sasany polisy Fantatro fa, fa ny sasany amin'izy ireo, fanomezana soa ny fisalasalana ho nahazo azy ireo namoy ny ainy. Tontolo ity, ka torotoro sy nasty indraindray, amin'ny fahatsapana ho meloka sy ny tratran'ny mpanara manerana ny toerana. Jesosy ihany no afaka misintona antsika nivoaka avy tany.
Halako fa tsy maintsy hiatrika izany zavatra. Ary halako fa amin'ny fomba profiling dia faran'izay ratsy tarehy, mahatsiravina tsy maintsy (tsy amin'ny raharaha Zimmerman). Ny mafy koa, miaraka amin'ny fampahalalam-baovao sy ny kolontsaina izay mahafaoka ny karazana sary izay efa mitory misokatra, mahery setra, miavonavona ny fandikan-dalàna. Ary fa misy olona manao vola eny io ny herisetra sy ny kolontsaina Godlessness. Ary dia maro ny olona tsy hahatakatra ny zavatra toy izany ny ho ilay bandy afaka miraharaha loatra ny mahafantatra ny dikan'ny hoe ho ilay bandy.
Tiako fa ny fitiavan'Andriamanitra dia be dia be mahery noho ny an'izao tontolo izao. Maniry fotsiny aho fa ny fitiavan'Andriamanitra ho matetika kokoa aseho eto amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny antsika, fa tsy antsika na dia eo aza.
Ny tena resaka dia tokony hanohy. :)
Great zavatra Mr. Lee. TAHIN'ANDRIAMANITRA!
apallo95 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:01 aho • navalin'i
raha mbola fanavakavahana dia tena olana be dia be ny olona toa adino fa ny tenany Zimmerman dia Latino. mametraka fotsiny fa avy ao tahaka ny zava-misy fa tokony ho foana ao an-tsaina rehefa Misy fanazavana momba ity raharaha ity
Lizzi • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:01 aho • navalin'i
Mino aho fa tena fomba mahomby ny miady fanavakavahana dia ny hanana matahotra an'Andriamanitra, marin-toetra mainty olona izay miaina fiainana izay hanimba ny stereotype ho antsika mba manondro ny ary miteny hoe tsia, ny fahotana no olana, tsy hazakazaka. Manana heviny avo dia avo ny ankamaroan'ny ny mainty lehilahy sy vehivavy izay efa tombontsoa aho mba hiantso namana sy mpanoro hevitra. Aho mety ho mitanila ny fitia noho ny zavatra hafa… Vokatr'izay Records no antony goavana ity, ho blonde ankizivavy fivoarana eo amin'ny fahasoavana sy hery ho hugely araka ny mozika. Inona no ataonao dia tena manampy.
Lynn • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:02 aho • navalin'i
Amena dia Amena!! Tsy maintsy tia ny fitiavan 'i Kristy sy hivavaka ho an'ny fianakaviana izay mandray anjara. Fanavakavahana dia tena ka mahavaky fo ho ahy ny mahita. Misaotra anao nizara izany!
Michael • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:02 aho • navalin'i
Nanoratra izany tany am-boalohany io hariva talohan'ny namaky ny lahatsoratra, izay tanteraka mahazo an-dalana, ary nihevitra aho hizara izany
Koa raha ianao no niafina ambany vatolampy no hita Zimmerman tsy meloka ny andro hafa. Ny sasany dia hiarahaba, olon-kafa no hitomany maimbo. Didy io no nampisaraka ny firenena, ary indraindray na dia ny fiangonana. Aho namaky ny fanehoan-kevitra amin'izao fotoana izao avy amin'ny olona iray ao amin'ny haino aman-jery, ary ny fanehoan-kevitra tena nanao ny rako vay. Manokana aho nanome izany be dia be ny hevitra, ary manana ny heviny, fa ity lahatsoratra ity dia tsy mikasika ny zavatra aho na tsy mieritreritra ny Zimmerman ny aquital. Nilaza i Jesosy fa ny mpangalatra tsy avy hangalatra, hamono ary handringana….(John 10:10) Division dia Mangina ny Hepatita. Izany mitombo avy amin'ny voan'ny mangidy izay nambolena tao am-pontsika isika, rehefa hiala amin'io ny masontsika Jesosy sy ny hivoaka, raha tsy mitandrina isika. Luke 6:45 hoy i “Ny olona tsara fanahy avy amin'ny tahiry tsara fony mamoaka zavatra tsara; ary ny ratsy lehilahy anankiray avy amin'ny rakitra ratsy mamoaka zavatra ratsy; ho an'ny vavany miteny avy izay rehetra eo aminy ny fony. ”
Hoy i Jesosy rehefa nanomboka ny fanompoany ny desciples politcal nahita an'i Jesosy ho mafana fo. Nanantena an'i Jesosy izy ireo mba swoop amin'ny ratsy sy ny tsara rehetra izay Roma izay fanaony tamin'ny Jiosy. Angamba izy ireo niaraka tamin'i Jesosy maninona famoretana romanina sasany loha raha midika rectifying taona ny fibodoana. Nefa hatramin'ny voalohany i Jesoa nitory ny fitiavana sy ny mpanompo Hood. Tamin'ny fotoana ny mpianatra sasany probablly-kevitra avy i Jesosy tsy ho Bruce Lee na iza na iza. Manontany tena aho hoe inona no nataon'izy ireo kosa izany manokana? Ny Jiosy efa nataonareo tamin'ny fibodoana ho ela be. Raha ny marina Mino aho fa avy ao amin'ny boky farany ao amin'ny Testamenta Taloha ho amin'ny andron'i Jesosy dia zavatra toy ny 400 taona. Ireo ambioka ny lolompo sy ny mangidy tsy ho variana efa nandroso, ka dia vonona ny hahazo na dia. Ny Mesia tonga tamin'ny farany, ary tonga ny fotoana hetsika ny miaramila, hanolotra pitchforks sy haka an-keriny ny lapa. Fa raha mbola mandrehitra ny fanilo i Jesosy avy nitory tia ny namanao ary ataovy ho an'ny sasany araka izay tianao azy ireo hanao aminareo. Izany maintsy handroaka azy adala. Mba hametraka faniratsirana ny ratra i Jesosy nihantona hiala amin'ny hazo fijaliana, Nangataka fa ny Ray dia mamelà ny helony, satria tsy tena fantany izay ataony izy ireo. Ka inona izany no Dikan'izany Rehetra?
I Jesosy mafàna fo ny fitiavana sy ho mpiara-manompo isika, dia niangavy, tsy nodidiana isika mba hanao toy izany koa. Satria amin'ny faran'ny andro Ny fitiavana no zavatra tokana izay miova mihitsy na inona na inona. Afaka haka an-keriny ny lapa, ary fanoherana izay rehetra tiantsika, saingy misy foana miafina ho fandaharam-potoana raha tsy mahafantatra izany aloha. Ny fitiavana manasitrana ny fo naratra sy mampiray ny fifandraisana tapaka. Love, mampandroso, mampirisika, ary ny fiononana. Ny fitiavana dia tsy manameloka, na mandà, dia mahafaoka. Haingana izahay hanadino fa fony isika mbola mpanota i Kristy REHETRA maty ny ra nalatsany dia natao ho an'ny: ny manan-karena, ny mahantra, ny mainty, ny fotsy, (ary ny alokaloka eo anelanelan'ny)ny mahitsy, ny pelaka, ny kamboty, ny fanantenana, ny tsy manan-kialofana, ny ampahorina, ny nolavina, ny ara-pivavahana, Islamika, ny mpampihorohoro, ny ankizy molester ny mpangalatra, ny filohan'ny banky, ny mpahay lalàna, ny mpamono afo, mpanao politika, dokotera, ary ny olona hafa rehetra izay nanatsoaka ny fofonaina rehetra eto an-tany, Jesosy dia maty ho azy ireo. Raha misy hetsi-panoherana mba ho dia aoka izany no hatao amin'ny vavahadin 'ny helo ny ampakarina Kristy, nilaza fa ho tia, dia hanompo, dia mamela heloka toy ny nataon'i Jesosy ho antsika.
Eric • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:02 aho • navalin'i
Nahoana no African American, Tsy hoe ny tenako American irlandey, Fotsiny aho Amerikana, Eto aho no teraka fa tsy tany Irlandy. Jereo izany no misy fanavakavahana manomboka mizara niakatra ho any an vondrona, Dia tsara noho izahay ianao, manomboka. Izany fanavakavahana miteraka fanavakavahana, na tao an-diso, Trayvon, ho an'ny hanakaratoka Georges’ doha ho any an-tany, miampy raha tsy manao na inona na inona no ratsy nahoana no tsy izy hanaraka fotsiny? George Tokony ho nihaino ny dispatcher ary aoka ny polisy hiatrika izany. Fa afo andoroana ny sainam-pirenena Amerikana, tsy African American, Meksikana Amerikana, American irlandey, anglisy American, na ny sainam-pirenena Amerikana Scottish, marina Amerikana, tsy mety. Izany no toy ny hanitsaka ny fon 'ny rehetra izay maty Amerikana ny fiarovana ny zava-drehetra dia mijoro ho. Ny fandrahonana ho faty an'i Georges fianakaviana sy ny maro amin'ny anaran'i Trayvon famonoana izay nitranga ny fomba diso. Izao no lazain'i Jehovah hiverina aminy ny takolany hafa, na dia nanadino izay miandraikitra eto. Trayvon Tsy olo-masina, ary George dia tsy mpamono olona, izy ireo toe-javatra roa niharan'ny. Tsy misy olona tokony ho nahazo nikapoka ka tsy misy tokony ho namoy ny ainy. Izany rehetra lalao ara-politika ho an'ny hery sy ny mpamitaka lehibe dia nahazo izay tiany. Mijanona miorim-paka ao amin'ny haino aman-jery tsy teny.
Tsaramaso • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:06 aho • navalin'i
Tiako ho heverina fotsiny Amerikana. Tsy Afrikana Amerikana. Indrisy fa ny fiaraha-monina dia tsy hamela ahy fa. Izaho no toy ny Amerikana toy ny misy olona hafa. Fa ny haino aman-jery Niteraka be ny fizarana.. ary ny olona efa nividy ao anatiny.
Tsaroako iray amin'ireo asa voalohany aho. Ny vehivavy fotsy nipetraka teo anilako ka niteny tamiko.. “Ary fantatrao ve ianao no voalohany -American Afrikana efa nanakarama?” Nitsiky izy ary nijery ka mirehareha. Mandritra izany fotoana izany, Tsapako menatra, toy ny fampisehoana ny sasany gidro izay tonga tao amin'ny Zoo vonona mba hampisehoana azy ireo ny fomba tsara ny “voalohany” mainty mpiasa hanao. Nahoana no tsy maintsy milaza izy fa avy ka hanao ahy hahatsapa izany… hafahafa? Fotsiny aho te-ho ara-dalàna ny zanak'osy amin'ny asa faharoa avy tany amin'ny oniversite, fa lasa aho fa mikorontana-misavoritaka..
Koa nahoana no lazaiko Afrikana Amerikana? tsara, no manana safidy?
gabetaviano • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:06 aho • navalin'i
Awesome teny, Trip. Miala tsiny ianao maintsy handeha hamaky ny toe-javatra anananao. I mampitolagaga anay ianareo, satria niresaka momba izany avy, ary ho fampahatsiahivana ireo amintsika izay tsy. Press amin'ny!!!
David • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:07 aho • navalin'i
Izany nisy tsy misy ifandraisany amin'ny fanavakavahana. Oh, Hadinoko, mainty ianao ka ny hevitrao fa manana ny fahefana ara-moraly hiampanga olona ny fanavakavahana. Ny sisa antsika rehetra mpanavakavaka. miala tsiny, fa efa maimbo fako lava ampy. Fotoana entana ao fako sy ny eny izao no andro hifindra amin'ny.
geebee • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:08 aho • navalin'i
Miala tsiny aho efa niaina profiling ara-poko eo amin'ny fiainanao. I, koa, no Nibanjina amin'ny sy tsy niraharaha fa fotsiny hoe:
“salama” mba hitahiry mpitan-tsoratra na ry namana no handeha eny an-dalana. Izaho ihany koa no nandrahona ary nilaza aho fa tsy anisan'ny ao amin'ny manodidina ary nanana fialan-tsasatra tsara kokoa, satria izaho fotsy. Ny zanako-vavy dia efa nandà ny zo hifidy indroa, fa tsy mihevitra izy “disenfranchised”. Kanefa dia tsy manana fankahalana mongers toy ny Al Sharpton sy theNAACP niteny ho ahy; afa-tsy ny momba ahy. Amin'ny maha-firenena, sy tahaka ny Tenan'i Kristy, Mihevitra aho fa tsy mila mieritreritra momba ny hazakazaka sy ny fahasamihafana sy ny fahasamihafana, Mila miverina amin'ny maha- “mpandrendrika American lehibe vilany” amin'ny maha-firenena, ary ny hampahatsiahy ny tenantsika fa mitovy isika rehetra teo am-pototry ny hazo fijaliana tahaka ny Fiangonana. Arakaraka ny hazakazaka sy ny fanavakavaham-bolonkoditra Misy fanazavana momba, dia vao mainka aho mahatsapa fankahalana, izay kosa, ho toy ny rafitra velona, Mahatonga ahy mampiahiahy ny hafa firazanana sy tsy dia mety hanitatra ny filazantsara amin'ny olona any. Ary raha tsy te-ho raisina toy ny azo atao jiolahimboto, na ny lehilahy hendry, na redneck, aza manao toy ny fitafiana, ary ny anankiray.
Leslie Pollard Stivers • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:08 aho • navalin'i
Tiako ity lahatsoratra ity. I faly nandre ny zavatra niainany sy ny foko fialan-tsasatra ny mitadidy ny zava-misy fa ny profiling Mitranga isan'andro. Tsy afaka manampy, na izany aza, hanontany izay sy ny hafa mieritreritra izay ity raharaha ity, hoy ny mifanohitra fanavakavahana. Dia toa ny ahy fa ny mainty fiaraha-monina amin'izao fotoana izao no tsy miraharaha ny zava-misy tanteraka ny raharaha (dia afaka mijery ny zavatra rehetra ao amin'ny YouTube) ary singling ao amin'ny profiling zavatra (tsy misy mahalala ny marina raha toa Zimmerman nanao izany sy ny toetra hita ao amin'ny fitsarana dia maneho fa tsy toy ny GZ mpanavakavaka toy ny olona no nampitahotra azy avy ho). Ahoana raha i Trayvon avo (rongony ny rafitra, hita ao amin'ny autopsy)? Ahoana raha ny toetrany-kevitra mba ho hoe jiolahim-boto? Ahoana raha nataony raha ny marina, ary hanipy George hanenjika ny kapoka voalohany? Izany zavatra izany ary ny maro hafa no noresahina ela tao amin'ny fitsarana sy ny porofo maneho fa na Zimmerman afaka nanao safidy hendry (tsy azonay avy ao an-kamiao, ohatra), fa tsy hanao na inona na inona tsy ara-dalàna. Tsy fantatsika rehetra ny valin 'ireo fanontaniana ireo, fa satria ny tovolahy mainty tsy midika fa raha toa ka manao toy ny jiolahimboto izy, dia tsy ho toy ny profiled. Tsy misy olona toa manaiky fa feno herisetra zanak'osy (ny Ray any an-Sanford azy noho izy naaton'ny noho ny ady, nangalatra, zava-mahadomelina, sns) koa nanao fanapahan-kevitra diso. Te-hahita lahatsoratra avy amin'ny mainty hoditra na lehilahy na vehivavy izay mitaraina fa tsy hisy intsony ny thuggery ao anatin'ny fiaraha-monina eo amin'ny. Tiako mba ho vitsy an'isa izahay momba ny raharaham-barotra ny fampianarana ny tanora lahy sy vavy mba hijery bebe kokoa tahaka an'i Kristy. Na ny zanako roa lahy kely dia kely maivana hoditra noho izaho ary mety tsy mitovy ny zavatra niainana izay nataoko, Dia lazao aminy mba mitsiky amin'ny olona izay clutch ny kitapo ka tsy handao fanaovan-tsoa. Tsy misy mandà izany fanavakavaham-bolonkoditra, fa toa ahy fa ninia ratsy avy amin'ny mainty hoditra fotoana izao. Ny fankahalana fotsy seethes amin'ny ratsy sy ny tsy fahalalana. Ny olona no manao ny tena zavatra dia mankahala. Tsy misy fiadanana, tsy misy famelan-keloka, farany tsy nino an'Andriamanitra miankavanana ny ratsy eto amin'izao tontolo izao, na hatoky Azy mba hanavotra azy rehetra. Mitsambikina ny tsirairay eo amin'ny fahafahana hiantso olona iray manavakavaka. Kristianina tonga hanao ny marina amin'ny zava-drehetra. Tsy afaka milalao ny hazakazaka lalao, isika momba ny fanovana ny kolontsaina–tsy manao tsaratsara kokoa “mainty” kolontsaina na “fotsy” kolontsaina, fa mitana ka manandratra ny Judeo-Christian kolontsaina izay mamporisika ny zavatra toy ny fitiavana, fandriampahalemana, sy ny famelan-keloka. Ny Kristianina dia tsy maintsy mahita ity raharaha ity ao amin'ny fahazavana ny fahamarinana, ary tsy mandray anjara amin'ny ady sy ny mpilalao ody fitarainan'ny fihazana izay mitranga amin'izao fotoana izao. Mivavaha ho an'ny fianakaviana. Kristy Mamindrà fo aminay rehetra. More ny heviny momba hazakazaka & kolontsaina eto: http://wp.me/p2C5Cy-VY I mandray vahiny sy ny feedback.
Scott Lee Sherwood • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:08 aho • navalin'i
Amin'ny maha-mpiara-rahalahy ao amin'i Kristy, Dia lazao aloha hoe: Fantatro fa sarotra izany no olana fa ny fiangonana iray manontolo dia toa mahazo fatra rehetra amin'ny fotoana tsy misy tena vahaolana, na dia ny “vahaolana” (Jesosy) marina next amintsika. Àry aho no te-haneho ny fitiavan 'Andriamanitra ao amin'ny valin-ny bilaogy, na inona na inona ny faharesen-dahatra.
Amin'ny mamaky ny bilaogy, ny hevitra dia toa mampiseho fa GZ tokony ho voaheloka ho namono olona 2 mari-pahaizana, satria fotsiny izy “fanavakavaham-poko profiled” TM. Tsy fomba ny rafi-pitsarana asa. Tsy afaka mangataka ny mpitsara mba hanome anareo ny “fitondran-tena” handresy ny rariny sy horefesiko ny hafa fotsiny, satria lehilahy no tsy tia ny loko ny hoditra. Ny zava-misy dia hoe tsy GZ fotsy izay na dia eo aza ny haino aman-jery / NAACP / Celebrity Hollywood / sy Rev Al te anao hino. Izy no iray foko samy hafa ny Hispanika / Latino taranaka sy ny lehibe tao amin'ny kolontsaina maro fianakaviana. izy “profiled” TM noho ny mangalatra izay nitranga vao haingana teo amin'ny fiaraha-monina gated. Tamin'ny hoodie amin'ny sy pataloha jeans, olona manaraka avy ao aoriana, Tsy afaka miteny ny zavatra hazakazaka / foko izy ireo. I Coach baolina kitra sy ny manao hoodies ny fotoana rehetra ao amin'ny fahalavoana, ny alika sy ny Nitrerona ahy no tonga ao an-tranoko aho rehefa nanana ny hoodie eo satria tsy nahalala ahy. Tsy afaka mandeha an-bola ny ankamaroan'ny banky na sendikà manao hoodie. Dia mijanona ka hanontany anareo mba hanala azy. Izany ihany koa ny satroka sy ny Sunglasses ao amin'ny andrim-panjakana tena ara-bola. izy ireo “fanavakavaham-poko profiling”? Tsia mazava ho azy, nefa “profiling”, ary izany no tsy ratsy. Isika rehetra dia samy manao izany ny roa tonta mandritra ny fotoana. ary Eny, Efa nanaraka ny fivarotana fiarovana eo anatrehan'i, ary efa nisy intsony ny polisy ary nanontany teo anatrehan'i, ary amin'ny toeram-pivarotana rehetra akaikin'ny sekoly ambony indrindra, dia tsy hamela ireo mpianatra avy ao amin'ny backpacks ary mametra ny isan'ny mpianatra ao amin'ny fivarotana. Mipetraka any California ary ny tanàna dia ho velona dia kolontsaina maro. Amin'ny ankamaroan'ny fivarotana tahaka ny eo an-toerana sy Walmart Safeway, ny fiarovana na ny very fisorohana ekipa maro vitsy an'isa mainty, Azia, Hispanika foko. Raha misy olona miahiahy ny mety manao ny heloka bevava, na ny fanomezana toerana ny “piraofilina”, no fanavakavahana raha manaraka azy ireo na ny manodidina ny toeram-pivarotana manara-maso azy, na mijanona mihitsy aza izy ireo noho ny nanontany izy ireo raha samy mainty ..? Hitako izany hitranga, noho izany dia misy fanontaniana ara-dalàna.
Dia toa ny ahy fa ny ankamaroan'ny ry namana izay tezitra ny didim-pitsarana ary satria ny feo momba izany indrindra no ranting sao ny TM dia voahitsakitsaka zo sivily. Ankehitriny ny andro sy taona, amin'ny Miely patrana ny heloka bevava sy ny tsy firaharahiana ny fiainana olombelona, izay teny toy ny manome voninahitra sy ny tsy fivadihany very amin'ny ranomasina ny “inona no ao anatiny ho ahy” ary ny toe-tsaina miely patrana jo, ny ankamaroan 'ireo ry namana tsy afaka hanome anao ny tsara famaritana ny “zo sivily”. Izy ireo ao ambadiky ny jackwagons nilahatra toy ny Rev Al Sharpton, ary ny NAACP sy manararaotra ny tsy fahalalana ara-tsosialy avy amin'ny olona tahaka an'i Rahely sy anaovany ny Jeantel ny peta-drindrina zaza noho ny fanavakavahana tranga. Marina? Ireo no niady ry namana Naka ny “zo sivily” ny fanavakavahana ny mainty hoditra ady ho an'ny fiaraha-monina? Ireo izay te-hijoro amin'ny? Mba miangavy re. Mino aho fa Dr. Martin Luther King nitomany raha nahita izay ny fampisehoana toy izany ry namana efa niova ny fanavakavaham-bolonkoditra sy ny zo sivily ady, an-. Ny zava-misy fa ny fanavakavahana dia tsy ny tena fahavalo ho an'ny mainty hoditra intsony Amerika. Tsy dia akaiky. Black amin'ny Black heloka bevava, birthed avy mandrakariva rava ny fianakaviana, ary catalyzed rafitra iray izay milaza fa ny governemanta no ahazoan'ny zavatra, ary no ho rainao mpitaiza anao, dia tsara toerana mba hanombohana, Raha tena te-namely ny lehibe indrindra goavam-be ny fiaraha-monina mainty tarehy. Mandritra izany fotoana izany, misy ny sasany izay mifantoka amin'ny vahaolana ary misimisy sasany amin'ireo toe-tsaina. Ny olona tatsy amin'ny National Center for Public Policy Research sy ny Project 21 Initiative dia ry namana fa Izaho no hampifanaraka sy hanohana ny tenako amin'ny mandritra ny andro.
ny farany, Ny fitiavan'i Kristy no handresy. Izany foana no. Ary izany dia hitranga fo iray amin'ny fotoana.
Avelao aho mifarana amin'ny filazana fa fantatro fa misy fanavakavahana sy mitranga isan'andro. Saingy isika no lehibe kokoa noho Ilay. Firazanana na foko rehetra izay efa niaina ny ratsy manaikitra ny fanavakavahana no noforonin'Andriamanitra handresy sy ho lehibe kokoa noho Ilay fankahalana. Ny lehilahy sy vehivavy lehibe amin'ny tantara Amerikana mainty hoditra no tena nanao ny marika ho an'ny taranaka ny tsy namela fanavakavahana haringako izy. Toy ny hoe nitsangana ambonin'ny toe-javatra sy ny heriny ihany. Afaka intsony izy ireo, ary nampiasa fanavakavahana toy ny fialan-tsiny, nefa tsy. Io faharetana sy ny hery avy amin 'Andriamanitra Tsitoha no misy na inona na inona isika ho any an tap na inona na inona na dia iray akory antsika hiatrika.
Misaotra mamaky teny, ary Andriamanitra hitahy anao ..!!
alan_d • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:09 aho • navalin'i
Trip, Ankasitrahako ny nahita fianarana, nonpartisan, Fijery kristianina ity lahatsoratra ity. Fotsiny mba haka azy avy any, 26yr aho taloha grad fotsy mpianatra avy any AL monina ao OK. Na izany aza, rehefa nahazo diplaoma avy any Auburn 4 taona maro lasa izay, Aho mba ho hipetraka any amin'ny D.R. Congo for 2 taona. Ekeko, mihalehibe, talohan'ny Kristianina aho, Aho betsaka ny mpanavakavaka toy ny 85% ny suburban kolontsaina manodidina ahy dia. Na izany aza, fo vaovao-fa i Kristy no nanome ahy niova fa.
Ny teboka dia, raha mbola nipetraka tany amin'ny Congo, ara-bakiteny ny olona rehetra manodidina ahy na oviana na nanome fotoana dia mainty. Tiako ny vahoaka nipetraka manodidina aho, niasa manodidina, ary saika ny olona rehetra no nihaona. Na izany aza, amin'izany kolontsaina, Mbola nisy olona I profiled. Ry zatovolahy mandeha amin'ny tsy misy na inona na inona an-tsena hivarotra, na liana amin'ny zavatra, ohatra. Ny paosy no nanala indroa, na dia Haingana ampy haka ny ry zalahy sy hahazo indray ny Nokia biriky. koa, * ny polisy ireo mpanao kolikoly ankapobeny *. Profiled azy ireo aho isaky ny nahita na iza na iza aho amin'ny fanamiana. Nijanona aho, voasambotra, na herisetra fotoana mihoatra noho ny Mahisa ny polisy / miaramila, toy ny maro amin'ireo mponina izay fantatro. Ve fa manao izany ho ahy ny mpanavakavaka piraofilina ireo karazana olona satria sendra mainty? Toy izany koa, ahoana no mpanavakavaka rehefa mihetsika ny vadiko ho eny am-pita ny vatana, rehefa lasa mandeha ny fotsy hoditra izay mihevitra aho fa toa mampiahiahy? Ny mitovy hevitra, ary manaiky aho fa tsy fanavakavahana. Ny hevitra dia hoe profiling olombelona dia voajanahary Fahendrena sy azo * * mpanavakavaka, fa tsy foana.
Adolf • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:09 aho • navalin'i
Ary raha misy olona tsy te-ho mpanao heloka bevava, angamba tsy tokony hanao ny fanamiana. ankehitriny, efa ho 70 taona, taorian'ny Ady Lehibe 2. Inona no hevitrao ny olona manao fanamiana Nazi? Izany dia midika hoe fitafiana tsara fotsiny?
gdoggydog05 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:10 aho • navalin'i
ihany koa. Tsapako fa mpanavakavaka. ho mari-pankasitrahana na ny fananarana miorina amin'ny hazakazaka. ary dia manavakavaka fa raha ny fotsy mpanao gazety, toa ahy….ianao hatao voaroaka raha milaza ny zavatra diso momba ny hazakazaka. fa raha ny mainty mpanao gazety no afaka milaza fa fotsy kokoa ny ankizy dia tsy maintsy ho faty, mba for America ny mahatakatra fanavakavahana (rohy amin'ny ambany). mijery, izany no teboka. harping ihany aho momba ireo zavatra ireo, satria te kristiana ho fantatsika fa hisy olana foana ny hazakazaka amin'ny andaniny sy ny ankilany. Tsy mino aho fa tokony handeha any amin'ny lalana toy izany izao tontolo izao sy ny eo aminy latch. fa ohatra ny fanavakavahana rehetra manohitra mainty hoditra, dia afaka mahita ny sasany manohitra hafa firazanana. na aho hahatakatra fa ny fanandevozana dia zavatra nahatsiravina sy ny ancesters, tena, dia tsy hahatakatra fotsy ny mainty hoditra rahalahiko sy anabaviko razambe efa through.we tsy tokony cater akory hazakazaka mba miezaka “equalize” zavatra. porofo in hevitra dia hoe ilay tena Andriamanitra fa tsy hanao izany!!! Andriamanitra Mahery Indrindra ve tanany vatsim-pianarana mifototra amin'ny hazakazaka??? TSY TSY TSY. Mety mifototra amin'ny fidiram-bola. Fa Andriamanitra haneho famindram-po fa tsy mifototra amin'ny hazakazaka. Ny Isiraely no voafidy, tsy noho ny na inona na inona ao aminy, fa amin'Andriamanitra kosa tanjona tsara ihany. My “namana taloha” tezitra izany, ary izany ihany no mampitombo ny mpanavakavaka eritreriny. “ny dika omena” ary “droa fitsipika” hahatezitra azy. Ary ny tohan-kevitra toy izany, ny milaza “cant fotsiny aho hahatakatra ny tolona” dia lalina dratsy ho ahy. dia milaza fa izaho ihany no afaka mandeha lavitra toy izany niaraka tamin'ny rahalahy mainty hoditra… Ho tena aho na oviana na oviana ho rahalahiny aza, antony tsy hahatakatra ny zavatra ny te-ho azy ireo. Izao no voalaza fa ny zavatra niainan'ny lehilahy hizara ny mainty hoditra antsika, mihoatra noho ny mampiray antsika amin'i Kristy. Izany no hitako tsy nahy lahatsoratra ity hoe. I marina no mahafantatra hoe manao ahoana izany ho profiled. Zanak'osy aho indray mandeha. Isika rehetra dia mandalo fotoana sarotra. Mety tsy fantatrareo izay ny te-hanana Neny amin'ny homamiadana, toa ahy. Na mety tsy fantany izay izany hoe halefa any an-trano ho an'ny ankizy ratsy Fony aho 12 taona, tsy niraharaha ny ny fotsy, manankarena, suburban fianakaviana sy ny sisa mba manontany tena hoe nahoana izy ireo no tsy tia ahy. Aoka isika tsy hanomboka ny fitandremana isa eto. Izany dia Diso tanteraka dratsy mba hifantoka amin'ny fomba fijery tsy manam-paharoa ireo traikefa. Andeha isika hiara-tonga, ary faly fa efa nomena fahasoavana rehefa mendrika ny fahafatesana.
Alex Ericsson • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:11 aho • navalin'i
Tena misalasala aho fa Trip dia mitady ny hafindrany rahalahy sy anabavy miorina amin'ny hazakazaka. Izy no iray amin'ny lehilahy mainty hoditra ny ankamaroan'ny fotsy ho an'ny fiangonana izay manana matetika sy tsy Pause naneho fankasitrahany. Fa misy ny singa ny maha mainty hoditra any Amerika izay tsy manam-paharoa sy ny tsara amin'ny hafa incongruent zavatra niainany ara-kolontsaina!
koa miangavy, I mangataka anareo rehetra, hahatakatra ny maha samy hafa ny tena miara-miory sy ny firaisam-po manan-danja. Rehefa miara-mandeha amin'ny rahalahy sy anabavy ao amin'i Kristy, vitsy dia hanana fahafahana torohevitra avy amin'ny toerana fiaraha-miory nolanjain'efa-nizara traikefa, fa matetika isika dia hatao hoe ny marary, asa manan-danja be fitiavana fiaraha-miory. Izany no izay mihaino ny olona efa nandalo zava-tsarotra, tsy manamaivana ny marina ataon 'ny na ny fijaliany amin'ny alalan'ny fanatitra manohitra ny ohatra ny trompetrany ny zavatra niainany, ary matetika mihevitra ho manana ho fa ny torohevitra, na dia hanompo ny olona, Tsy avy hatrany no fanafody hanasitranana ny mampitony ny fanaintainana, fahasosorana, na tezitra mihitsy aza.
Na inona na inona misy tsininy fomba fijery momba ity raharaha ity na ny hazakazaka, be loatra ny
antsika ao amin'ny Fiangonana (ESP. amin'ny alalan'ny haino aman-jery sosialy) savoka nahay nandaha-teny eo amin'ny zavatra 'izao tontolo izao, fa farany
maneno bebe kokoa tahaka an'i Joba mafy fo namana. Izao no fotoana olona sahiran-tsaina, ary tena tezitra. Olona maro loko dia tsy sitrany ny vokatry ny tranga ity. Ny ankamaroan'izy ireo dia tena mila faharetana sy ny fiononana. Tsy ny lahateny eo amin'ny rafitra ara-dalàna na “kolikoly haino aman-jery”, tsy jono-ary-jiro ohatra, na manambany punditry ara-politika. Nanondro azy ireo ho any amin'i Jesosy tahaka anao amin'ny fahalemem-panahy.
Dina Robinson • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:11 aho • navalin'i
Fony aho mbola ankizivavy, about fototra taona, Fanavakavaham-poko aho profiled tany izay avy eo Eckerd Drug Store (ankehitriny CVS). Tsy fantatro tamin'izany taona izay nitranga tamiko, fa fantatro toy ny zaza fa tsy mety. Aho niaraka tamin'ny reniko aho, ary efa nahazo $20. Nihevitra aho fa manan-karena aho. Te hividy ny sasany vatomamy sy ny zavatra hafa ao amin'ny fivarotana. Fa iray amin'ireo varotra mpitan-tsoratra nahita ahy nandeha irery ary ny lalantsara izy Nihevitra aho fa handeha hangalatra na hanao zavatra tsy mety Heveriko. Nanaraka ahy izy manodidina ny fivarotana. Tsy nahatsiaro ho manelingelina ny manana ramatoa ity manaraka ahy. Tamin'ny farany aho nahita ny reniko tamin'ny iray amin'ireo aisles ary nilaza taminy aho fa tsy te miantsena intsony. Nolazaiko azy rehefa nandao ny fivarotana zava-nitranga dia hoy izy angamba ilay ramatoa noheveriko fa hangalatra. Nahatonga ahy mampalahelo fa nieritreritra kely izy nijery zazavavy toy ny mpangalatra. Fast rahateo ny maha-vehivavy efa lehibe, ary toy izany koa mitranga amiko toy ny olon-dehibe ao amin'ny fivarotana tsara. Tsotra loatra aho mieritreritra fa ny karazana zavatra tsy tokony hitranga izany andro izany. saingy indrisy, fanavakavahana tsy maty. Ary tsy ho an'ny tsy fifandeferana ny fahasamihafana amin'ny olon-kafa na ny olona na ny mpifindra monina Amerikana, pelaka na mahitsy, matavy na mahia, pahaizana na ambanin'ny-nahita fianarana, manan-karena na ny mahantra. Raha tokony ho fankalazana ny fahasamihafana fotsiny isika “ireo nilefitra tamin'ny” ny tsirairay. Isika rehetra dia mitondra ny sasany fitsarana an-tendrony ary fantatro manokana dia mila miasa amin'ny fitiavana ny namanao tahaka ny tiako ny tenako. Mety tsy ho afaka hanova olona iray
fitsarana an-tendrony, fa afaka manova ny toe-tsainao momba ny fomba hiatrehana ireo izay
“mialoha mpitsara” ianao sy ny fomba hamalianao azy. Manana zanaka izay mainty
ary Dominikana. Tiako izy mba hitombo, raha manaja ny kolontsaina rehetra na
mifidy ny hamantatra ny tenany ho Afrikana, na Amerikana na izy roa Hispanika. Izy no hampianarina
mba miteny anglisy sy espaniola. Izy no hampianarina ny tantaran'ny kolontsaina roa.
Ary zava-dehibe indrindra dia hampianarina ho tia an'Andriamanitra sy ho tia ny olona. Mino aho fa manomboka any an-trano sy ny zavatra iainantsika no ianarantsika ary Mampalahelo fa ny zavatra hita taratra eo amin 'ny tontolo any ivelany.
Troy Frasier • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:12 aho • navalin'i
aho, Fotsy aho, ary efa niaina zavatra mitovy na tahaka ny zaza, ary ho toy ny olon-dehibe…. Tsy fantatro fa ireo toe-javatra ireo hazakazaka mifandray. Raha ny tena izy, Haha, mpitan-tsoratra im-betsaka nanaraka ahy manodidina amin'ny maha-ankizy, zatovo, sns. Na dia ankehitriny Azoko antoka fa fakan-tsary manaraka ahy, rehefa mandeha an-Wal-Mart, toy ny namako izay miasa hoy LP dia mandeha toy ny mpangalatra toa…. Na izany na tsy, . izany no mitranga! :)
Nathanial Poling • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:12 aho • navalin'i
I Charles Barkley hiandany sy Bill Cosby momba ity iray ity… ny haino aman-jery nitsoka ny tantara mampalahelo ho firenena mikorontana rotaka. Manantena aho fa mandroso Zimmerman ny fanendrikendrehana sy fitoriana ao amin'ny NBC ABC.
Antoine Mason • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:12 aho • navalin'i
Ianao no mahatsapa fa Charles Barkley sy Bill Cosby tsy mitovy hevitra momba ny olana manodidina ny raharaha tsara?
toa tena mitovy hevitra, fa ny didim-pitsarana dia marina
George Lewis • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:14 aho • navalin'i
rehetra ny fifanakalozan-kevitra dia ilaintsika ny manana ny lalàna mihitsy foanana. Masìna ianao, manohana ny ezaka @ moveon.org . Nisy fanangonan-tsonia Nahazo Alalana Ny Trayvon mety ho hita ao. MILA ary mangataka ny fanohananao Please sonia , mandefa mivezivezy , bitsika sy manontany ny namana rehetra , ny fianakaviana sy ny fifandraisana mba hanao toy izany koa. Raha tsy misy ny fiovana amin'ny ratsy izany lalàna izany toe-javatra mety hitranga indray.
Nathanial Poling • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:14 aho • navalin'i
tena fiarovana? Hijoro ny tany na dia tsy ampiasaina amin'ny fiarovana
Tia • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:15 aho • navalin'i
“Ireo karazana tombantombana dia maharikoriko sy diso. Andriamanitra nanao ny olombelona rehetra araka ny endriny amin'ny sarobidy sy mendrika. Kanefa isika rehetra dia mpanota, ary tsy haneho ny endrik'Andriamanitra rehefa tokony. Tsirairay avy amintsika dia afaka miala amin'ny fahotantsika, matoky Kristy, ary ho tsara amin'ny Mpamorona. Fa ny fanavakavahana Picks ary mifidy izay olona ireo fahamarinana ireo dia tokony ho ampiharina amin'ny. hoy fanavakavahana, "Izaho sarobidy sy tsara, ary ireo rehetra ny vahoakako no meloka.” – Word Up Rahalahy Lee!
Rehefa mandray ny blinders Fanjakana ho any ny anjara asan'ny rafitra fampahoriana ao American Kristianisma, indrindra fa amin'ny endrika Fotsy fahambonian'ny, kapitalisma sy ny dehilahy, dia hotapahiny amin'ny gadran 'ny fanandevozana. Ireo no fanapahana sy ara-panahy ratsy eny amin'ny rivotra ny Teny dia miresaka momba.
Mr. 116 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:15 aho • navalin'i
Ny vehivavy mainty nitifitra tifitra fampitandremana in Florida, satria natahotra izy fa mahery setra ny vadiny dia hanafika azy. Fantatrareo ny zava-nitranga, dia nahazo sazy an-tranomaizina noho ny 20 taona.
George Zimmerman nitifitra tanora zanak'osy mainty in Florida, ary dia nahita tsy manan-tsiny?!? Marina?? fanavakavahana, antoka indrindra, i olana amin'ity raharaha ity. Eritrereto izany.
Nathanial Poling • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:16 aho • navalin'i
ny antony dia ny fanavakavahana eto koa?
lewrites • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:16 aho • navalin'i
Fotsy aho / teratany Amerikana, ary na ny Indianina ao Ahy dia kely isan-jato, ny hoditro feo Tena maizina, ary be dia be aho mijery toy ny teratany. I Efa fanavakavahana ny fotsy hoditra, ny mainty hoditra, ary fotsiny ny hazakazaka rehetra dia afaka mieritreritra.
Talk DC ny hira miloko mamintina olona tena tsara anefa ny eritreritro:
Izahay ary miloko olona miaina ao amin'ny toerana Simbain'ny
Izahay ary miloko olona niantso anay ny olombelona
Izahay efa nahazo toy izany tantara feno fahadisoana
Ary izahay dia miloko ny olona izay miankina amin'ny fahasoavana Masina.
Ny haino aman-jery dia be dia be ny manome tsiny. Fa ny amin 'ny famalifaliana, amin 'ny asa izay hampaharitra ny haino aman-jery fahana ho antsika. Raha mijery isika dia lasa loko, raha ta-hahita ao amintsika ny didim-pitsarana isika, mandroso hafa mifototra amin'ny tarehiny na ny zavatra, raha tsy manao mahalala azy…Angamba afaka miasa handrava ireo sakana sy tsy manome ny haino aman-jery intsony vilona.
Joanette D. Clemons • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:17 aho • navalin'i
Ity tranga ity dia tsy mikasika ny SYG lalàna izany ihany koa ny momba ny tena fiarovana tohan-kevitra. Ny zaza amin'ny ankapobeny dia hita fa meloka. Ity tranga ity ihany koa ny lalàna mikasika ny fomba fiheveran'Andriamanitra ny andraikitry ny olona, GZ, izay nanao ny tenany amin'ny fomba hanimba. Aiza no andraikitra manokana, fahatsapana mahazatra sy ny fanaraha-maso tena mitana anjara tamin'ny toe-draharaha ity? Rehefa Rachel Jenteal (tsy azo antoka ny tsipelina) dia nitafatafa, hoy izy “Ny ray aman-dreninao hampianatra anao fa raha misy olona mampiahiahy izay manaraka anao, tokony mihazakazaka. Tsy misy ray aman-dreny mampianatra ny zanany mba hijoro ny. Raha toa izy ireo dia, izy ireo tsy manan-janaka.” TM mbola zaza. Nilaza izy ny polisy tamin'ny GZ ho toy ny olona ao amin'ny tara zatovo. Tsy ampianarin'ny, izany no zava-misy. Trayvon mbola zaza mitombo ho lasa olon-dehibe. Rehefa niantso polisy GZ, nanao ny tsara, rehefa nanapa-kevitra ny handeha hamely ny sitrapon 'ny fahefana, fanaraha-maso intsony izy ary nivadika ny toe-draharaha ratsy rehetra. Ara-panahy Eks.: Impiry dia efa nivavaka ary nangataka an'Andriamanitra mba hanampy antsika hiatrika toe-javatra ary miantehitra mankany amin 'ny fahalalana fa tsy mihaino ny tena feo fahefana hahita anay amin'ny alalan'ny. Trayvon tsy eto amin '/ c GZ niankina tamin'ny fahaizany. Dia nitondra ny raharaha tao an-tanana rehefa avy nomena torolalana mazava sy fohy momba ny zavatra tsy tokony hatao?. Te hahafantatra izay GZ ny anjara asan'ny maha-mpirotsaka an-tsitrapo manodidina fiambenana manamboninahitra Nizara ny. Hitako ity boky ity amin'ny http://www.usaonwatch.org/assets/publications/0_NW_Manual_1210.pdf Vakio ny pejy 27 amin'ny toko 6. Io lehilahy io, nivadika ny fefy ka nihazakazaka avy tany tsara ho olana andraikitra manokana. Tsy nankatò izy, ary nifanandrina toromarika mivantana ny tahotra ankizy, izay zatovolahy sy atleta. Izy nanaikitra eny mihoatra noho izay afaka mitsako rehefa nivoaka ny varavarana ny sitrapo sy toromarika ny manam-pahefana. Aoka hatao hoe TM efa za-draharaha mpamono izay nitondra GZ ny basy ka namono azy fa tsy? Ity tranga mampalahelo nanokatra ny varavarana ho an'ny maro lohahevitra mba hodinihina. anisan'izany ny, fa tsy voafetra ho, profiling, andraikitra manokana, Ny Mijoroa Your Ground Lalàna, inona no tena famaritana ny tena fiarovana, ary indrindra indrindra ny re-tombana ny fomba tokony jerena hazakazaka ny sain'ny rehetra. Ny zava-drehetra hita ao amin'ny maizina ny fontsika sy ny saintsika ny amin'ny farany vao hita. Izany mampalahelo ary mampihomehy rojo fahadisoana dia natao mba hitondra ny fahazavan-tsaina lehibe kokoa haavon'ny, fifanakalozan-kevitra sy ny fanentanana. Ity tranga ity no naniraka dona onjam manerana izao tontolo izao. Tsy tantara amerikanina tantara, dia tsy tantara Black tantara, dia ny olombelona sy ny zo sivily tantara. Tsy misy olona mendrika ny ho faty miorina eo stereotypical fijery sy ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso tena.
BQPhotography • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:18 aho • navalin'i
Dude!! Misaotra betsaka noho ny famoahana izany!! I nandefa toy izany koa teo amin'ny rindrin'ny Facebook-. Tsapako dia afaka mifindra avy amin'ny fanavakavahana eo nefa isika fa mbola afaka miresaka momba izany mba hamaha ny olana!! Tsy miady hevitra ary mbola piraofilina an'ny rehetra hazakazaka. Mafy aho mpino an'Andriamanitra sy ity firenena ity dia tsy maintsy hiverina amin'Andriamanitra. (2 Tantara 7:14) Mila bebe kokoa ny mainty hoditra toa izaho sy ianao, iza no dingana ka miteny manohitra ny fanavakavahana sy hampianatra ny hafa. Tokony hitsangana hamely ny firenena izay hamporisihiko ny fanavakavaham-bolonkoditra ny!! mamerina ny fisaorana anao. Izaho koa dia efa nataonareo tamin'ny foko fanehoan-kevitra sy ny zavatra hafa, nefa aoka tsy ny rehetra anefa no mahazo ahy, satria fantatro hoe iza moa aho ao amin'i Kristy!! Misaotra!!
marika • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:18 aho • navalin'i
tsy fanontaniana, misy ireo amin'ny 'ara-poko’ antony ny zavatra ataony – tsara na ratsy. Ny sasany mihevitra fotsiny ny ratsy indrindra noho ny haavon'ny melanin. Fa Manontany tena aho raha misy zavatra hafa mitranga ao amin'ny toe-javatra toy izany izay mampiseho bebe kokoa ny elanelana ara-kolontsaina noho ny ara-poko ny iray. Ohatra, raha mahita vehivavy mandeha eny an-dalana amin'ny tena fohy short, Cut ambany tanky-tampon'ny amin'ny nono mihantona avy, maro ny make-up, kiraro avo (tsy tsara noho ny mandeha), etc., No vinavinaiko io no vehivavy iray izay – mampiasa ny lany teny – hamaha. Izany dia manome ahy aotra zo ara-batana, na am-bava fanafihana azy, mba manome hevitra fanamarihana, sns. Ampitahao izany amin'ireo vehivavy hafa ny akanjo – tsotra, fa tsara tarehy pataloha, zipo, akanjo, sns. – tsara avy amin'ny tany hafa’ Tapitra (na haka ny fomba) katalaogy. Mety ho izy toy ny vehivavy janga araka ny #1, fa Heveriko fa toa tsy.
Toy izany koa, raha mahita tanora lehilahy mainty hoditra mandeha miramirana amiko manao akanjo toy ny 'gangbanger’ – I mihetsika kely ka mahazo natahotra. Azo atao dia ny eo an-toerana sy ho mpitandrina ny tanora hizara ny filazantsara amin'ny amiko taloha kokoa hoe ny teny ratsy. Fa inona ny "akanjo banger? Mifanohitra, mainty lehilahy mandeha eny an-dalana ao 1) Tany Ny fitafiana 2) African fitafiana nentim-paharazana 3) asa pataloha jeans / kiraro amin'ny t-shirt fotsy… I tampoka rehetra ny tahotra mitigated.
Ny hevitra dia hoe akanjo dia endriky ny fanehoan-kevitra ara-kolontsaina. Ary tsy mitovy kolontsaina rehetra. raha inona “fotsy” (na ny hazavana volontsôkôlà, mena, mavo) In America mahita clip, ny vaovao hariva, newsweeklies, sns. tanora lehilahy mainty hoditra azom-pahoriana no tanora lehilahy mainty hoditra izay upstanding mpikambana ao amin'ny fiaraha-monina anaovan'ireo… izay mampita ny hafatra mifanohitra.
Sary an-tsaina ahy manao t-shirt miaraka amin'ny sainam-pirenena mitoby eo aminy sy ny mainty hoditra mba manantena fotsiny aho hahatakatra fa tsy mpanavakavaka. Vao tia ny mitoby any Atsimo.
Toy izany koa, hiakanjo toy ny jiolahy, aza gaga ianao raha sahiran-tsaina iray.
Manao 'hoodie’ irery tsy / tsy tokony hanao izany mazava ho azy. Fa ry namana izay mihevitra ry zareo fitafiana / akanjo tsy hifandraisana na (ratsy) hanaiky fa manao, fa dia mametraka ny enta-mavesatra eo amin'ny mpanara-maso ny nofo rehetra ny fahasamihafana avy dia adala.
fahamarinana • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:18 aho • navalin'i
James Lee • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:19 aho • navalin'i
Ambony tranga toy izao sensationalize sy mifanaja anefa eo amin'ny zavatra faultfully hoe “foko.”
Amin'ny maha-fotsy kely avy amin'ny manodidina an'i Detroit, I mety mamaly toy izany koa ho any Zimmerman manaraka ahy, na inona na inona ny asa aho hatramin'ny.
Panjakana ara-panahy Zimmermans fiantraikan'ny ny fiheverany ny andrianan'ny mandidy ny …”Tsy hanohitra ny ratsy fanahy.” Azo inoana fa, Trayvon Martin ny fankatoavana io didy io dia tsy ampy ihany koa. Amin'ny maha mpianatr'i Kristy, Tokony hotadidintsika mba tsy ho gaga raha izao tontolo izao miasa toy ny “izao tontolo izao.”
Ny fitaovam-piadiana tsara indrindra hanoherana ny tsy rariny ara-tsosialy sy ara-poko no mizara dia ny manaraka ny didin'i Kristy.
Thabiti Anyabwile nanome ny hafatra ara-potoana in 2008 about “Mitondra ny Image”. Tsy ho very maina ny mihaino – http://t4g.org/media/2010/04/bearing-the-image-identity-the-work-of-christ-and-the-church-session-ii/
Ny ankamaroan'ny olona dia manana mombamomba sy ny fiainany izay efa miorina amin'ny kevitra momba ny hevitra ny "taranaka." Mila miova kokoa ara-Baiboly amin'ny teolojia ny foko. Voalohany indrindra, dia zava-dehibe ny mamaritra ny teny ary hampiasa izany araka ny tokony ho, indrindra fa "firazanana" oharina "foko." Ny Kristianina hahatakatra ny olona mila ny firaisan-tsaina ao amin'ny Adama, tafaray amin'i Kristy sy hiray saina ao am-piangonana.
Rusty • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:19 aho • navalin'i
Izahay efa REHETRA nisy ny nahazo faran'ny fanavakavahana, angamba. Raha tsy, isika dia ho. Nisy olona avy amin'ny hazakazaka hafa mandeha handray fanapahan-kevitra momba antsika, mifototra amin'ny fomba mijery na feo.
Efa nisy isika rehetra meloka ny manao izany, koa, ny sasany ambaratonga kely. Isaky ny mahita olona iray ianao, ary manaova fitsarana–na dia foana ny anatiny–fa mifototra amin'ny olona toa na feo… izany fitsarana an-tendrony.
Antha REdNOTE • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:19 aho • navalin'i
The 911 mpandraharaha nanao hoe: “Tsy mila anao hanara-dia azy” Izay no ampy ho ahy. Ny fitsarana dia mbola tsy nisy ilaina sy Trayvon mety ho nahazo oroka bebe kokoa avy amin'ny Dada (araka ny hita eo amin'ny sary) raha Zimmerman nampijanona ny “Butt” tao anaty fiara SY an-telefaonina till’ tonga ny polisy!!!
Louie • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:20 aho • navalin'i
mazava, Menatra aho fa ny sasany amin'ireo mpivaofy teny milaza ny tenany ho Kristianina, Manantena aho fa efa ho ny sasany amin'izy ireo dia tsy. Misaotra betsaka noho ny fanaovana Trip ny fonao ao amin'ny bilaogy ity, masina ny tenanao sy ny fiainanao izay zavatra tsy fantatsika momba ny, na dia mety tsy hahatakatra. Aho White, lahy sy 24 taona ary izaho manana namana mainty hoditra maro, tena mitovy ny Trip, izay efa profiled diso ary efa eo anatrehan'ny ireo fanafihana namako, in tohina, fihetseham-po afa-manoatra. Mino aho fa ny sasany amin'ireo mpaneho hevitra dia misinterpreting Trip tokoa ny teny na mampiasa azy ireo ho toy ny birao maneno ny ambain-dain'ny fandaharany manokana sy ny politika. Trip tsy nilaza na inona na inona momba ny maha-manavakavaka Zimmerman. Zimmerman nanao ratsy fitsarana izay lafo tovolahy iray ny fiainany, ny hoe fianakaviana iray efa niova mandrakizay, Zimmerman, fara fahakeliny, velona sy miaina. Ary ity hetsika ity dia niteraka ny fitarainana fa miaramila ny rehetra mba handinika ny mifanavakavaka sy hijery lalàna izay hanisy ratsy antsika rehetra. Ny mahatonga ahy fa ny olona marary tsy afaka mahita fotsiny fa ny lalàna noforonina mba hiarovana ny sasany tahaka ahy (amin'ny unearned tombontsoa) tsy mihatra ho an'ireo izay heverina ho ny “hafa”. Ny sasany efa voalaza ny lalàna ka hanao hoe Zimmerman no nanamarinana ny hanaraka Trayvon saingy izy nohamarinina eo imason'Andriamanitra hanaraka olona iray satria nijery niahiahy. Amin'ny farany Mivavaka aho Zimmerman tonga mahalala an'i Kristy ho Mpamonjy sy hiverina ny safidy mahatsiravina ho zavatra tsara fa Andriamanitra dia afaka ampiasaina mba hitondra fanasitranana bebe kokoa. Tsy misy zavatra azo atao amin 'Andriamanitra.
Nathanial Poling • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:20 aho • navalin'i
Ahoana no ahafantaranao Zimmerman Tsy ny Kristianina iray efa? No mijery ny fitsarana, na hihaino ny soundbites. Mino aho fa ianao ho be dia be ny hitsara fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity ny olona ny Kristianisma. Fantatro tanora tanora fotsy hoditra izay efa profiled koa satria nanana tatoazy. Atsaharo ny fanaovana tombantombana fa dia hazakazaka raharaha sy ny tombantombana momba ny fo ny hafa. Zimmerman Afaka nanana fikasana ratsy, fa na inona na inona no nitarika teo amin'ny fitsarana rehefa ren'ny olona ny antso an-tariby feno, Tsy ny spliced ​​ny haino aman-jery ireo izay nilalao ny amponga ny olana ara-poko iray. Zimmerman niatrika ny mpitsara ka afaka madiodio eo ambany fiarovan-tena. Angamba ny olona sasany dia tokony hanomboka hisalasala ny mozika Afrikana Amerikana mihaino izay mampirisika ny herisetra ny fiadanana. Martin afaka niverina tao an-trano, fa tsy dia nisafidy ny hanandrana ny mikapoka ny Zimmerman.
raiki-tahotra • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:21 aho • navalin'i
salama rehetra. Voalohany ary farmost izaho dia kristiana. Faharoa izaho dia afirican-vehivavy Amerikana. Aho namaky ny fanehoan-kevitra eto, ary tsy mahagaga ahy. Nampihoron-koditra ny aho ny herisetra eto amin'ity firenena ity (ny mainty eo amin'ny mainty, ny fitsarana mankany amin'ny mainty hoditra,ny heloka bevava singa vitsy an'isa ny tanora manoloana ny ankapobeny, -bahoaka mankany amin'ny ankapobeny minoriity tanora). Mba hilaza ny marina taminareo matahotra mihitsy aho kah,ary izany no antony……….rehefa amin'ny maha-fiarahamonina gloss ny fiaraha-monina ny fanavakavahana stains Niteraka isika Mampidi-doza ny fiaraha-monina ny fiverenana indray ny amin'izay ny tamin'ny 50 taona. koa, rehefa mieritreritra ny faharoa Amerika fa efa nahatratra ny sasany toetry ny iray maimaim-poana Utopia hazakazaka isika Mampidi-doza ny mamerina marary izay namely ny firenena 50 taona maro lasa izay. Mieritreritra aho fa ny olona tia ny gloss hanjakazaka satria mora kokoa noho ny manatrika azy io ary ny fiatrehana izany. Koa ho anao izany mety tsy ho zavatra hazakazaka, satria tsy maintsy hihaino ny anti-panahy hiresaka momba ny fomba ny antsipiriany mampahatsiahy ny andro ny tanora,zavatra miaina izaho sy ianao tsy afaka manonofy ny
.Fa mety tsy ho zavatra hazakazaka satria tsy mitondra ao an vatana mainty zazalahy sy mahagaga no velona mba hahita 21. Fa mety tsy ho zavatra hazakazaka fotsiny satria ny fijery aminareo dia, ary tsy ho hita ho toy ny loza mitatao. Raha nanana safidy ireo dia tsy ho zavatra ho ahy hazakazaka na. Ny foko mivoaka ireo rehetra izay efa niharan'ny heloka bevava noho ny herisetra. Ary na oviana na oviana aho dia tsy ho nanala tsiny ny herisetra. Na izany aza, koa dia tsy manala tsiny ny rafitra izay fitifirana olona leferin'ny mifototra amin'ny endriny,na ny mety ho antony mahatonga izy ireo mandritra ny alina,. Izaho tsy manala tsiny ny rafitra izay haka ny vola izay ankasitrahana,fa na ny zanako dia tsy. Izaho tsy manala tsiny ny toe-javatra toy izao. Amerika Tsy Utopia. I mahatsapa ny vokatry ny maha-vitsy an'isa any Amerika isan'andro,ary na dia ao am-piangonana.
bergyman • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:22 aho • navalin'i
Kristianina aho koa. Manaiky aho fa mbola misy ny fanavakavaham-bolonkoditra. Ny marina dia, dia misy foana. Ny fahavalo dia ho azo antoka izany. fa izao “dia tsy hahatakatra ahy” posturing tsy manampy. Manana fotsy adala izay hampaharitra ny fanavakavaham-bolonkoditra. Ary izany no izy ireo: adala mpanavakavaka. Avy eo misy mainty adala izay hampaharitra ny stereotype izay mampandroso ny profiling. Ny zavatra tokony hifantohana dia ny sisa rehetra isika miakatra ambony ireo adala, ary ho avy miaraka ary hanamboatra ny fizarazarana. Hanova ny tantara. Raha ny tanora lehilahy mainty hoditra… Wow. Tsy manana hevitra ny fiaraha-monina ny fomba itondrany an'ireo izay, fa fantatro misy valiny avy any. Fantatro fa Andriamanitra dia manana drafitra sy ny vahaolana… Ary tsy mifototra amin'ny fomba fizarana misy olona toa. Ny vahaolana dia mikasika ny FIRAISAN-KINA, ny fitiavana sy ny famerenana amin'ny laoniny.
raiki-tahotra • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:22 aho • navalin'i
Hi bergyman. I manaja sy manaiky, ny hevitra. Naoty iray aza- ny fijeriko dia tsy “dia tsy hahatakatra ahy” fa ny nisy fandatsahan-mazava ny antony tsy tokony ho “ahy” na ny lafiny. Izany no momba ny in-marina ity firenena ity dia manana lamina mbola rectify.This no natokany izay efa nomena ny Amerika vitsy an'isa. anti-panahy reliving mampihorohoro traikefa amin'ny Jim crow. Ankizy matahotra dia ho lasibatry ny sasany meloka ny endriky ny rafi-pitsarana. Lehilahy ao amin'ny fianakaviana noho ny herisetra DWB '(mitondra fiara raha mbola mainty) Efa niasa mafy nandritra ny taona maro ny fampiraisana ry namana sy mitondra fanentanana ara-poko ho an'ny Fiangonana sy ny Firenena Mikambana churched mitovy. Tsy hoe aho hahatakatra ny lafiny .I'm hoe manaja azy io. I hanohy ny asako hanome fanazavana bebe kokoa momba ilay foto-kevitra,satria izany no fikasan'Andriamanitra ahy hanao sy ny Fiangonana dia mila izany. Dia hoy- mamadika ny jamba maso ny aretina ho azy ny tsy rariny ara-poko,ara-toekarena ara-tsosialy,momba ny fanalan-jaza na ny firaisana ara-nofo trafficing,Tena diso ihany koa. Izany ihany koa ny zavatra tsy afaka atao. Tao amin'ny fanamarihana iray mamirapiratra Efa hitako ,fiaiken-keloka, sy ny famelan-keloka eo amin'ny firazanana amin'ny sehatra goavana amin'ny vavaka ny Kristianina sy ny zava-nitranga dia fotoana tsara tarehy ny fanajana, fiaiken-keloka,famelan-keloka (eo amin'ny andaniny sy ny ankilany) OHHH dia hoe zavatra ny mijery izany hoe pslms 133:1-3 ara-potoana. Tongotra, ny nanasa,dia nandatsaka ranomaso, sy ny antoko rehetra(mainty,fotsy,Latino,ary ny aziatika) nibebaka eo anatrehan'Andriamanitra ho tokony manohitra ny hafa. I andrintsika ny andro “ny fitiavana ny rahalahy dia mamatotra olona amin'ny an'olona” araka ny voalaza ao amin'ny fihirana lehibe øde ny fifaliana. Miasa sy mivavaka aho, na amin'iza na farany mba hijery azy io hitranga.
bergyman • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:23 aho • navalin'i
Misaotra anao noho ny valin-. Tsy hoe hilaza ianao no manao ny “tsy azonao…” zavatra, Midika fotsiny aho tsy tiako fa ny maha valinteny ny valiny. Dia reko fa be aho, rehefa niezaka ny hiditra ao amin'ny resaka momba ny sasany amin'ireo olana sy ny fomba maha-fiaraha-monina dia afaka handresy azy ireo. Mieritreritra aho fa tsy maintsy ho nisy ny fahatakaran-javatra sy ny vahaolana sy ny fiovana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Mitovy hevitra aminao aho. Izany dia mitranga. Mankahala fotsiny aho mandra-pahoviana Izany dia midika hoe maka sy ny ratsy fanahy izay nampijaly / namoy ainy ary mety very … ary Halako ny fizarana. Misaotra anao miady ny ady tsara. Manantena aho fa fantatrareo fa tsy mody mba hahatakatra ny fihetseham-po, Fotsiny aho mijery ny mahazo fomba dingana manaraka… famerenana, fanasitranana, firaisan-kina.
raiki-tahotra • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:23 aho • navalin'i
Eny. Azoko tsara ary mila anao amin'ny ady . Miala tsiny fa ny sasany devalued iray ny fandraisana anjara amin'ny resaka sy / na ny vahaolana ireo zava-manahirana. ary miala tsiny eo amin'ny behalf.Would ianao mamela antsika rehetra izay nitondrany ireo izay te-hanampy hahita fomba tsara kokoa toy ny hoe tsy zava-dehibe izy, fa ao amin'ity fifanakalozan-kevitra satria na ny hodiny ny tsy mainty. Mino aho fa isika tsirairay dia manana zavatra handray anjara ny hafa ,traikefa mba ho azo,tia ho zaraina,fampaherezana sy ny fiombonana mba ho nanan- (mainty,fotsy,mavo,Brown,manga sns). Mino mafy aho fa. Andriamanitra anie hitahy anao bergyman…..indray andro pslms 133:1-3 ho zava-misy raha tsy eto an-tany ,tena ao amin'ny olona ho avy.
Amen, Amen. Misaotra anao noho ny hatsaram-panahy teny. Tompo, hanohy ny fanasitranana izay tokoa indray andro any handidy tso-drano.
Troy Frasier • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:25 aho • navalin'i
Hey Trip, Tiavo ya sy ny rehetra, fa ny marina… dia toa mikasika ny hazakazaka, ianao manana mangidy. Miala tsiny aho ny volon-koditra no nahasitrana anao ny fandraisana faran'ny misy fanavakavahana. Ny volon-kodiny no leaved ahy ny mandray faran'ny sasany fanavakavahana avy amin'ny fiaraha-monina ny mainty, (na dia tsy mbola nisy dry ny polisy). Ny anjara eo amin'ny fiainana, olona. Maniry fotsiny aho dia nanavakavaka aho noho ny hazo fijalian'i, tsy noho ny lokon'ny hoditra ny amin'izany toe-javatra. izany no mitranga, fa tsy tsara tarehy, fa tsy maintsy mamela heloka ireo izay manao izany, ary hidera an'Andriamanitra ny Ray noho ny fitiavany sy ny fahasamihafana. Ary tsy ho mangidy, olona. Aoka handeha ireo lasa ohatra. Toy ny tsy tokony hitondra ny hafa diso, tsy maintsy mamela heloka sy hanafaka anao amin'ny fakam-panahy ny ho voa rehefa tsaraina. Ny olona rehetra dia efa voatsara. Raha tsy amin'ny volon-koditra, ny vatana endrika, toerana, taona, sns. Efa nitsara fotoana tsy tambo isaina noho ny maha-avy any Florida ao amin'ny Midwest. Ary noho ny tanora. sns. Foana isika hotsaraina, ya mahalala? Tsy maintsy mamela heloka sy mampiseho fitiavana ho an 'ireo izay tsy mahalala. :) Andriamanitra anie hitahy ya, Trip!
Nicole • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:26 aho • navalin'i
Amin'ny manondro fa misy manohitra ny fanavakavahana ny mainty hoditra dia tsy manafoana fa manavakavaka ny mainty hoditra dia afaka koa. Isika dia miaina ao anatin'ny tontolo lavo sy ireo asa rehetra ireo diso. Miasa hanokatra fifanakalozan-kevitra dia tsy midika izany hoe misy unforgiveness. (Salama, Trip ny vadin'i Lee dia tsy mainty LOL) Na izany aza, ara-Baiboly, ny fiadanana no tsy mitovy matoantenin'ny atao. Maro ny antso ao amin'ny Tenin'Andriamanitra ho mpanao ny tsy rariny sy ny fampahoriana amin'ny endriny rehetra. Tokony ho mavitrika manohitra ny rariny ara-tsosialy, Amin'ny endriny rehetra ny tanjona farany ny mampiseho ny tsara tarehy kosa 'i Jesoa Kristy eto amin'ity izao tontolo izao lavo.
gdoggydog05 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:26 aho • navalin'i
Wow. fahendrena. voaheloka aho, koa.
bergyman • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:27 aho • navalin'i
Mangataka izahay ny olona ho mahery noho ny olombelona. Isika rehetra dia mampiasa vaovao (ny sasany mifototra amin 'ny toe-javatra, misy antoko fahatelo azo antoka, ary ny sasany fahatelo antoko tsy azo antoka) hilaza amintsika izay tokony hatao amin'ny faritra sasany ny tanàna, sy ny manodidina ny olona izay mijery fomba iray. Isika rehetra mombamomba azy. Ny tovovavy blonde Lizzi eto ambany mety ho nisy ny olona mihevitra azy ho adala, na mora mifototra amin'ny fomba toa. Fair? angamba tsy. Izy dia manana ny safidy, dia afaka na miezaka ny handresy lahatra ny hafa rehetra blondes avy teo hanao zavatra marani-tsaina, ho tsy mahay ny hampaharitra ny stereotype NA afaka fotsiny izy miezaka manao ny tsara indrindra sy mba tsy ampifandraisina amin'ny “karazana”. My Vina (ary mety ho lavitra) dia ny fivarotana matetika dia shoplifted tompony ny olona izay nijery / nanao tahaka an'i Dina Robinson … ara-drariny? Tsia mihitsy. Fa no ny fivarotana tompony izay manao irresponsibly? Mamelà ahy hilaza izany tamin'izao fomba izao… raha olona #1 tarehiny / akanjo / asa tahaka ny olona izay efa nanao heloka bevava ao amin'ny toeram-pivarotana, na eo amin'ny manodidina. (Aho manao ny hypotheticals eto) Ny tanjona antontan'isa milaza: 7 avy any 10 fotoana, rehefa mitranga izany, ny heloka bevava no nanao. Mety hoe, dia mbola tsy tokony piraofilina. fa amin'ny fotoana inona ao amin'ny antontan'isa ve ianao hoe:, Mbola handeha aho mieritreritra ny tsara indrindra ity olona ity. 9 avy any 10? Ahoana ny 99/100? Ahoana ny 999/1000? Ahoana raha manana fianakaviana Arabo ao amin'ny manodidina ka mahita azy mampidina entana avy am-polony ny harona ny zezika any an-garazy? Angamba izy tiany fotsiny ny ahitra ho tena maitso. Moa ve isika tokony mihevitra foana ny tsara indrindra ao amin'ny olona?
Ny fomba fijery ity dia ny manana nizara fanavakavaham-poko sy ara-politika ary ara-toekarena nizara firenena mizarazara. Tsy afaka tena manao zavatra betsaka momba ny toekarena… Milaza amintsika ny tantara foana fa manana manan-karena sy ny mahantra. Fa fanavakavaham-poko ara-politika ary isika dia afaka milaza “No”. Tsy manana olana amin'ny fananana paosin'ny olona miara-asio fehy ao Amerika noho ny tombontsoa na satria dia nisy tonga avy tany izany, ary dia mizara fomba amam-panao izany firenena. Kanefa mihevitra aho fa izany no mitranga rehefa misy bunch ny olona izay efa Niray hina (angamba noho ny any ivelany sy ny ao anatiny lafin-javatra) noho ny fomba mijery ny ivelany, Mihevitra aho fa dia mbola manana olana mandra- “mainty fihodirana” misy manerana ny tanàna, hifidy andaniny sy ny ankilany ny lalantsara ara-politika, hanaovany ny tao-samy hafa rehetra orinasa, Tsy mitaky / mahazo manokana fanaramàna / pifidianana lalàna, any amin'ny oniversite mandritra izany tahan'ny, ary ny olona tsy hanambady mifototra amin'ny volon-koditra. Ny haino aman-jery te-po olana. Ny antoko te-po olana (handrisika mafy mpifidy taham-pahavitrihana). Ny zava-tsarotra aza isika dia mamela azy ireo hilalao anay… izany dia tsy Etazonia oharina IREO tohan-kevitra. Izany no iray “mila miara-milalao rehetra”. Izany no iray “ilaintsika ny manaiky fa misy adala avy any izay mihevitra isika hoe iza izy mieritreritra isika, fa handeha aho ny tsy hiraharaha azy ireo satria fantatro hoe iza moa aho.”
Nanana Foster mainty ankizy (7 ary 9 yrs antitra). The 7 yr zazavavy antitra nilaza taminay “Ny rehetra dia mahafantatra fa mankahala ny fotsy hoditra sy ny mainty hoditra ny mainty mankahala ny olona fotsy hoditra.” Izay nahatonga ahy mampalahelo. Nisy olona dia nampianatra azy fa amin'ny teny. amin'ny 7 yrs antitra, fa ho anisan'ny azy mahaforona. Mila mba hijanona tsy hanaraka ny haino aman-jery / politika kabary tsara lahatra sy hiezaka ary hanao tetezana, fa tsy maika hanatsoaka hevitra momba ny olona ary raha ny olona manao tsoa-kevitra momba antsika, tokony nalatsany eny ny lamosinay, satria fananana lolompo-bolon-koditra fotsiny dia mampitombo ny fisarahana sy ny mila hantsana io dia namboatra koa.
Rumplestiltskin • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:28 aho • navalin'i
A tena Tena-nandidy fitsarana, fa tsy W / o antony. Ny ankehitriny nataony, amin'ny “na inona na inona” foana ho voaloton'ny miaraka amin'ny mahasosotra lasa. Nanana ray aman-dreny, fa apparenty ireo “loko jamba”, ary izao Feno fankasitrahana aho. Fony aho telo, sy milalao miaraka amin'ny namana manodidina indray andro ao an-Sandbox, izao no hitako – tsirairay, ray aman-dreny ho avy ny, ka milaza zavatra toy ny “tonga Johnny, Mila isika handeha” na, “Suzie, fotoana noho ny torimaso kely,”. Tsirairay, izy rehetra sisa, afa-tsy iray ihany. Tsy mieritreritra na inona na inona momba izany andro izany, fa ny sasany telo-polo na efa-polo taona tatỳ aoriana, Takatro ny zava-nitranga: fa ny farany dia zazalahy kely mainty. teneniko anao, rehefa tonga saina mihitsy ny zava-nitranga tamin'izany andro izany, Tohina aho, ary tezitra – fa zazalahy fa ny ankizy hafa dia ho “voaaro” avy no namako. Tsy fantatro izay “mainty” dia. mbola mahavariana.
ankehitriny, Izaho dia 71, ary nisy iray-on-iray fifandraisana amin'i Jesosy Kristy, for 37 taona. IZANY, mihoatra noho ny fifanakalozan-kevitra amin'ny “hazakazaka” no Tena nampahiratra ny masoko, Aleo hotantaraiko – ao amin'ny bokin'ny Efesianina, dia milaza fa Andriamanitra, vita tamin'ny Jiosy, ary koa ny hafa firenena, Olom-baovao iray. Olona, izany dia midika hoe anao, sy izaho, raha mbola manana izany fifandraisana amin'i Kristy. Rehefa Dingana ho amin'i Kristy, isika “anaovy”, na “hiditra ao” ny olom-baovao iray. Noho izany. Ivelan'i Kristy, dia afaka hitafy ny asa, dia afaka miezaka ny ho tsara, hanao ny tsara, sns. Nefa ho hery voajanahary lany foana, Ary isika dia tsy indray, amin'ny fotoana rehetra isika “ivelan'ny Kristy”, na tsy eo ambany ny fitarihany. Misy dikany?
Outside 'i Kristy, Tsy misy maharitra MIFANKATIA – raha tsy izany dia ho nahita fa, fahiny. Noho izany, tonga ho amin'i Kristy, izay itoerako dia tsy fotsy intsony, Izaho rahalahinao, ary efa nahazo ny indray.
Mollie • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:28 aho • navalin'i
Manaiky aho fa ny fanavakavahana dia olana. Fa nilaza fa izany ihany no manohitra ny Afrikana Amerikana diso. Efa profiled maro im-betsaka teo amin'ny fiainako. Tanora aho girl.I fotsy volo olioly manana blonde sy manga maso ary ny atsimo lantom-peony. Efa cuffed ny polisy noho izy ireo nitady olona ahiana. Efa nanana basy natao ny lohako amin'ny olona ta-hamono ahy. Efa lasa tanteraka tsy misy. Efa mainty namana niteny tamiko aza manaiky intsony satria fotsy aho, ary “tsy azo atao hahatakatra”. Isika rehetra dia manana ny mitovy tolona. Maintsy ataontsika rehetra ny zava-misy fa vitsy dia vitsy ny olona no handeha miezaka hahafantatra antsika alohan'ny hitsara anay. Izaho sy ny vadiko Manan-janaka dimy sy ny manokana natsangana vao haingana roa lahy tamin'ny havany, izay hanjo ny ho mainty. Amim-pahatsorana aho afaka milaza aminareo fa betsaka araka izahay efa ho ny toeram-pivarotana toy ny fianakaviana tsy misy mainty hoditra hatramin'izay na dia lavitra efa tsara fanahy amintsika na tena niaiky antsika na dia hatramin'ny roa lahy nanaraka ireo. Tahaka ny haavon'ny loko ananany eo amin'ny hoditra mahatonga azy ireo mitovy amintsika. Isika rehetra tsy mitovy isika? Ary nahoana izany no mbola fotsy vs mainty zavatra? Nahoana no tsy tsotra izao ny fiaraha-monina ny olona rehetra tonga miaraka ary fantany fa any izany olana fototra ny fo fa tsy ny hazakazaka olana? Rehefa mitombo ny ankizivavy, ka hanomboka hitady ny vadiny dia tsy mampaninona raha olona izany dia tonga mainty, na fotsy, na Sinoa. Dia zavatra roa ihany no mangataka, no tia ny Tompo amin'ny fony, ary no manana an'i Jesoa ao am-pony. Raha ny valin 'ireo zavatra roa Izao no eny dia ho fantatro izy, dia ho tsara ho ahy ny ankizivavy. Toy izany koa izy ireo no handeha ho zanako lahy rehefa mitady vady. Mba hanao ny zava-drehetra ny hazakazaka olana mampidi-doza na inona na inona lafiny izay manao izany. Aoka isika hitsangana ambony fotsiny ary miantso azy inona izany….fo olana.
LolaMitche2011 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:28 aho • navalin'i
Ny fananana ny maro-ara-poko aho fianakaviana hahatakatra feno fomba fijery maro samy hafa. Dia milaza fa “fotsy” Fotsiny ihany America dia tsy hahatakatra ny “midorehitra” fomba fijery. Ahoana no afaka izy ireo? Ny olona hampiseho bebe kokoa ny fiaraha-miory amin'ny olona izy ireo dia afaka mifandray. Mainty hoditra, afaka manome anarana 100 toe-javatra samy hafa ny fanavakavahana eo amin'ny fiainany manokana, raha fotsy hoditra ihany koa ny anarana 100 toe-javatra samy hafa sy ny fanamarinana ny antony mino ny zavatra inoany. Miaraka amin'izay isan'ny fotsy hoditra kokoa any am-ponja noho ny hazakazaka, eny, mihoatra noho ny mainty any am-ponja isan-jato avy eo hendry fotsy hoditra, mazava izany heloka bevava azo atao amin'ny olona. Fotsiny isika rehetra hahita izay tiantsika hahita. Dia lazaina, Hoy aho isika rehetra fotsiny mila miezaka ny hanao ny tsara indrindra ho an'ny fiaraha-monina hanongotra sy hanangona azy. Black Amerikana izao dia tokony mahafantatra fa tsy afaka manantena ny tsara fanahy-tsofina avy amin'ny fotsy hoditra, ary ny fotsy hoditra dia tokony hahafantatra fa izy ireo dia tsy hahatakatra ny zavatra niainan'ny olona ny loko mandalo. Ary amim-pahatsorana fa maninona.
Dave • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:29 aho • navalin'i
Lola, Mieritreritra aho fa ny hampiasa “mainty hoditra” & “fotsy hoditra” toy ny manana ato amin'ity lahatsoratra ity amin'ny teny toy izany dia tena malalaka be overstated. Afrikana ny Amerikana dia tsy ny fahavalo ny Kaokaziana. Kaokaziana Tsy ny fahavalon'ny Afrikana Amerikana. Olona amin'ny ota ao am-pony drariny mifampitsara. Ny mitendry ny tenany ao anelanelan'ny rehetra samy hafa firenena noho ny avonavon 'olona izay misafidy ny hena avy fireharehana noho ny volon-kodiny. Hitako izany eo amin'ny manodidina Azia firenena eto Thailand koa. Izany dia midika hoe azo antoka fa tsy voafetra ho Afrikana Amerikana & Kaokaziana. Aza avela ny fomba efa naratra ianao hanampy ny tsy fahampian'ny fampihavanana amin'izany zavatra izany. Change tena mety hitranga.
I Kristy dia maty mba hamonjy ny mpanota. Ary izany no misy ny fiovana dia manomboka rehefa izany zavatra voalaza. Olona hatao nohomboana tamin'ny hazo fijaliana ny tenanareo taloha & Mitovy amin'ilay family mbola vaovao nomena ny mahita izao tontolo izao. Izany no hitranga amin'ny olona ny olona rehefa mahazo ny fieboeboana, tery fijery nanozongozona ny Fanjakan'i Kristy lalana.
Kristy hitahy anao, Lola.
KSStrong • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:29 aho • navalin'i
@ Gdoggydog05 nanoratra "mainty hoditra rehetra kristiana
rahalahy mifantoka amin'ny Martin, ary aza na dia manaiky ny zava-misy fa tsy mety eo amin'ny toerana voalohany hisafidy izany ho zava-dehibe kokoa trajedy ireo ny jatony mitovy trajedys izay mitranga isan'andro. "- Ianao mihevitra ho manana ho fa ny Kristianina AA
hijery izany zava-doza ny hafa mihoatra noho izay rehetra. Raha ny marina, fa ity raharaha ity no tao an-vaovao, ary noho izany, dia ho azy ho lohahevitra ny resaka kokoa izany noho ny zavatra hafa izay olona mahalala ny. Hoy ny apostoly Paoly nifidy, nisy fotoana, mba hanasongadinana ny fahotana Heroda (manambady ny vadin-drahalahiny) rehetra ny fahotana hafa izay nitranga tamin'izany andro izany. Izy manokana antsoina hoe Heroda avy.
Raha fantatsika fa tsy nisalasala i Paoly hiantso ny olona avy amin'ny ny fahotany na ny fihatsaram-belatsihy, isika dia mamaky ihany ny fotoana vitsivitsy ny sasany niantso azy anarana. Izao va no fahotana? No, nataony hoe Heroda avy noho ny sata sy ny toerana. Ary izay atao hoe Petera avy (amin'ny
Anarana) noho ny mpitarika ao amin'ny Fiangonana tany am-boalohany. Tsy fahotana ny manondro ny amin'ity tranga ity ary iaraho midinika ny fanavakavahana. Ity tranga ity dia nanana toerana hanjaka ao amin'ny haino aman-jery, ary toy izany koa ny olona miresaka momba izany.
gdoggydog05 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:30 aho • navalin'i
im miala tsiny KS… dia tokony ho mazava kokoa. tsy mihevitra ho manana ho aho…. aho miteny amin'ny kristiana ny mainty rehetra izay fantatro na namaky, sns….. ary tsy midika izany hoe izy ireo prioritizing azy mihoatra…. izay natao ity: rehetra ny fanehoan-kevitra mainty Kristianina nanao, tsy mbola nahita olona efa ho izay manakiana ny haino aman-jery noho ny fametrahana ny raharaha sasany teo amin'ny pedastool miorina amin'ny hazakazaka…. miala tsiny momba izay. Tsy fantatro raha ataony na tsia. Mino aho fa ny haino aman-jery meloka ka tokony ho izany ary gaga aho fa ny rahalahy sy anabavy mainty hoditra no naneho hevitra tao amin'ny faritra hafa amin'ny raharaha, ary toa nanohana ny haino aman-jery ao an-miseho, fa tsy mpanohitra, na dia ny teniny ihany.
Steve Burlew • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:30 aho • navalin'i
Misaotra, Trip. Tena matotra. Efa ela isika satria efa efa miaraka na ampitaina. Manantena aho fa ianao sy ny anao, dia manao tsara.
Anie ny fahasoavana sy ny fiadanana ho aminareo, rahalahy.
Heather Mahnke Worrell • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:31 aho • navalin'i
Izaho dia 32 taona vehivavy fotsy. Manazava fotsiny aho Trayvon ny tantara ny 12 taona vavy. Dia nanazava ny fomba tsapako momba azy rehetra. Namaky ny bilaogy ambony. Manaja anao, ary Izaho kosa dia mihevitra fa ity olana ity mila hodinihina. I mijery izany toy ny fanambadiana, amin'ny fomba… Raha izaho sy ny vadiko manana ady, miasa izany isika mandra-manana ny fahazavan-tsaina. Isika roa samy vatana, fa ny fanambadiana dia iray ihany isika (izaho sy ny vadiko), tahaka isika rehetra dia nataony tao sokajy, na tiantsika izany na tsy. Ampianariko ny ankizy fa tsy mampaninona loko, toetra no zava-dehibe, Na izany aza aho fa fotsy, ianao dia mainty ary tsy afaka hanova izany. Izy io dia ny marina momba ny tenantsika, tahaka izao ankehitriny izao aho manao akanjo lobaka mena ary raha mety ny olona rehetra nanao lobaka mena isan'andro, afaka atao nandalo izany rehetra izany, ho raisina mitovy amin'ny samy izy, ary hatao hoe “Lobaka Mena ny olona”, nefa izany tsy hitranga. Isika rehetra dia mila tonga amin'ny fahatakarana mikasika ny tsirairay toy ny amin'ny fanambadiana. Ady tokony raikitra, “Aza mandeha any am-pandriana tezitra”. Ny fifaninanana dia teo amin'ny ady ho ela loatra. Izahay mbola tsy tena tonga amin'ny fahatakarana, na nianatra mifanaja tanteraka… ankehitriny ny siny hoditra ny fihetseham-po no namely ny tsindry fetra ary isika mipoaka amin'ny irrationality. Ny firazanana mbola tsy tena nanambady tsirairay, dia azo lazaina. Fotoana hanambady… Ianao nanazava ao amin'ny bilaoginy ny antony efa-pihetseham-po vola ao amin'ny Trayvon Martin Case. Fa izao no tantara momba anao, ny rainao, ny raibe, fa efa fanavakavaham-poko profiled. Mamelà ahy hilaza aminareo fa, tahaka ny vehivavy fotsy, I hitondra ny olon-kafa tao pitandremana rehetra na inona na inona ny volon-koditra. I manidy ny varavarana, clench ny poketrako, sy ny ankizy matahotra ianao na iza na iza aho, mandeha eny an-dalambe lasa. Misy fotsy mampidi-doza nanolana, serial mpamono olona, fakàna an-keriny, sns. heloka bevava mitranga na aiza na aiza toy ny be toy ny misy na inona na inona volon-koditra hafa misy… Te-hanampy ny fiovana fo sy ny saina. Satria misy olona profiled, tsy manao izany mpanavakavaka. Satria misy marary ratsy biby goavam-be teo amin'ny isam-loko ary tsy maintsy mitandrina. Noho izany, raha nipetraka tany sambatra azo antoka izao tontolo izao izay rehetra tsara fanahy sy be fitiavana i, dia tsy mila miahiahy Heveriko, nefa izany dia tsy an-danitra. Hotahian'andriamanitra anie ianao, T.L. Fitiavana sy ny fiadanana anie ho aminareo.
Christopher Zavala • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:31 aho • navalin'i
Mieritreritra aho fa ny iray manontolo Zimmerman / Martin zavatra efa naneho ahy fa somary mora ho ahy ny mitsara sy marina ny olona mieritreritra fa ny sasany fotsiny “milalao karatra ny hazakazaka.”
Fa Manaja Trip. Ary te-hitondra am-po ny teniny, ary miezaka mba hitsapa alahelo sy ny zavatra niainany ny fomba fijery ny hafa. Mivavaka aho fa Andriamanitra dia hanitatra ny fomba fijery sy ny fangoraham-po. Ary mivavaka aho mba ny herin 'ny Filazantsara dia mampiray ny Fiangonana sy hanampy antsika rehetra mba hahita ny mombamomba ao amin'i Kristy fa tsy mandoko na fotoam-pianarana na ny firenena…
TJ • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:32 aho • navalin'i
Ianao mihevitra ho manana ho azy io dia mifototra amin'ny loko. No manadino nisy tanora lahy mainty namaky an trano izay nonina zimm? Izany nisy tsy misy ifandraisany amin'ny loko fotsiny noho ny azy.
Laura Merrone • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:32 aho • navalin'i
Eny, mamela mifindra eo sy mahazo izany rehetra izany aorianay ao. Na inona na inona nitranga tamin'izany andro izany, azonao mamela heloka sy manadino? Afaka isika rehetra “tia ny fahavalo” toy ny Kristianina na iza na iza mety ho? Afaka milaza amim-pahatsorana isika “famaliana ny Tompo” tsy ny antsika? Aho vehivavy fotsy hoditra, fa efa tamin'ny alalan'ny zavatra niainany sasantsasany ratsy ny tenako fa efa nahazo famelan-keloka noho izany amin'ny antoko rehetra anjara. Mila fanasitranana ny firenena tsy mihoatra ranomaso. Arakaraka ny mamela, ny tsara kokoa isika, dia ho afaka ny fanavakavaham-bolonkoditra sy fihetseham-po dia halazo. ankehitriny, raha Al Sharpton sy ny haino aman-jery vaovao, dia hitsahatra mitondra ny zavatra rehetra izany, ary eo am-piandohan'ny ny fery, isika dia ho tsara rehetra…
Sophia • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:32 aho • navalin'i
Wow! Tena mamelombelona mba hihaino Fanjakana fomba fijery momba ity olana ity. Tratry ny ananany izany isika nofonosiny ao mifamaly amin'izy samy izy, fa manadino ny manontany amin'Andriamanitra zavatra mieritreritra. Tsy manadino fa ny valiny dia efa ao ny teniny. Tsy manadino fa tokony hatoky dia tsy misy olona na inona na inona, fa Azy. Farany, dia manadino fa ireo izay mikatsaka Azy, dia ho ireo izay mahita ny fahamarinana.
Fanavakavahana dia tena olana eto amin'ity firenena ity. Fa zavatra iray izay tsy afaka mihazakazaka avy, fa tsy maintsy miatrika sy fiovana. Tsy maintsy ho fantany fa tsy afaka manova ny tsy misy an'i Jesoa Kristy. Fanavakavahana dia zava-misy izay hita taratra eo amin 'ny rafi-pitsarana, amin'ny fomba samy mieritreritra, ary ny fomba hitondrantsika ny hafa. Mandra-lolompo dia niala am-pontsika, ny fanavakavahana foana ny miditra eo amin 'ny fanapahan-kevitra. Ny lasa dia ho lasa, rehefa tsy misy intsony ankehitriny amin'ny hoavy. mandra dia, dia azo antoka fa tsy tokony handroso amin'ny.
Karla hazomalahelo • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:32 aho • navalin'i
miala tsiny, Nohazavaiko fa mafy! Efa very mikasika, nefa tsy noho ny firazanany!
Karla hazomalahelo • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:33 aho • navalin'i
Amen Trip. Antsasaky ny Kolombiana aho, antsasaky anglisy, fa mora ho ahy tahaka Ahy fotsy, Nanan-tsakaiza aho nandritra ny fotoana kelikely izay neo natzi avy any Irlandy. Tsy tonga saina aho antsasaky ny Kolombiana nandritra ny fotoana ela. Rehefa tonga saina ny finoany, Nolazaiko taminy aho antsasaky ny Kolombiana, tsy nety nino ahy. Nanana nanana mainty hoditra aho, izy fa tsy ho lasa namako tany am-boalohany. Ary nitoetra namana amiko. Manantena aho fa Andriamanitra nampiasa izany mba hanova ny fomba fijeriny, efa nanomboka very mikasika ny alalan 'andro isan' andro ny fiainana, nefa tsy noho ny volon-koditra. Tsy afaka an-tsaina ny fomba mampanaintaina sady manimba tokoa ny ho lalandava hotsaraina araka ny loko ny hoditra. Zanako tia 116. Izy ihany efatra sy tsy manan-kevitra ny fanavakavahana mbola. Misaotra anao amin'ny foko manontolo aho noho izy lehibe modely ho roa zanako. Raha ny ny efa-taona dia voakasika, ry zalahy mitovy rappers izay tia an'i Jesosy, ary tsy azo antoka :)
Kay • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:02 PM • navalin'i
Arakaraka ny mamaky sy mandre momba ny Trayvon Martin raharaha. Arakaraka ny mahatsapa fa ny ankamaroan'ny tsy afaka mijery izany avy amin'ny zava-misy / fomba fijery tena nisy. Matetika isika no mijery ireo toe-javatra amin'ny alalan'ny skewed family izay mitondra entana avy ny lasa. Miteny toy ny vehivavy izay lehibe-raibeny mpifindra monina tsy ara-dalàna dia avy any Meksika, nefa efa fanamby Kristy mba hanaiky ny fahamarinana, tsy ny fahamarinana “I” hahita izany. I Kristy manontany fa nanokana ny maha-ao anatin'izany ny foko, firaisana ara-nofo, anaram-piangonana firehana, sns (Galatianina 3:28), mba hahita ny izao tontolo izao amin'ny alalan'ny ny family 'i Kristy…izay maneho ny fahamarinana rehetra.
Trayvon Martin, araka ny namany Rachel Jeantel George Zimmerman fanavakavaham-poko profiled niantso azy “Mampatahotra ny ** cracke,.” ary avy eo dia nanao tamin-kabibiana fanafihana GZ. Fantaro, Izaho tsy mba miaro Zimmerman satria nandray ny lalàna tao an-tanana, izay nifarana tamin'ny maty i Martin. Ny olana amin'ity raharaha, no ny zava-nitranga dia matetika nomena ny vitsy an'isa ho an'ny fanehoan-kevitra sy ny fihetsika mpanavakavaka. Ny marina amin'ity tranga ity dia ny hoe na lahy na dia avy tany andalana ao amin'ny fitondran-tenany ny hafa, nefa TM mahazo ny mandalo, satria izy lehilahy loko. Miala tsiny aho fa Andriamanitra no tsy manaja izany fisainana, satria izy no manolana hevi-sady efa nivadika.
Koa na lahy na dia diso amin'ny fomba namaly samy, nefa dia miraharaha firy momba ny zava-misy REHETRA. Fotsiny isika miraharaha ny zava-misy izay tena manohana ny fomba te-hieritreritra.
Aho dia mahita fanavakavaham-bolonkoditra tena olana eo amin'ny kolontsaina, fa ny zava-misy dia tsy olana fotsiny fotsy, dia toy manjaka eo amin'ny olona ny loko koa. fanavakavahana, dia tsy hifarana raha mbola momba ihany isika momba ny “ny” olona. Tena mino aho izao no teny nampitondraina Martin Luther King Jr. nitory, eo anoloany dia voaloto ny tiany ny Al Sharpton & Jesse Jackson. Firaisan-kina sy ny maha iray ihany no mety hitranga rehefa tena lehilahy sy ny vehivavy mahita ny alalan 'ny family' i Kristy, satria toy ny Galatianina 3:28 manondro iray ihany izahay rehetra “IN” Kristy. Izaho manokana dia mino isaky ny nisafidy ny mihevitra ny tenantsika izany ivelan'ny rafitra, noho isika, na tsy nahy na fantatra fa hanangana sakana sy Mpizarazara. Fehiny Kristianina, fanavakavahana mahasakana aminao, raha mbola ianao hanaiky an'i Kristy ny tena fomba fijery. Raha tsy izany, ianao sisa amin'ny manamarina ny zava-misy diso izay mbola hanangana sakana eo aminao sy ny olon-kafa.
Mila manontany tena isika no mila ny fahamarinana, sa ve isika mahita ihany no mahaliana alalan'ny hevi-diso family, izay marina dia havana, ary ekena ihany raha toa ka mifanaraka an-rafitra?
Laron • Aogositra 20, 2013 amin'ny 4:35 aho • navalin'i
Ry rahalahy sy rahavavy,
Inona no mampalahelo ahy mihoatra noho ny zavatra no famakiana “ny sasany” ny fanehoan-kevitra mahafinaritra mametraka ity tranonkala, Sarotra ny mahita ny maha samy hafa ny eto, YouTube na toerana hafa izay ry namana tia miady hevitra fotsiny ny hevitra sy handroaka ny fahasoavana sy ny fiadanana. Na izany aza, fanehoan-kevitra tsara kokoa noho ny mahazatra. Inona no Trip niezaka mampita toa nahazo very tany ny ankamaroan'ireo fanehoan-kevitra.
Tahaka ny halavitry ny famonoana an'i Trayvon, Mariho ny fomba fotsiny ny efa tsy olona ny loko, indrindra fa ny mainty, izay tonga ao ny fiarovana ny Zimmerman. ankehitriny, ny zava-drehetra dia tsy maintsy atao amin'ny hazakazaka, fa ny zavatra atao tsy tokony mora niraharaha. Ny traikefa mainty hoditra tany Amerika dia tena downplayed. Nahoana? Tokony handresy Blacks fotsiny ny zava-misy fa ny razambeny dia fananan'ny lehilahy sy ny vehivavy eto amin'ity firenena ity? Tokony governemanta ny hoe fampielezan-kevitra ara-bakiteny niantso ny fanavakavahana azy ho adino? Tokony adinon'izy ireo fa ara-bakiteny ny Constitution nilaza fa izy ireo ihany no 3/5 ny lehilahy? Ny zava-dehibe mitovy, tokony ny olona izay tsy tena olona ny loko manadino hanao ireo zava-misy ihany ny Amerikana tantara toy ny hoe tsy mbola misy rafitra ny fampahoriana (Tsy profiling) fa nanatanteraka ny mainty mivantana fiaraha-monina sy ny vondrona vitsy an'isa hafa? Tena mora ny milaza ny olona ny hiatrika izany, na ny milaza Black fahombiazana, satria te ho hazakazaka hanimba ny fifandraisana amin'ny firenena mpanavakavaka ara-tantara ity. Fa raha ianao no misy mpanao soa ny fanavakavahana (na dia tsy nahy) ary tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny alalan'izany, ianao tsy maintsy manana fomba fijery hafa, ary indraindray aza miaro tena rehefa firazanana. Misaotra ny Tompo fa ny olona rehetra Kristy unifies. Fa mbola, fiangonana foana ny toerana segregated indrindra any Amerika. Misaotra anareo rehetra noho ny famakiana sy hotahiana.
thefollower • Aogositra 20, 2013 amin'ny 9:51 aho • navalin'i
Efa namaky ny alalan 'izany zavatra izany ny fanehoan-kevitra iray manontolo, kevitra, fiaraha-miory fanambarana. Izany rehetra dia nahatalanjona ahy ny fahiratan-tsaina sy ny zavatra niainany manokana izany rehetra izany. Toy ny tany am-piandohana hoy Trip aza mitsahatra miresaka momba izany, na izany aza, Tena aho antoka izy fa tsy midika miady hevitra.
Izaho dia 18 taona fotsy ankizivavy, namako akaiky indrindra dia 18 ankizivavy mainty taona, Tsy manana havana mainty, ny fiangonako dia tanteraka fotsy, Efa maro mainty namana, ary niasa tao amin'ny toby ho an'ny ankizy sahirana izay mihoatra noho ny antsasaky ny mpilasy dia mainty….Efa hitako ny fomba rehetra nanao ny sasany momba ny fiainanao mba hahatonga ny olona hahatakatra tsara kokoa toy izany ianareo dia vitsy ireo zava-misy mikasika ny fiainako…Nianatra aho momba ny olana ara-poko ary ny mampalahelo ahy dia nahatonga ahy very saina ampy rava ny tanany tsy punching zavatra, rehefa nandre momba ny ady ny olona sasany no nandia. ny ekena mba adala ny zavatra toy ny mamono olona, fanavakavahana, lainga, sy ny fihatsarambelatsihy, fa izany dia tena TSY ekena ny hitondra ny hafa amin'ny tsy fanajana sy 'i mahalala kokoa’ toe-tsaina efa hitako tamin'ny eto. Mba tsy fantatro iray manontolo betsaka momba izao tontolo izao sy ny tolona rehetra Fa samy fantatro avokoa zavatra vitsivitsy. Fantatro fa Voalohany indrindra Andriamanitra nahary ny olona mitovy sy toy ny namana ny olona amin'ny fanavakavahana tsaboina dia afaka ary tokony hifikitra ho azy ireo. Fantatro koa fa Andriamanitra no Mpitsara marina sy ny maro aminareo izay nandresy lahatra tamin'ny eto hoy ianao kristiana…mba mahalalà menatra… ity raharaha ity no nitondra nisara-kevitra toy izany, fa tsy tsy eo fotsy / mainty / Hispanika olona eo ny olona rehetra izay manao azy / izy no mahalala tsara kokoa noho ny olona rehetra izay tsy mitovy hevitra amin'izy ireo. Isika zanak 'Andriamanitra, irery ihany no tena mahafantatra ny zava-nitranga ny alina Treyvon novonoina, dia iza no tokony hilaza hoe iza no marina na diso?
John 8:7 Ary raha naharitra nanontany Azy ireo, dia nitraka Izy, ka nanao taminy hoe:, “Izay tsy nanota eo aminareo, dia aoka izy aloha nitora-bato azy.”
Tsy hihaino aho mba hilaza aminareo ny heviny momba ny raharaha, izaho anefa mbola tsy mihaino hitsara anao. Nahatsapa aho voatery hampahatsiaro anareo izay tsara, na ratsy isika dia nantsoina ho tia olona sy kevitra fa tsy ho tia tena ny avonavona ny fandresena ny tohan-kevitra izay tsy antsika mba handresy. John 8:7 tonga ao an-tsaina ao anatin'ny folo fanehoan-kevitra voalohany ary nijanona tany hatramin'ny farany. Raha toa ianao handeha hiady hevitra hanao izany amim-pitiavana, na, indro misy mampihomehy hevitra, Raha fantatrareo fa tsy afaka miady hevitra amin'ny fomba izay mbola manaja AZA miady hevitra! Fa tsy anjarantsika mihitsy ny manameloka na iza na iza hafahana sy tamim-pahatsorana ny idiotic hanao zavatra toy izany. Misaotra anao naka ny mitsangana sy ny fizarana ny heviny! Hoy aho hoe, toa aho antoka fa ianao sy ny manan-tsaina rehetra mahafinaritra ny olona, ​​fa raha toa ka tsy mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra na dia amin'ny alalan'ny hevitra ny antony eo amin'izao tontolo izao dia ny olona no mihevitra Kristianisma no mendrika rehefa tsy manao hafa noho ny sisa amin'ny izao tontolo izao?
izany • Aogositra 20, 2013 amin'ny 11:31 aho • navalin'i
Isika mpino, Mpihazona ny endriky ny Tompontsika, dia Jesosy Kristy, ny olona izay mahatakatra fa isika sy ny vahoakako no meloka, mpanota, voavotra ihany ny fahasoavan 'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy, izay nandray ny fahatezeran'i ny Ray, noho ny fahotana, teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika. Inona no manana tsy misy fahamarinana? Ny marina dia tokony ho izay mitantana ity resaka, tsy kevitra. Ny tantara dia milaza ny tantara sy ny manome ny valiny raha vonona ny ho marin-toetra.
Tsy dia manome ny maha ara-poko. Satria ilaina ny fifanakalozan-kevitra ity. Izaho tia ny Tompo, ary ny olona izay nianatra lalàna, ny rariny, sosiolojia, sy ny fampiharana ny lalàna.
Jereo ny zava-misy sy ny by MediaWiki. Ny American rafi-pitsarana dia lavitra colorblind. Ratsy izy reeks ny fahotan'ny fampahoriana, miangatra, sy ny faharatsiana. Classism dia be toy ny anton 'izany toy ny fanavakavahana dia. Fa milaza fanavakavahana tsy misy, na tsy mitana anjara tamin'ny vokatry ny tranga ity, dia fahadisoana. Izany dia hevitra izay mifidy ny tsy mahalala ny tantaran'ny tanteraka ny rafi-pitsarana izay manohana ny zavatra te ho marina.
misy fanavakavahana. Tena velona sy salama tsara sy mavitrika.
Soa ihany, isika manompo Andriamanitra, izay mahalala ny zava-drehetra. Iza no mahery ny hanasitrana ireo izay vao handefa Azy. Iza no mendri-pitokisana mba hanasitrana-mangidy sy ny lolom-po. Ary iza no nanome antsika hery amin'ny alalan'ny vavaka sy ny asa.
Mpianatra ny zanakao amin'ny fahamarinana. Ny marina dia ny hazakazaka ho anisan'ny ny maha, (ary ny mamaritra ny fomba ny olona sasany no mihevitra azy ireny) Fa raha mbola velona koa izy.
Voninahitra ho an'Andriamanitra, izay toa tsy iza no olona no.
PastorNorm • Aogositra 24, 2013 amin'ny 10:35 PM • navalin'i
Ny zavatra Mino aho fa tian'Andriamanitra hanao izany zava-nitranga sy ny olona hafa rehetra isika mbola handre momba no Trip nanao hoe:. Mivavaha ho an'ny antoko rehetra mandray anjara ny na hovonjena avy amin'ny zava-nitranga na hahazo tsara raha toa izy ireo Kristianina. Inona ny rehetra no hita dia ny hoe Andriamanitra Mahery Indrindra atao hoe Trayvon ny isa na inona na inona antony Nanana. Tsy nisy olona handeha hiova fa io alina io. Andriamanitra nanao hoe:, “Trayvon, dia ny ho anao” araka izay nataony ho Tupac sy ny maro hafa. RAHA Trayvon dia voavonjy, voninahitra an'Andriamanitra izy izao amin'i Jesosy. Raha tsy, Mampalahelo fa dia may any amin'ny helo. Tsarovy, Mpito. 12:13 ” Ary rehefa re ny famaranana ny zava-drehetra: Matahora AN'ANDRIAMANITRA, sy mitandrina ny didiny: fa izany no tokony hataon'ny olona rehetra.
muchneededmoderator • Septambra 24, 2013 amin'ny 5:04 PM • navalin'i
I niditra ity tranonkala, vakio ny bilaogy isan-karazany izy ka nahazo toky namoaka ny lahatsoratra isan-karazany raha tsy tonga amin'ny anankiray. Ny fanehoan-kevitra eto ambany kofehy izay taorian'izay Sady fahoriana entin'ny mampanahy sy ny fo. Fa tsy mamaky tony tsara ny andro, marary, Andriamanitra hendry sy fanehoan-kevitra mifantoka, I tampoka hita rotidrotiky ny tenako toy ny lasa adala ny fanavakavahana sy ny fankahalana. Ary izany rehetra izany ny Kristianina izay lazaina fa toa mihevitra fa mety ny hilaza ny tsirairay izay, na dia tsy Kristianina na tsia, ary ny vavaka dia tonga ny salohim-bary 'Andriamanitra, na araka ny Marvin nataony: “…ny vavaka dia tsy mety ho lasa izany ny valin-drihana.” Maro aminareo no milaza foana fa ianao no tsy eo ny fanafihana ary tsy maniry ny hanafintohina na iza na iza, fa fotsiny manana ny heviny manokana sy ny eny, matanjaka izy ireo. Fine, Isika rehetra dia manana ny heviny manokana sy mahatsapa mafy isika rehetra eo amin'ny olana sasany na tsia no ahitantsika ny hafa izay manaiky. Izany no zo sy ny fahafahana izahay, Efa tahaka ny Amerikana hankafy sy manantena aho fa ny tsy nalaina avy amintsika. Fa tsy tapaka hafa bash rahalahy na anabavy ao amin'i Kristy sy hitory amin'ny tsirairay toy ny hoe ianareo mahalala tsara indrindra madio fihatsarambelatsihy. Isika Kristianina tokony hahafantatra tsara kokoa noho ny olona fotsiny fa isika olombelona, dia manao fahadisoana, isika manao zavatra mpirehareha ny avonavona, isika jamba ny olana sasany fotsiny ny amin 'ny fahotana, ary na dia miezaka mafy isika, blinders ireo ho eo foana isika, satria efa lavo, mpanota, olona. Zava-Noho izany antony izany fa Andriamanitra no Mpitsara antsika. Tsy ny hevitra manan-danja, ary ho an'Andriamanitra sy ny irery. Hanao zavatra toy izany ny hafa mankany amin'ny hatefully nefa miantso ny tenanareo “rahalahy” dia amin'ny tsara indrindra Mampalahelo.
Marvin, hanao ny marina aho mba tsy mamaky mikasika ny antsasaky nidina ny lahatsoratra, satria fotsiny hoe tsy afaka kibony ny fomba mbola hitsaboana ny “rahalahy sy anabavy” andro rehetra nitoeran'i mifikitra ny basy, lasa bebe kokoa Naniry ary avy eo dia milaza fa tsy tezitra ianao. Vakio ihany Lahatsoratra, tompoko. Na Miombon-kevitra aminao aho na tsia dia tsy olana, ny zava-dehibe dia ny fomba hitondrana ny rahalahinao. Vakio ny alalan 'ny Lahatsoratra, ianao teo akaikin'ny lavitra (fara faharatsiny, mandra intsony aho namaky mikasika ny teo antenatenan'ny) indrindra mikorontana olona izany lohahevitra. Ianao milaza ny hafa izy ireo tsy manan-jo hilaza aminao ny fomba fivavaka ary dia milaza fa Andriamanitra dia tsy mihaino ny vavaka. Iza no mba soso-kevitra toy izany? Tsy Andriamanitra ianao. Hidina hiala amin'ny seza fiandrianany, ary avy eo ny rahalahy miteny amin'ny fitiavana, fa tsy manam-paharetana sy ny fahatezerana.
Fanavakavahana no ratsy tarehy sady hitako fa na aiza na aiza ary mandrakariva. Halako izany noho ny antony maro samy hafa sy tamin'ny ambaratonga samy hafa maro. Fa tsy hisy fanasitranana aretina ity mandra-pahatongan'izany rehetra lafiny manaiky fa misy ny fanavakavaham-bolonkoditra na inona na inona loko ny hoditra izany ary tsy ny olona rehetra mankahala ny hafa, satria fotsiny hoe ny hodiny, na ny kolontsaina maha samy hafa ny. Amin'ny maha-Kristianina Tena malahelo aho mahita ny fomba fanavakavahana efa nampihatra ny mpiara-manompo. Malahelo aho fa tsy maintsy mahita ny “mpanavakavaka” manodidina rehetra jorony sy marina mieritreritra fa olona mpanavakavaka, satria ny hoditra no fotsy. Tokony hahita ny Kristianina hafa maro loko sy ny kolontsaina. Aza nikiakiaka “mpanavakavaka” amin'ny samy izy sy milaza fotsiny “rahalahy”. Hitako kokoa ny fanavakavaham-bolonkoditra lasa olana isan'andro, satria fotsiny lafiny iray na ny hafa fitarainan'ny “mpanavakavaka” nefa tsy mahalala ny olona dia miresaka. Raha hitanao misy rahalahy na anabavy manao amin'ny mpanavakavaka lalana avy eo amin'ny fomba rehetra miresaka azy io, ary miresaka izany olona, manokana. Fa nitomany amboadia intsony, raha tsy misy amboadia.
Mifankatia toy ny nitiavan'i Kristy ny fiangonana. Izany rehetra tokony hotadidintsika raha ny rehefa mifandray amin'ny hafa.
miresaka momba: Tsy Amin'ny Hitan'ny Maso, Tsy amin-Fampiononana: Ny famporisihana ho an'ireo ny firotsahan'ny Fiangonana : Eo am-baravarana